Sheeko Gaaban | maktabadda | Af-Soomaaliga
21/05/2014 Sheeko GaabanCabdullaahi Jannomaamule
Magaceyga kuuma sheegayo. Waxaadse ii taqaannaa si qoto dheer. Si ka qoto dheer aqoonta aad adigu isku leedahay. Qabiil aanan ku jirin wuu yar yahay. Waxaan kuu ahay xiddig. Waxaad ii tahay laheyste. Danahaaga ayaad igu aamintay. Oo ammaan iigu dartay. Mowqif iyo mabda’ ma lihi—oo daneyste ayaan ahay. Nasiib wanaag, waa adiga cidda magac iyo karaamo ii yeeshay. Waa adiga cidda aan awrka ku kacsado. Ku daneysto. Haa, waa adiga shacabka ah cidda i garab taagan. I buunbuuniso. Ii doodda. Geesinnimo aanan anigu laheyn igu abuurtay. Waa adiga shacabka ah cidda magaceyga faafiso. Sheegsheegto. Faaniso. Waddani iigu yeerto. Geesi iigu yeerto. Mujaahid iigu yeerto.
Alleylehe waxaa jiro kuwo caqli leh, oo si dhab ah u og inaan ahay tuug. Qaa’in. Beenaale. Dilaa. Dagaal-ooge. Qabqable. Daalim. Misana way isaga key hiilliyaan. Way ii nacamleeyaan. Way ii sacabo-tumaan. Way ii jidboodaan. Ii geeraaraan. Sawirro ila galaan. Oo caleemo qoyanna ii lulaan. Ogow, iskama abuurmin. Waxaa i abuuray shacabka. Oo i naaxiyay. Oo aan ku tiirsanahay. Waxa ayna shacabku nafaqo iiga dhigaan xasadka iyo dulmiga. Markaasaan sii dhiirradaa aniguna.
Nasiib darro, anigu kuma soo shaac bixin siyaasad wanaag iyo qaran dhisid. Hawlahaasi aqoon uma lihi. Anigu waxaan ku soo caan baxay inaan huriyo colaad. Inaan adeegsado ereyga looma dhamma. Inaan xasdo oo farta ku fiiqo xumaanta qabiillada kale. Inaan ku gooddiyo oo gurbaanka u tumo colaad sokeeye.
Ma kuu sheegaa wax iga yaabshay? Waxaa iga yaabshay inaad ii hiillisay. Oo aad ii soo qaaraantay. Oo aad curadkaagii labaatan jirka ahaa ciidan iiga dhigtay adigoo og inaan qabri u wado. Adigoo og inaan duur cidlo ah kaga carari doono dhaawaciisa. Adigoo og in meydkiisa ay haaddu feenan doonto. Adigoo og inaan daneyste ahay oo aanan kala jecleyn wiilka ii dagaallamayo iyo xaar-walwaalka. Miskiin! Illeyn sagaaro ima barato.
Nasiib wanaag, iskuma xishootid. Oo ma waantoowdid. Oo caqliga kama shaqeysid. Oo weliba adigoo og inaan shalay duur uga soo cararay dhaawacii wiilkaaga ayaad misana maanta walaalkiisii ka yaraa ciidan iiga dhigeysaa. Oo sabab? Ma caqligaad la’dahay? Haddii aan shalay wiilkaagii dagaal u kaxeeyay, maad i yureysid? Oo ila xisaabtantid? Maxaad iigu hibeynaysaa wiil kale? Soo hooyo ma foolan? Soo isaguna uma laqman doono sidii walaalkiis shalay? Maya, caqliga ma li’id. Ee qalbadda ayaad la’dahay. Qalbadda? Sidee?
Halkii aad aniga ii caroon laheyd, oo aad igu eedeyn laheyd dhimashada wiilkaaga, waxaad caro iyo cuqdad u sii qaadeysaa qabiilkii uu wiilkaagu la dagaallamay. Waa sidaan rabayee markaasaan aniguna sii dhiirradaa. Oo idaacadaha ka dhaartaa. Oo colaad cusub huriyaa. Oo durbaan dagaal garaacaa. Saa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar kunaad ayaad wiilashaada iiga dhigtaa ciidan. Weliba adigoo raalli ah. Miskiin. Laheystayaal weligood ma xoroobaan. Anigu kama daallo inaan colaad huriyo, adiguna kama daashid inaad iigu taageertid. Oo xaggee iiga hareysaa? Miyaadba iga hari kartaa? Fiqi tolkii kama janno tago—waa murti Soomaaliyeed.
Bal eeg, qasaare waxaan aheyn igama dheeftid. Halkii aan Soomaalida isku keeni lahaa, aniga ayaa sii kala didiya. Halka aan qaranka dhisi lahaa, waan sii kala furfuraa—ama aan siyaasad ku kala furfuro ama aan qori ku kala furfuro. Halkii aan wax ka qaban lahaa barakacayaasha xerooyinka daadsan, aniga ayaaba abuuro barakacayaal cusub. Idinka shicibka ahina waad igu taageertiin. Keliya waxaa un idiin muuqdo nabarka aan gaarsiinayo qabiil kale. Hayeeshee ugu danbeyntii cidda uu wiilku ka dhintay waa adiga. Cidda ay degmo ama tuulo ka gubatay waa adiga. Cidda ay lacag iyo waqti ka luntay waa adiga. Miskiin laheyste ah. Markii aan arko inaad baabah ku noqotay colaad aan dan ku watay, waxaan ka hadlaa idaacadaha. Oo aan beesha caalamka ka baryaa in ay gargaar u fidiso barakacayaashiinna. Markaasaad halkii aad ila xisaabtami laheydeen ayaad iigu deeqdaan ammaan iyo bogaadin ku aaddan hadalka aan
idaacadda ka sii daayay. Markaas ayay rajo cusub i soo gashaa. Rajo ah in weli aad laheystayaal ii sii noqon kartaan. Ebed.
Bal eeg qasaarooyinka aan idiin geystay gudaha iyo qurbahaba. Weligaase ma is weyddiisay dhibta aan kuu geystay adiga shicibka ah?
Kow, qaxooti ayaan ka dhex abuuray dalkii gudihiisa. Caruur iyo cirroole ayaa barakacayaal ku ah xerooyin dalka gudihiisa ku yaallo. Waa dad Muslimiin ah. Misana Soomaali ka sii ah. Waxaad oggolaateen in ay dadkaasi beylah u noqdaan cudurro, dhaxan, gaajo, roobab, iyo kufsi. Kamana danqataan.
Labo, dalkii ayaan curyaamiyay dhan walba. Oo dunida ka reebay. Magac-xumana u soo jiiday.
Saddex, dhallinyaradii ayaan ku qasbay inay tahriibaan maadaama aan ka burburiyay dalkoodii.
Afar, dhallinyartii aan u qixiyay qurbaha waxaa qaar lagu addoonsadaa Yemen; qaar waxaa lagu laayay Liibiya; qaar badda ayaa liqday; qaar waxaa lagu gubaa South Africa; qaar waxay ku jiraan xabsiyada Giriigga; qaar kalena ku dayacan yihiin waddooyinka dalka Talyaaniga. Waxaan idin gaarsiiyay heer aan idinku sharfo in la yiraahdo xeryaha qaxooti ee dunida ugu weyn ee Dhadhaab waxaa deggan Soomaali. Kolleyba waan ogahayoo ceeb idinma karto. Indhihiinnu waxay ku sii jeedaan xifaaltan qabiil iyo iska dhici reer hebel. Ishiinu ma qabato meel shishe—meel sokeeyena ma dhaafto.
Shan, waxaan diiday inuu dhasho qaran Soomaaliyeed. Waddankiina waxaan ka dhigay bahalo-galeen illaa ay abuurantay al-Shabaab oo dhulkii fasahaadisay iyo shisheeye miirtay kheyraadkii dalka.
Lix, waxaan qiimo-beel ku riday dadnimadii muwaadinka Soomaaliyeed. Bal eeg, markuu qaran helay ayuu Cabdi Bile wacdarro ka muujiyay tartanka oroddada adduunka. Bal eeg, markuu qaran helay ayuu Mo Farah guul u soo hoyay dalka Ingiriiska. Bal eeg, markuu qaran helay ayuu Magan Daahir Yuusuf wacdarro ka muujiyay ciyaaraha kubadda miiska ee dalka Holland. Dhallinyaradaas guusha waxaa ugu wacnaa dowladaha ay ku tiirsanaayeen, kuna hoos noolaayeen. Taas caksigeeda, bal eeg dhallinyaradii Soomaaliya uga qeyb-galay ciyaarihii oroddada Olimbikada ee 2012 iyo London. Bal eeg ciyaarihii Olimbikada 2008 iyo China. Dhallinyaradii mataleysay dalka Soomaaliya waxaan ka dhigay dad lagu maadeysto. Qaran soo saaro ma’aysan heysanin. Anigaa u diiday—idinka shacabka ahna waad igu garab gasheen. Kuna mahadsanidiin.
Todobo, waxaan ku guuleystay in dalka Soomaaliya uu noqdo dal ay daashadeen gaajo iyo jahli. Dhallinyaro badan ayaan mustaqbalkooda mugdi geliyay. Xitaa kuwii waxbarasho helayna waxa aysan helin tacliin tayo leh oo gaarsiisa heer ay ku fikiraan. Ama ay ku hantaan aayahooda.
Dhibaatooyin intaa ka badan ayaan si toos ah iyo si dadban ugu geystay dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Welina waad i garab taagan tihiin. Oo i rabtaan. Qiilna ii bixisaan. Cajiib!
Waa su’aalee, miyuusan idinku jirin shaqsi fariid ah? Qof fariid ah oo iga qabta dulmiga aan idinku hayo? Dulmiga aan ku hayo naftiinna? Maalkiinna? Iyo magaciinnaba? Maad eegtaan sida aan dunida idiinkaga reebay? Oo aad uga harteen faciinna? Oo dhashiinna ay rubuc qarni dib u dhacday? Maya, maba idinka filayo inaad fahantaan dhibka aan idinku hayo. Ma idinkaaba awoodi karo inaad i qabataan? Ila xisaabtantaan? Miskiin. Dad laheystayaal ah awood ma leeyihiin? Dad uu qalbigu xasad la miriray dantooda ma gartaan? Aayahooda ma ceynsadaan? Karaamo ma yeeshaan?
Habraha iyo odayaasha waaba gartayee, maxaan ku mutay inuu ii hiilliyo wiil dhallinyaro ah? Oo labaatan jir ah? Bal eeg, iskool uma dhisin. Shaqo uma abuurin. Ceel uma qodin. Nabad uma oggoli. Tahriib kama baajiyo. Qaxootinnimo kama badbaadiyo. Reer iyo guri uma dhiso. Karaamo iyo magac uma yeelo. Waa nasiib wanaaggeygee maxaan ku mutay hiisha dhallinyarada? Shalay walaalkiis ayaan dagaal uga soo dilay. Maantana isaga ayaa ciidan ii ah—oo i garab taagan.
Waa sidaan sheegayoo aniga ayaa nasiib wanaagsan. Oo nasiib u helay shacab aan ila xisaabtamin. Shacab i kaalmeeyo. Shacab keliya un arko wixii aan farta ugu fiiqo oo ah reer hebel aynu iska dhicinno. Intaas un ayay ku qancaan. Oo igu daba feellaan. Igu boqraan. Ima dhahaan cisbitaallo inoo dhis. Ima dhahaan jaamacado inoo dhis. Ima dhahaan shaqo noo abuur. Ima dhahaan amniga noo adkee. Dantoodana iguma soo qaadaan. Fiicanaa! Su’aashu waxay tahay, qof laheyste ah miyuu khiyaar leeyahay? Iyo talo? Iyo cod?
Ogow wiilasheyda midna kuma dhinto dagaalka. Wiilal kale ayaan sidii xaabada ku guraa colaadda. Markaasaan misana dhaawacooda cisbitaalka ku booqdaa anigoo taay iyo suut madow xiran. Oo aan isku soo sawiraa. Oo aan isaga dhigaa hoggaamiye danqanaya. Ka dibna waxaa abaal-gud la iiga dhigaa jago. Oo waxaaba la sii qiraa jiritaankeyga. Oo waaba la i sii aqoonsadaa. Miskiin fowqal miskiin. Illeyn sagaaro ima barato.
Xildhibaan noqdayaa, jeneraal ciidan noqdayaa, wasiir noqdayaa, madaxweyne goboleed noqdayaa, madaxweyne qaran noqdayaa….shacabku iima waayaan jago ay igu abaal-gudaan. Alla maxaad riixdeen mid fariid ahaa oo wax idin tari lahaa. Oo watay fikir qaran iyo badbaado dad. Wiilka idinkaga dhinto colaadda, gabadha la kufsado, cirroolaha barakacayo, iyo agoonta macluusha ah ee indhuhu uu duqsigu ka leefayo waxaad ka jeceshihiin anigoo jago helo. Deeqsinimo idinkama ahanee xumeynta qabiil kale ayaa idiin muuqdo.
Bal eega, waxaad maalin walba maqashaan in xilka uusan qof walba u qalmin. Nebi Muxamed calayhi salaatu wasalaam waa tuu mar asxaabigii Abuu Dar ka reebay inuu jago qabto. Wuxuuna nebigu sabab uga dhigay in asxaabigaasi uusan ka bixi karin hawshaa culus. Idinka shacabka Soomaaliyeed ahna aniga oo qabiiliiste daalim ah ayaaad xil aanan u qalmin iigu abaal-guddeen idinkoo ku xumeynaya qabiil kale. Maxaa taa ka dhashay? Waxaa ka dhashay inaad laheystayaal ii noqotaan. Dunidana ka hartaan. Bil xaqiiqan, anigoo kale dunida waxaan ku jiraa cisbitaallada waallida ama xabsiyada aadka loo ilaaliyo. Soomaaliyase boqor ayaad iga dhigteen. Kii fariidka ahaana gablan ayaad ka dhigteen.
Shacabka Soomaaliyeedow waxaad i siiseen fursado aan dunida laga helin. Fursado aan laga helin meel sharci iyo kala danbeyn ka jirto. Fursado ayaad i siiseen uu qaa’in anigoo kale ahi ku naaxo; kii daacadda ahaana uu wax ku seego. Aqoonyahanka ila shaqeysto ayaan ka maqlay iyagoo hadal haaya nin la yiraahdo George Herbert. Wuxuu ninkaasi yiri: colaaddu tuugo ayay abuurtaa; nabadduna way daldashaa (war creates thieves, peace hangs them). Nasiib wanaag, aqoonyahanka ila shaqeysto aniga way i daahiraan, oo danbi-laawe iga dhigaan. Waxayse tuugo u yaqaaniin rag kale oo qabiillo kale ka dhashay. Fiicanaa!
Madaxda ajnabiga ah ee ku nool dunida kale, waa ka qatan yihiin nasiibka aan ka helay shacabka Soomaaliyeed ee casrigaan. Bal eeg, aniga cid ila xisaabtanto ma jirto. Madaxda dunida hormartay waxaa la xisaabtamo shacabkooda. Oo yiraahdo aan ku doorannee caruurta iskoollo ma u dhistay? Caafimaadka tayadiisa sare ma u qaadday? Shaqooyin cusub ma abuurtay? Jidad cusub ma dhistay? Caddaaladda ma hormarisay? Cadowga qarankeenna ma naga difaaci kartaa?
Anigase shacabkeygu waxay ku mashquuleen reer hebel wallee xabbadda ayaa taqaan. Reer hebel hala iska qabto. Markaasay aqoonyahankii, wadaaddadii, abwaannadii, weriyayaashii, odayaashii, iyo dhallinyartii igu daba feelaan. Aniguna waa sidaan rabayee fitnada ayaan sii huriyaa. Oo buunbuuniyaa. Oo aan idaacadaha ka dhahaa looma dhamma ama ku marmarsiyoodaa ereyada rabitaanka shacabka. Sidaas ayaana garab ku helaa. Kuna hantaa laheystayaal dhoohanayaal ah. Masaakiin. Laheystayaal aan ila xisaabtamin. Ha hilmaamin, anigoo kale waxaa laga helayaa badi qabiillada Soomaaliyeed. Oo aan u ahay halyeey iyo hoggaamiye.
Kaaga sii daranee uma baxsataan badi aqoonyahankii qurbaha wax ku soo bartay. Qarankana way gabeen. Aqoonyahanku waxay u kala baxaan saddex qeybood. Kow, kuwo qabiil igu taageero oo aan dalka anficin. Labo, kuwo aqoontooda ku shaqeysto, oo aan faraha ila soo gelin—xaqana u hiillin, dulmigana ka dhiidhiyin. Saddex, kuwo ka faanay sheegashada magaca Soomaali oo ku dhex milmay qowmiyado kale. Halhalkoo fariid ah wuu jiraa oo jecel dalkiisa inuu anfaco. Hayeeshee wuu harqaday. Oo ku harqaday mowjadaha shacab diiddan waxqabadkiisa. Shacab uu ka lumay qiyaaskii qarannimo iyo miyirkii Soomaalinimo. Fariidkaas aniga ayaa ka hortaagan inuu soo galo arrimaha Soomaaliya—adiga shacabka ahna waad igu taageertay hawshaas.
Bil xaqiiqan, waxaan ogaaday in beel iyo beled la dhiso waxaa ka sahlan in beledka la burburiyo, beelaha degganna la barakiciyo. Ogow sidaas waa sidaan rabay waayo anigu maba aqaan sida wax loo dhiso. Shacabku waxay laheystayaal iigu yihiin inaan mar walba u abuuro xasarad iyo colaad cusub. Oo aan qabiillo kale faraha ku fiiqo. Oo aan eedda dusha uga rido meelo kale. Markaaseey i aamminaan. Ii nacamleeyaan. Maxaase iga galay? Danteydu waa un jago iyo dhuuni hel. Maxaa iga galay wiilka dhimanaya? Murti Afrikaan ah baa oraneysay: haddii aad aragtid oday ku dul fadhiyo maqaar shabeel, ogow waxaa shabeelka u soo dilay wiil dhallinyaro ah. Qaran burburay maxaa iga galay? Jago un ii sheeg. Kursi. Kursi. Kursi.
Ogaada Soomaaliyeey, daaro burburay iyo dhaqaale hoos u dhacay kuma koobna qasaaraha aan idin gaarsiiyay. Maya, intaas wuu ka qoto dheer yahay. Waxyaalaha aan ku guuleystay waxaa ugu weyn waa inaan kala dilay, oo isku diray, oo aan naceyb iyo colaad dhex dhigay shacab isku af ah. Isku diin ah. Isku diir ah. Dunidu way ku diimaan oo ay ku faani lahaayeen haddii ay heli lahaayeen shacab annagoo kale ah. Hayeeshee anigu waxaan ku guuleystay inaan baabi’iyo oo ay Soomaalidu ku kala tagto wixii qaaska u ahaa shacab ahaan oo ay ugu weyn yihiin afka, diinta, dhaqanka, iyo muuqaba. Cajiib. War miyuusan idinku jirin qof fariid ah oo i qabto? Way jiraan fariid iyo fariidad. Hayeeshee adiga shacabka ah ayaa u diiday hoggaanka—anigana igu soo daba feelay. Qaar fariidka ka mid ahna waxaadba u dishaan aano qabiil ama fatwo shabaab. Miskiin.
Dr. Calaawi oo ah caalim Soomaaliyeed ayaa mar la weyddiiyay sababka ay Soomaalidu isugu baaba’day. Run badanaa, bal eeg jawaabtiisa: “Dadka kale waxay doondoonaan waxay KU HESHIIYAAN; annagu Soomaali haddaanu nahay waxaan doondoonnaa waxaan ISKU DIIDNO”! Waa runtiisa—waa aniga cidda ku guuleysatay kala dilka ummad isku af iyo dhaqan iyo diin iyo muuqba ah. Wada-hadal iyo xal waaro waxaan ka jeclahay colaad iyo xasarad iyo jahwareer. Sababtu waxay tahay haddii nabad la helo, dadku way miyirsanayaan. Haddii ay
shacabku miyirsadaanna waxay ku baraarugayaan inaan anigu ahay cadowgooda koowaad. Labaad. Saddexaad…..iyo kunaadba.
Anigu buugaagta ma akhriyo—xitaa si saani ah wax uma qori karo. Hayeeshee aqoonyahan baan ku tiirsanahay. Intaas way i ag joogaan, oo iska kay dhisaan. Oo jago igu gaadayaan. Qaar baa buugaag waaweyn intaas xambaarsan. Mararka qaarkood waxaan maqlaa iyagoo ka sheekeynaya buugaag la qoray. Bal aan dhowr ka soo qaato. Iska kay dhageyso kolleyba uma maleynayo inuu buug ku beddeli karo. Waa sir lid igu ah. Hayeeshee misana kuguma ogi dadnimo iyo karti aad heeryada ku saaran isaga riddid. Bal ila arag buugaagta aan ka maqlay aqoonyahanka daba-dhilifka ii ah.
Buuggii Dagaal Waa Ka Dare (2004) ee Yaasiin Ciise Wardheere ayaa idin waaniyay. Wuxuu idin yiri dadku waa saddex nooc: mid cunno ah; mid daawo ah; iyo mid sun ah. Kan cunnada ah waa hoggaamiyaha mar walba loo baahan yahay, oo bulshadiisa anfaco maalin walba sidii cunnada. Kan daawada ah waa midka xalka looga baahdo markay dhibtu timaaddo. Kan sunta ahina waa midka shacabka walaalaha ah kala dilo, oo qaarna ka dhigo kuwo eeganaya kaalmo shisheeye, qaar kalena ka dhigo kuwo qurbaha ku tabaaleysan. Run ma aqaan, laakiin ogaada anigu kuma jiro labada hore oo ma ihi xalka Soomaaliya.
Buuggii Waa Sirgaxannee Sax Ma Jirinnaa? (2006) ee Khaliif Ashkir Diini wuxuu ku baaqay in laga koro dhaqanka xun ee dagaallada laga dhaxlay—iyo qabyaaladda. Dhaqankaasi wuxuu keenay qasaare xun. Wuxuu qoraagu yiri: “Soomaalida waqtigeedii wuxuu ku dhammaaday shalay oo ay raadineysay xorriyadda iyo maanta oo ay raadineyso dowladnimadeedii.” Run badanaa! Wuxuu kaloo Soomaalida u kala saaray labo qeybood: “Keli-wanaag” iyo “Kulli-xume.” Sifooyinku mid waa bogaadin; midna dhaliil. “Keli-wanaag”: wuxuu qoraagu ku bogaadiyay shaqsiga Soomaaliga ah “firfircoonaan, deeqsinimo, waxgaradnimo” iwm. Macnaha shaqsiga Soomaaliga ahi waa qof jiro oo karti iyo garasho leh. Dhanka kale, “kulli-xume” wuxuu qoraagu ku sifeeyay shacab caado ka dhigtay “dareen la’aan, waddaninimo xumo, fiiro gaabnimo” iwm. Cidina dheg jalaq uma siinin waanadiisa iyo talo-bixintiisa. Aniguna waaba sidaan doonayay. Waan ka tanaaday—oo ka taajiray “kulli-xumenimada” shacabka. Wada-tashi iyo towfiiqna u diiday. Buuggii Dal Dad Waayay iyo Duni Damiir Beeshay (2004) ee Dr. Maxamed Daahir Afrax wuxuu ka dhawaajiyay in laga yaabee ay shacabka Soomaalidu wada waasheen. Dal aysan u danqaneyn dadkii lahaa ma dad fiyow baa? Waa su’aal uu qoraagu dhex dhigay Soomaalida. Dheg jalaq looma siinin taladiisa. Durbaanka ayaad ii tunteen haddaad shacab tihiin. Markaasaan aniguna dunida idinka reebay. Wuxuu sidoo kale qoraagu xusay in shacabka
Soomaaliyeed laga la’yahay dad fariid ah oo buuxiyo saddex kaalimood oo muhiim u ah danahooda iyo jiritaankooda—kaalimaha kala ah: gar-wadeenka siyaasadda; gar-wadeenka fikirka, iyo gar-wadeenka dhaqaalaha. Isma faaninayo, hayeeshee aniga ayay i difaacaan dadkii gar-wadeenka idiin noqon lahaa. Laheystayaal ayay ii noqdeen. Ma ka heshay?
Tixdii Cabdullaahi Timacadde ayaa dhegihiinna ka buuxdo: Dugsi ma leh qabyaaladi waxay dumiso mooyaane. Keliya waxa aad tixdaas soo qaadataan markii aad dooneysaan inaad durtaan qabiil kale—hayeeshee idinka kuma dhaqantaan. Anigii burburka iyo qabyaaladda hormuudka ka ahaana igu daba feeshaan. Oo dulmiga aan wado qiil ayaad u bixisaan—umana aragtaan inaan qabiileeste ahay. Iga dheh la jiifshaanna bannaan.
Soomaaliyeey Toosoo / Toosoo isku Tiirsada ee / Hadba kiina taag daranee / Taageera weligiinnee—waa hees aad ii qaaddaan markaan qurbaha idinku soo booqdo. Calamo ayaad ii lushaan. Haddii aad ahaan laheydeen shacab taageero kooda taagta darran, ima aydaan soo dhaweysateen. Oo waa hore ayaad i yureyn laheydeen. Kuwa taagta daranna u hiillin laheydeen. Sidoo kalena maydaan taageerteen foor boonti faayf (4.5).
Abshir Bacadle waa tuu idinka yaabay, oo uu tixdiisii la magac baxday Qabyaalad ku yiri: kama quusto kheyrkee dadkuna igama qaataane. Oo sidee kheyrka ku qaadaneysaan idinkoo aniga gurbaanka ii tumaya? Oo iigu yeero halyeey? Waddani? Hoggaamiye? Inaan hoggaamiye noqdo oo aan dantiina garto iska daayee shacabyahow wallaahi aniga xitaa ma aqaan waxa aan doonayo. Hayeeshee ma doonayo midnimada shacabka Soomaaliyeed ee walaalaha ah. Kaagamana sheekeenayo qasaaraha aan kuu keenay. Waxaan sababay in aan abuuro singal maadaro ku dayacan qurbaha; Soomaali diintooda dayacay ama ka baxay; waayeello ku jaba barafka xilliga qaboobaha. Ogow hoggaamiyuhu sidiisaba wuxuu u kala baxaa labo nooc: the servant leader iyo self-serving leader—oo kala ah hoggaamiye ka shaqeeyo danta guud ee ummaddiisa iyo mid caksigiisa ahoo daneyste ah oo calooshiisa u shaqeeyo. Waxaan hadalkaan ka maqlay aqoonyahanka ii ah laheystayaasha. Waxay igu ammaanaan inaan ahay hoggaamiye ka shaqeeyo danta guud. Cajiib! Jaahilba aan ahaadee ma moogi nusqaanteyda iyo iinteyda. Waan ogahay inaan ahay waxa aan ahay. Kama aan xishoodo inaan ku sifoobay hoggaamiyaha labaad ee daneystaha ah maadaama aanan weli arkin shacab i yureeya oo ila xisaabtama.
Quraanka kariimka ayaa ummadda Nebi Maxamed—calayhi salaatu wasalaam—ku ammaanay inay yihiin ummaddii ugu fiicneyd ee la abuuray maadaama ay kheyrka iyo samaha ka shaqeeyaan; dulmiga iyo xumahana reebaan. Weli waa iga dhaadhici la’dahay ummad Muslimiin ah oo igu kaalmeynayso dulmiga iyo xasadka.
Gunaanadku wuxuu yahay, iga hooya ballantii aan idinka qaaday. Ballantii quseysay sirta labaad. Bal ila fahma sirta labaad. Horta xabbad iyo qori wax la iigama qaadayo. Keliya un waxaa igu filan iyada oo amar-diiddo la igu sameeyo. Sahal! Iyo idinka oo u hiilliyo fariidkiinna fiirada dheer ee daneeyo horumarkiinna. Sharaftiinna. Magaciinna. Karaamadiinna. Baraarihiinna. Qarannimadiinna. Xikmad baa jirta saalixiintii hore laga dhaxlay oo oraneysa: “Kun macal xaq bilaa khalq”—oo macnaheedu yahay u hiilli xaqa adigoon ku xisaabtamin cidda kula jireyso iyo cidda ku mucaaradeyso. Fariidkiinna wuxuu u baahan yahay qof fikirkaas heysta, oo xaqa ku taageero. Anigana iga xor iga noqdo. Sidoo kale xasuusta mahadhadii Maxamed Xaashi Dhamac (Gaarriye). Shacabyahow ma ka faa’iideysateen? Sidee uga faa’iideysataan ma idinka ayaaba xor ah? Soo laheyste iima tihid? Bal aan mar kale iska kaa xasuusiyo tixdii Gaarriye: Abkuu doono ha sheegtee / Wuxuun baa ehel ii ah / Dad ninkaan af-aqaanee / Si’ wax iila arkaayee / Na mideyso ujeeddo.” Fariidkiinna idin badbaadin lahaa wuxuu u baahan yahay shacab higsanaya yoolka ay tixdaasi tilmaameyso—shacab maskaxda xor ka ah, qalbigana ka fiyow. Ma tahay shacab ujeeddo leh? Buugga Governance (2010) ee Ismaaciil Cali Ismaaciil wuxuu soo weriyay nin hoggaamiye kooxeed ahaa. Wuxuu hoggaamiye kooxeedkaasi yiri xalka Soomaaliya wuxuu ku jiraa masaafurinta ragga jabhadaha horboodayay oo ku qaraabanayay magaca beelaha walaalaha Soomaaliyeed. Taa ma dhicin—oo qabqable walba adiga shacabka ah ayaa tol u noqday. Oo difaacay. Hayeeshee runtu waxay tahay maanta musaafiris looma baahno waayo dunidu waxay noqotay hal xaafad oo warka iyo xiriirku way suuroobaan dal iyo dibed hadba meeshaad joogtid. Musaafuris waxaa ka sahlan idinka oo qalbiga iga saaro—oo fariidkiinna u hiilliyo. Su’aashuse waxay tahay: sidaa ma yeeli kartaan? Oo fariidkiinna ma u hiillin kartaan? Idiinkagama baran. Buugga Himilidaada Hano (2013) ee Maxamed Siibed wuxuu xusay wiil dersi u doontay oday xikmad lahaa. Odaygii wuxuu wiilkii u kaxeeyay safar. Reer baa marti-geliyay habeennimadii. Reerka hal sac ayaa u joogay. Oo reerka oo dhan ay ku tiirsanaayeen. Martidii waxaa loo maalay sacii. Waa la kala seexday. Hayeeshee odaygii ayaa isla habeennimadii hurdada ka kacay reerkii oo jiifo. Saa intuu ku leexday mooradii ayuu gowracay sacii lagu arkay reerka. Wiilkii wuu sasay. Odaygiise inta gacanta ku dhegay wiilkii ayuu dhaqaaqay—oo ay safarkoodii sii wateen. Odaygii xikmad buu u dan lahaayee sannad ka dib ayuu reerkii ku soo noqday iyadoo uu wiilkii la socdo. Mise reerkii waa barwaaqo. Waa beero waaweyn. Waa dalag go’ay iyo dhul ballaartay. Wiilkii iyo odaygii oo isla socdo ayaa reerkii bariidiyay. Waxay reerkii dhaheen sacii aad berigii nagu ogeydeen mid habaar qabo ayaa naga gowracay annagoo huradna. Hayeeshee markaynu miyirsannay waxaan garowsannay in ninku uu duceysanaa. Sababtu
waxay tahay saca uu naga gowracay wuxuu naga hor taagnaa barwaaqadan aynu maanta gaarnay oo beero waaweyn leh, dalag soo go’ay leh, dhaqaale kobcay leh, iyo nimco iyo baraare leh. Markaas ayuu wiilkii garowsaday xikmadda loo gowracay sacii. Shacabyahow saddex iyo labaatan sano ayaa idiin ahaa sidii sacaas—oo aad iga dhammi jirteen caano sumeysan oo ah xasad iyo dulmi ku aaddan beelaha walaalihiinna ah. Miskiin. Illaa haddana sidii sacaas ayaad keligeey igu fara-adeygteen. I kolkooliseen. Fariidkiina iska yureyseen. Haddaba saca gowraca shacabyahow si’aad u gaartaan meel ka sarreysa meesha aad maanta joogtaan. Caawiya fariidkiinna. Iga hara. Waxaa aniga gowrac iigu filan idinkoo qalbadda iga saara. Oo i yureeyo. Oo ila xisaabtama. Oo aan qabiil iigu soo dhaweysan. Waase iga su’aalee kalsoonidaas ma isku qabtaan? Ma iga maarantaan? Qalbiga ma iga saari kartaan? Ma u hiillin kartaan fariidka dantiinna u taagan? Laheystayaal aan mabda’ iyo mowqif laheyn dheh—wallee dadnimo idinkuma ogi. Bilaash kuma aydaan noqon “kulli-xume”. Buugga Dhab u Fiiri Waayaha (2012) ee Axmed Ismaaciil (Axmed Deeq) wuxuu xusay aafo ku habsatay shacabka walaalaha ah. Hayeeshee aafadaas cidda ka danbeysay waa aniga. Haa, waa anigakan aad tolka iyo sokeeyaha iga dhigatay. Wuxuu qoraagu qoray: Xumaan iyo xasad baa la inagu abuuray, naxli iyo nuxus baa dhexdeenna la dhigay. Waa la inoo kala sheekeeyay, waana la ina kala qoqobay. Dabadeed cududdeenii baa wiiqantay; caqligeennii baa kala dhantaalmay; aayaheennii baa eydu cuntay. Iskuma uur fayoobin, iskumana caloolsamin. Kaalintii aan bulshada ku lahayn baan gabnay. Qanac iyo quus baa quluubteenna ku samaysmay. [Kh]ayrkeen baan ka hadhnay. Inteenna kulantaa reernimo ayay isku aragtaa, inteenna kala tagtaana reernimo ayay ku kala tagtaa. Cabasho iyo caloolyow baa innaga soo hadhay. Xooggeenii baa daah la inaga saaray. Ma maqashay qeylo-dhaanta qoraaga? Ma maqashay? Wuxuu yiri, “Xooggeenii baa daah la inaga saaray.” Gari Ilaah bay taqaan. Dulmi aadan adiga shacabka ah isku sameyn anigu kuuma geysan. Waa adiga cidda xooggaaga arki waayay, oo fariidkaaga taageeri waayay, oo mustaqbal wanaagsan sahansan waayay. Waa adiga shacabka ah cidda ii noqotay laf dhabar aan ku tiirsanahay. Waxaan halaag iyo qasaare aheynse miyaad iga dhaxashay? Miskiin.
Sidaan horey u sheegayba, xalku ma ahan masaafuris qabqable iyo daneyste. Xalku waa idinka shacabka ah oo garta kaalintiinna. Idinka shacabka ah oo i yureeyo. Idinka shacabka ah oo ku dhaqmo Aayaddii aheyd Ilaah ma beddelo qowm illaa ay qowmku iyagu beddelaan nafsaddooda. Meel waxa laga beddelana waxaa ugu weyn qalbiga. Caqli-xumo kuma ogi shacabka Soomaaliyeed. Qalbiga oo lala dagaallamase ma sahlana. Waxaase taa ka sii horreyso inaad ku baraarugtaan meesha la idinka heysto. Inta taa ka horreyso aniga ayaad laheystayaal ii tihiin. Masaakiin. Alla maxaan idiin sheegay sir igu lid ah.
Laakiin waan idin aqaanee ma ku kalsoon tihiin inaad igu gadooddaan? Haddii aad u hiillisaan dadka waxtarka idiin leh, yaa idinka celinayo reer hebel? Illeen iyagaba waxay ku daba safan yihiin mid anigoo kale ah oo daneyste ahee? Inta ay jirto cabsida laga qabo qabiil kale aniguna waan jiri doonaa. Nafaqadeydu waa cabsida u dhaxeyso beelaha walaalaha Soomaaliyeed. Taas ayaa baraare ii ah—adigana luggooyo kuu ah.
Horta ereyga fariid ee soo noqnoqday maxaan ka jeedaa? Yaa fariid ah? Yaa u qalmo? Oo shacabka hoggaamin karo? Oo dantooda iyo maslaxoodda lagu aamini karaa? Hal sheeko iga hooya. Waxaan ka maqlay aqoonyahanka ii shaqeeyo oo ku maadeysanaya. Waa sheeko ku jirto buugga Dagaal Waa Ka Dare.
Sheekadu waxay aheyd nin ayaa gowracay xaaskiisa—taasoo weliba isaga u dhashay caruur. Saa beeshii ay gabadha ka dhalatay ayaa dagaal warmaha u soo qaatay. Oo duullaan ku ahaa ninkii dilay gabadha. Hayeeshee odaygii gabadha dhalay ayaa arrinta soo dhex galay. Oo muxuu sameeyayna? Wuxuu odaygii gacanta soo qabtay gabar kale oo la dhalatay tii la gowracay. Wuxuu deetana gabartan labaad u guuriyay ninkii dilay gabadhiisii hore. Fariid!
Beeshii odayga waxaa u cuntami weysay tallaabada uu odaygu ku dhaqaaqay. Misana go’aanka isaga ayay u daayeen. Oo ay ka hareen. Odaygii wuxuu halkaas ku baajiyay dagaal iyo fitno sii faafto. Saa beeshii uu ka dhashay ninkii gabadha dilay ayaa odaygii u keenay labo boqol oo halaad oo mag iyo xaal-marin ah. Fariidka aan ka hadlayo waa odaygan oo kale. Fariidku waa midka badbaadiyo dhiigga dadkiisa, kana shaqeeyo nabaddooda, una diido inay barakacaan, beylahna noqdaan. Waana midka aad shacabyahow ka hiilliseen. Oo aad dhayalsateen.
Hadalkiyoo kooban, shacabyahow ii sii foosha wiilashii aan berrito dagaalka u kaxeyn lahaa. Ii sii dhisa guryihii aan madfaca la dhici lahaa. Ii sii shaqeeya lacagtii aan berrito idinka guran lahaa. Ii sii tiriya gabayadii aad berrito igu ammaani laheydeen. Ii sii baarbaara aayaddii iyo xaddiiskii aad qiilka iigu bixin laheydeen. Soo geesi idiinma ihi? Soo halyeyga reerka ma ihi? Hoggaamiyihiinna? Soo kii dantiinna aad ku aaminteen ma ihi? Miyaad iga maarantaan? La’aantey ma jiri kartaan?
Rubuc qarni ayaan idinka soo lumiyay—haddii aan rubuc qarni kale idinka lumin karana diyaar baan u ahay. Masaakiin laheystayaal ah. Fariidkiinna waad fogeyseen. Aniga ayaad sokeeye iga dhigateen; aniguse shisheeye iigama sokeysaan—oo danteyda ayaan idinku fushadaa. Miskiin. Cidina idiinma maqna; ceelna idiinma qodna.
Febraayo 27, 2012
Abaaro. Colaado. Burcad-badeed. Xaalufin deegaan. Mooryaan-garreey. Gumeyste madow. Gumeyste cad. Dallaal sokeeye. Daneyste shisheeye. Waa nasiibka Soomaaliya iyo maanta.
Cawil waxa uu dhex joogaa biibito shaah iyo macmacaan fudud lagu iibiyo. Waxa uu dul fadhiyaa kombiyuutar. Oo wararkii dalka ka daalacanayaa.
Waxa maqalka biibitada taagnaa oday gadanayay baakad sigaar ah. Inta isagoo bakoorad cuskanayo soo dhutiyay ayuu soo aaday dhanka illinka laga baxo. Markii uu sii baxayay ayuu arkay Cawil oo cod la maqli karo ku akhrinayay dalal badan oo u soo gurmaday abaaraha Soomaaliya.
“Turkiga, Iiraan, Qatar,” ayuu Cawil lahaa. “Kuwayt, Sacuudiga, Jabuuti…maashaa Allaah!”
“War ma tahriib baad tahay?” ayuu yiri odaygii, “waa adigakan dalal kale afka ku hayee.”
Waxaa uu Cawil kor u jalleecay odaygii oo bakoorad ku tiirsan, laamo jaad ahna calalinaya.
“Mayee waa dalal gurmad ah,” ayuu yiri wiilkii oo muusoonaya, “oo abaaraha u soo gurmaday.”
Odaygii waxa uu afka gashtay xabbad sigaar ah.
“Nin wax ku siiyo badanaa,” ayuu yiri odaygii oo illinka ka sii baxaya, “nin wax kuu sheegase yaraa.”
Cawil waxa uu sii eegay odaygii oo sii dhutinaya. Siina haruufay.
“Marqaankaa ku saaqayaan u maleenaa?” ayuu Cawil ku qeyliyay.
Odaygii inta dib u soo eegay Cawil ayuu indhaha ku gubay. Waddadii ayuu gooyay isaga oo aan iska eegin. Saa waxaa odaygii hoon uu la sasay ku yeeriyay gaari xammuul ahaa oo xawaare ku socday. Inta gaarigii ku soo jeestayuu bakooraddii ka daba tuuray, oo isagana inta iscelin waayay ayuu dhulka dhinac dhinac ugu dhacay, oo sigaarkiina doc u faniinay. Cawil oo isha ku hayay ayaa ku soo orday—iyo dadkii ka ag-dhowaa odayga.
“Ha i qabanina,” ayuu odaygii ku yiri cod sare, “qaranka kiciya, isaga ayaa i kicin,e.”
Cawil waxa uu odaygii u keenay bakooraddii uu cuskanayay.
“Lafahaaga u tur,” ayuu yiri Cawil.
Odaygii inta indhaha ka eegay Cawil ayuu dhabarka u jeediyay. Wuu sii dhutiyay, xabado laamo jaad ahna kala soo baxay jeebka surwaal ku duugoobay.
“Laakiin maxaad u durtay dalalka soo gurmaday,” ayuu Cawil ku yiri odaygii oo sii socda, “oo u tiri nin wax ku siiyo badanaa, nin wax kuu sheegase yaraa?”
“Adeer maahmaahdaasi aniga ma oran,” ayuu yiri odaygii, “Soomaali ayaa leh. Yaraa wax daacad kuugu hiilliyo sida Jabuuti iyo Turkiga. Nin soor ku siiyay waa nin kaaga gargaaray baahi maalin taagan; nin talo ku siiyayna waa nin kaaga gargaaray baahi jiritaankaaga ku dhisan. Baahida ugu weyn ee ay Soomaaliya qabtana waa tu qarameed—oo in la badbaadiyo mudan.”
“Haa laakiin,” ayuu yiri Cawil, “nin bogga gaajo ku hayo hadal iyo talo maxay ugu fadhiyaan?”
“Adeer meeqo jir ayaad tahay?” ayuu yiri odaygii.
“Labaatan sano,” ayuu yiri Cawil.
“Qax-ku-kor,” ayuu yiri odaygii, “quud ma ahanee qaran kama maqna.”
“Macnahaa?” ayuu yiri Cawil.
“Qarankii Soomaaliyaba siduu u burburay,” ayuu yiri odaygii, “da’ yarta adigoo kale ah fikirkaa ka qalloocmay. Oo halkii qaran la sahmin lahaa, tahriib iyo caasimadaha adduunka ayaa la hadal-hayaa. Kii idinka weynaana dallaalnimo iyo qiyaano qaran ayuu sahansadaa—oo sidaas quud ku raadiyaa.”
“Quruxda hadalkaaga,” ayuu yiri Cawil oo muusoonaya, “iyo fool-xumada afkaaga waa kaaf iyo kala dheeri.”
“Nabad-gelyo,” ayuu yiri odaygii.
“Laakiin magacaaga weli iima aadan sheegin,” ayuu yiri Cawil, “aniga Cawilaa lay dhahaa.”
“Magac-laawe,” ayuu yiri odaygii oo sii dhutinaya isagoo bakooraddiisa cuksanaya, “magacaygu waa Magac-laawe.”
Shir ah dib u heshiisiinta Soomaaliya ayaa loo fadhiyaa. Waxa marti-soor lagu yahay Kenya. Qol ballaaran ayaa lagu dhex shirayaa. Waxaa miis dheer oo wareegsan ku teedsan ergo hab qabiil ku socdo. Waxa shirka joogay goob-joogayaal caalami ah, hey’ado aan dawli aheyn, safiirrada IGAD, iyo madax ka socotay UN-ta.
“Shirka maanta waa isbarasho iyo isa soo dhaweyn,” ayuu yiri Ergeygii ay beesha caalamku u xilsaaratay inuu dhexdhexaadiyo Soomaalida goobta soo xaadirtay, “illaa labo todobaad ayaad marti inoo tihiin. Dal iyo dad ayaa idin dhowraya. Hadafka shirku waa inaad idinku noogu yaboohdaan xalkii waddanka—annaguna waxaad naga taqaaniin hiil iyo hoo wixii aad naga mudan tihiin. Xasuusnaada, xerada qaxootiga ee dunida ugu weyn waxa ku jira dadka aad matashaan ee Soomaaliyeed. Nin walbow xal-doonka ka hormari xil-doonka.”
Waxaa sacabbo loogu jiiday Ergeygii. Shirkiina muddo gaaban ka dib wuu xirmay. Waxaa ergeydii Soomaaliyeed loo sagootiyay hoteelkii loo ijaaray. Ballantuna waxay aheyd in subaxda xigto la isugu soo noqdo miiska wadahadalka.
Waa siddeedii fiidnimo. Rag mugdiga habeennimo isku qarinayo ayaa u soo kala dhuumanayay Safaaradda Itoobiya ee Kenya. Waxay gooni gooni ula kala faqayeen xoghayaha safiirka Itoobiya. Saacado ka dib, raggii oo qosolkooda la maqli karo ayaa labo labo iyo saddex saddex u soo baxay. Mugdigii ayay ku dhex libdheen iyagoon la garan muuqooda—sida aan loo garanba wixii ka farxiyay ee ay la qoslayeen.
Islaan ayaa buul ku dhex karinayso shaah. Waxaa ay dadka ku soo jiidataa inay BBC uga shiddo raadiyo sameecado waaweyn leh.
Wararka ka imanaya caasimadda magaalada Nairobi ee Kenya ayaa sheegaya in maanta uu si rasmi ah u furmay shirkii dib-u-heshiisiinta Soomaalida. Waxa shirka furay Ergeyga qaaska u ah arrimaha Soomaaliya kaasoo xasuusiyay ergada Soomaaliyeed in ay daacad ka noqdan geeddi-socodka nabadda. Waxaa sidoo kale madasha shirka talooyin iyo tusaale ka jeediyay abwaanno, oday dhaqameedyo, iyo madax ka socday beesha caalamka. Waxa berrito aroornimo lagu wadaa in uu furmo wejiga labaad ee shirka iyadoo lagu wado in uu shirku socdo labo todobaad. Wixii soo kordha waxaynu idinku soo tebin doonnaa barnaamijyada soo socdo.
“Allow hadal kheyr qaba,” ayay tiri islaantii oo shaah ku shubeyso koobab, “Allow hadal kheyr qaba ka soo yeersii.”
Goobtii shirkii Nairobi ayaa la fadhiyaa. Muran baa socday.
“Ergeyga ayaa na kala sari doono,” ayay rag lahaayeen, “ha yimaado.”
“Bal ciddii idiinkaga liidato ha la arko,” ayay lahaayeen kuwo ka soo horjeeday, “yaad matashaan? Oo idin soo dirsaday?”
Iyadoo sidii loo murmayo ayaa waxaa bannaanka qolkii shirka ka soo muuqday gaari madow, kala jiidan, lehna muraayado madow. Waxaa gaarigii ka soo degtay Ergeygii daadihinayay shirka dib-u-heshiisiinta. Koox weriyayaal oo Soomaali u badan tahay ayaa ku soo yaacay—oo mid sawir ka qaado, mid filin ka duuba, iyo mid makarafoon caasha ka geliyay ayay noqdeen. Ergeygii oo aan cidina u jawaabin ayaa socod boobsiis ku galay qolkii shirka. Ciidan nabad-sugid ah ayaa isku soo laabay ilbaabadii qolka shirka—u diidayna in uu weriye galo.
“Shirku wuu furan yahay,” ayuu yiri Ergeygii oo isha la raacaya wejiyada cusub ee soo buuxiyay kuraas horay u bannaaneyd—yirina, “wejiyo cusub ayaa ii muuqda saakay.”
“Mudane waa rag qas iyo qalalaase doonaya,” ayuu yiri ergey Soomaaliyeed oo ka mid ah kuwii horey u joogay shirka.
“Mayee Mudanow raggaan meesha fadhiyo nama matalaan,” ayuu ku dooday mid ka socday raggii ku cusbaa qolka shirka.
“Looma dhamma!” ayuu cod gadaal ka soo yiri. “Shirka looma dhamma.”
Waxaa si maqsuud iyo farxadi ka muuqato u dhoollacaddeeyay xoghayihii safiirka Itoobiya.
Ergeygii inta il-biriqsiyo aamusay ayuu neef soo tufay.
“Haddaba ragga shirka ku soo biirow,” ayuu si dabcan u yiri Ergeygii, “sheegta: yaad matashaan?”
“Mudanow cidi ma matalaan,” ayuu cod meel gees ah ka yiri, “waa is qorqor.”
“I maqla,” ayuu yiri Ergeygii, “si xal loo helo, waa in shirka loo oggolaadaa dadka siyaasadda isku haya—oo ay taladu ka soo go’do.”
Waxaa is celin waayay xoghayihii safiirka Itoobiya, oo isku daray sacabbo-tumis iyo dhoollacaddeyn. Saa waxaa ku raacay oo sacaba-tumay ergedii dib ka timid shirka.
“Haddaba ragow yaad matashaan?” ayuu ku celiyay Ergeygii oo qalin dul dhigaya buug miiska u saarnaa.
Waxaa is eegay ergedii dib ka yimid shirka.
“Mudanow mid waan kuu hubnaa,” ayuu yiri mid iyaga ka mid ahaa, “annaga nama matalaan raggaan meesha shalay nooga soo hormaray; cidda aan matalnase waa laga tashan karaa, haba ugu horreeyaan reerkeenna—iyo wixii kale ee aynu ood-wadaag nahay, ee nagu hoos nool.”
Waxaa durbadiiba hadalka dafay xoghayihii safiirka Itoobiya.
“Mudanaha sharafta lahow,” ayuu yiri, “fadlan in yar hakad inoo geli shirka—oo fasax gaaban na sii.”
Waxaa uu Cawil saanta la sii qaaday odaygii dhutinayay.
“Su’aal ma ku weyddiin karaa?” ayuu yiri Cawil, “sidee buu kuugu baxay magacan ‘Magac-laawe’?”
Odaygii inta socodkii hakiyay ayuu eegay Cawil. Oo misana sii dhutiyay.
“Su’aal ma ku weyddiin karaana waad i leedahay,” ayuu yiri odaygii, “anigoon haa ama maya ku oranna waxaad i weyddiisay su’aashii.”
Waxaa qoslay Cawil. Odaygii socodkii ayuu sii watay.
“Wiilyahow ogow,” ayuu yiri odaygii oo ilkaha ku feenanaya laan jaad ah, “lix magac ma yeelato.”
Cawil waxa uu eegay odaygii—oo aamusan yahay.
“Qabri nin ka hoos maray,” ayuu odaygii hadalka ku billaabay, “qarankiisu nin uu burburay, qaxootinimo nin daa’imay, dalkiisa nin qoonsaday, dadkiisa nin quursaday, ama himmad hoose nin ku qancay.”
Odaygii waxa uu tufay taqsiin ku raagtay afkiisa—tu cusubna afka ku guray.
“Magacaygu wuxuu dhintay,” ayuu yiri odaygii, “maalinkii uu gabbalku u dhacay qarankii Soomaaliyeed.”
“Soomaalida,” ayuu yiri Cawil, “nimaan magac laheyn ma jiro, waddankana way u dhashteen.”
Odaygii inta si caro leh u tufay taqsiintii cusbeyd ayuu bakooraddii hawada ku laliyay sidii inuu ku halgaadayo wiilka.
“I maqal,” ayuu yiri odaygii oo ay mergiyadu soo baxeen, hadalkana qasab ku soo saaraya, “adeerow mar danbe ha i oran waddankan ayaa dad u dhashay.”
Cawil inta sasay ayuu dib u booday. Odaygii waxa uu weli kor u hayay bakooraddii. Oo inta neef weyn soo tufay ayuu sii dhutiyay. Cawilna wuu soo daba-galay.
“Oday nooc kale ahaad tahay,” ayuu yiri Cawil, “ma waalnid, mana fiyoobid.”
Waxa qosol ka soo fakaday odaygii—Cawilna waa u cammiray.
“Su’aal,” ayuu yiri odaygii.
“Jawaab,” ayuu la soo booday Cawil.
“Horta waddanka ma ku dhalashaa?” ayuu yiri odaygii, “mise waa u dhalasho?”
Islaantii waxa ay qaxminaysaa burjike. Jalmad biyo ugu jiraan ayaa dhinac taallay. Waxaa u shidnaa warkii BBC-da.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa go’aan ku soo saaray in burcad-badeedda la iska caabbiyo oo lagu baacsado gudaha biyaha Soomaaliya. Sidoo kale dalka Boqortooyada Ingiriiska ayaa Golaha Ammaanka u gudbiyay nuqul uu ku qoran yahay in waddanka Soomaaliya la saaro cunaqabateyn adag maadaama ay ku guul-darreysteen in ay ka hor tagaan burcadbadeednimada korodhay. Dalal ay ka mid yihiin Mareykanka, Faransiiska, iyo Panama ayaa ugu baaqay Midowga Yurub, urur weynaha NATO, iyo dunida kale in si wadajir ah loogu soo wada jeesto oo hab militari lagu wajaho burcadbadeednimada si loo ilaaliyo gargaarka cunnada loo wado Soomaalida.
Dhanka kale dalka Ruushka ayaa dawladaha dunida ugu baaqay in denbi laga dhigo burcadbadeednimada iyo in la yagleelo maxkamado ilaa heer caalami ah oo dacwado ku soo ooga burcadbadeedda. Dalal ay ka mid yihiin Shiinaha, Hindiya, iyo Iiraan ayaa iyaguna la hadal hayaa in ay ku biiraan ololaha looga hortagayo burcadbadeedda.
Waxaase xusid mudan in maanta oo ay Golaha Ammaanku soo saareen go’aankan ay burcadbadeedda Soomaaliya af-duub ku qabsadeen afar doonyo oo laga kala leeyahay Shiinaha, Turkiga, Malaysiyo iyo weliba laash si gooni loo leeyahay.
Islaantii oo dhegta u raaricineysay warka ayaa yaabtay, afkana maroojisay.
“Xaggee jireen,” ayay tiri iyadoo isla hadleysa, “markii kalluunka baddeenna la bililiqeysanayay? Markii kalluumaysatadeenna laga baacsanayay baddooda? Markii sunta lagu aasayay baddeenna? Kuye gargaarka cunnada ayaa la ilaalin. Illeyn nin kaa xoog badan been waa u xarrago! Waxaasoo dhan waxa na baday waa raggeenna oo caqli iyo karti mooday in BBC-da laga dhaho ‘Looma dhamma.’ Gurigiin ba’.”
Waxaa qol ku wada faqaya xoghayihii safiirka Itoobiya iyo ergedii dib ka timid shirka dib-u-heshiisiinta.
“Horta mid iska ilaaliya,” ayuu yiri xoghayihii, “ha u ekaanina dad aan aqoonin cidda ay matalayaan. Sheegta beesha aad ka timaaddeen. Iyo gobollada aad ka timaaddeen. Iyo meel aydaan ka imaanba. Xasuusnaada, shirkii Addis Ababa ee 1993 waxa ay dawladdeenna Itoobiya ku talisay in ay
Soomaalidu wax ku qeybsato goboleysi. Haddaba doorkiinna ciyaara—sidii aad haddaayay u tiraahdeenba looma dhamma. Waad iga farxiseen—Boqor Minilikna maanta wuu idin boqri lahaa. Siyaasadda xalay ayaad soo gasheen, waxaadse maanta u hadasheen sidii inaad tihiin quburo siyaasadeed.”
“Mudanow,” ayuu yiri nin ku jiray ergedii Soomaalida ahaa, “safiirka Itoobiya goormuu nala kulmayaa?”
“Safiirka wuxuu ka dhashay dad,” ayuu yiri xoghayihii, “iyaga ayuuna u shaqeeyaa, oo ku mashquulsan yahay.” Waxaa is eegay raggii.
“Oo xalay si kale ayaad u hadleysayee?” ayuu yiri mid, “waxaad tiri safiirka ayaad hadda ka dib si toos ah kala xiriiri doontaan wixii talo iyo hagis quseeya.”
“Soomaaliyeey i dhageysta,” ayuu yiri xoghayihii, “annagu sidiinnoo kale uma shaqeynno. Mowqifkeennu waa mid. Oo go’aankeennu waa hal laga soo billaabo Raysul wasaaraha illaa laga yimaado safiirrada illaa laga soo gaaro xoghaynta aniga oo kale ah. Marka wixii talo iyo hagis ah aniga ayay idiin soo mari doonaan hadda ka dib.”
“Laakiin…” ayuu yiri ergey kale.
“Aamus!” ayuu amar ku bixiyay xoghayihii oo ergeygii hadalka ku kala goonaya, “hawl baa idiin taallo. Ballanteennu waa wixii aynu xalay ku heshiinnay safaaradda iyo eraygii looma dhamma. Haddii kale waxba idiinma soconayaan. Ogaadana haddii ay dawlad Soomaaliyeed dhisanto, kulligiin denbi ayaad ka gasheen waddankiinna, oo maxkamad ayaa la idin soo taagi doonaa, xukunkiinuna wuxuu noqon doonaa dil toogasho. Marka waxaad ku badbaadi kartaan waa ereyga looma dhamma! Inta uu jiro ereygaas ayuu magaciinuna jiraa—iyo weliba xaafado ama deegaanno aad madax ka tihiin oo aad canshuur ka qaadataan.”
Ergeydii mid walba mid kale ayuu eegay. Oo ay aamuseen.
Cawil iyo odaygii waxa ay ka soo baxeen luuq. Oo waddo dheer cagta soo saareen.
“Ma aqaan,” ayuu yiri Cawil, “farqiga u dhexeeya waddanka oo lagu dhasho iyo waddanka oo loo dhasho.”
Odaygii wuu sii dhutiyay.
“Bal ii sharrax,” ayuu yiri Cawil.
Odaygii waxa uu ruugayay taqsiintii afka ugu jidhay—sida uu u ruugayayba wuxuu ugu jawaabi lahaa Cawil.
“Nin waddan u dhashay,” ayuu yiri odaygii oo bakooraddiisii ku dhutinaya, “waxaa lagu yaqaan inuu ku faano dalkiisa iyo dadkiisa—oo ma qoonsado, mana quursado. Waxaa lagu yaqaan inuu u danqado. La gaajoodo danyarta. La faqo bulshadiisa. Oo qarankiisa xume u diido. Inuu walaalkiis u oggolaado daadihinta siyaasadda dalka. Inuu yureeyo dallaalleyda sokeeye iyo daneystaha shisheeye. Oo uu calanka buluugga ah liicasho u diido. Kaasaa waddanka u dhashay—haba ka yimaado dibadda,e.”
Odaygii waxa uu afka ku guray laamihii u danbeeyay ee jeebka ugu jiray.
“Dhanka kale,” ayuu yiri odaygii “nin waddanka ku dhashay, waa mid un iskaga dhashay dhulka Soomaaliyeed. Hayeeshee aan weli gaarin dareen waddaninimo iyo qab Soomaalinimo. Qofkan oo kale waxa uu u dallici karaa waddani u hiilliya dalkiisa ama caada-qaate luggooyo dalkiisa iyo dadkiisa. Oo qalinka wax ku xado. Wax bililiqeysto. Gabdhihii faraxumeeyo. Nabadda hagaardaameeyo. Oo idaacadahana ka yiraahdaa ‘Looma dhamma.’ Wuxuu u hanqal-taagaa inuu qaxootinimo bilaa macno ah isaga noolaado. Oo aan waddankiisa waxba u soo kordhin. Wiilyahow, nin waddanka ku dhashay la mid ma ahan nin waddanka u dhashay—xag dareen iyo xag hiilba.”
Cawil waxaa uu dhuuxayay hadalkii odayga—oo dhinac socday.
Jewigu wuu degganaa. Bilicda magaaladu indho-qabad ayay laheyd. Nin risiq doon ah iyo nin dan kaleba lahaa waxay cammireen waddadii faras-magaalka. Baabuur rakaab iyo kuwo xammuulba laamiyada waaweyn ayay jiho walba u kala gooshayeen. Ciidanka taraafikada ee hagta baabuurta iyo kuwa nabad-sugiddaba waxa ay si teel teel ah ugu kala firirsanaayeen magaalada. Saro dhaadheer ayaa magaalada dhex qotomay—saro ay ka mid tahay xarunta Ururka Midowga Afrika. Meeshu waa Addis Ababa, caasimadda Itoobiya.
Qol lagu kulmo ayaa waxaa wada fadhiya rag iyo haweeney ka socday dawladda Itoobiya. Waxaa mid walba hor qotomay makarafoon. Waxaana dhinac yaallay cabitaan biyo cad ah. Waa shir ay albaabadu u xirnaayeen.
“Maanta waa kal-fadhigeennii lixdanaad ee rubac-sanadlaha,” ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Itoobiya, “oo ku aaddanaa arrimaha Soomaaliya iyo sidii laga yeeli lahaa haddii ay u bilato dawlad leh heybad iyo hannaan. Ogaada lixdii sano ee ugu danbeysay xaalku weji cusub ayuu la soo baxay—oo ah mid salka ku haya baraarugga shacabka oo ka daalay dagaal-ooge aan magaciisa saxiixi karin. Bal xoghaynta xafiiskeyga ka dhageysta warbixin kooban oo arrintaas quseysa.”
Waxaa makarafoonkiisa afka u dhaweeyay xoghayaha.
“Waad mahadsan tahay mudane,” ayuu yiri xoghayihii xafiiska arrimaha dibedda, “haddii aan dulmar kooban ku sameeyo meesha ay arrimaha Soomaaliya haatan marayaan, xaaladda Soomaaliya horta nabarkii aan la beegsannay waan la helnay. Weli iyaga ayaa isku sii jeedo. Jabkooda waa jiritaankeenna. Hayeeshee waxaa jira isbeddello soo guuxaya.
“Soomaalida waxay ka soo daali rabtaa colaadaha, oo waxa ay ku kaceen dagaal-oogayaashii. Oo kaaga daranee Somaliland iyo Puntland nabad iyo nidaam ayaa muddo ka jirtay. Meelihii uu dagaal-ooguhu ku harsanaa waad aragteen oo shacabka ayaa tashaday oo kacdoon isaga saaray dagaal-oogayaashii noo shaqeyn jiray. Cabsi ayay arrintan nagu heysaa.
“Cabsida ugu weyn waa Soomaaliya oo dib cagaheeda ugu istaagto, oo midowdo, qaasatan haddii ay dhadhamiyaan nabad iyo nidaam—oo ay rajo iyo nolol u soo noqoto. Arrinkaasi waa qatar. Waa jabkeenna. Waxay soo dedejinaysaa in mar labaad ay midoobaan Koofurta iyo Waqooyiga.”
“Intaas waan la soconnaa,” ayuu yiri gaashaanle Itoobiyaan ah oo hadalka ku kala gooynaya xoghayihii xafiiska arrimaha dibedda, “laakiin u gudub wixii talo-bixin ahee cusub ee xafiiskiinna ku soo kordhay.”
“Waa runtaa, Mudane,” ayuu yiri xoghayihii xafiiska arrimaha dibedda oo taaygii surka ugu xirnaa toosisanaya, “een, markii aan dhan walba ka eegnay arrimahan iyo halista ka iman karta, waxaynu isku raacnay dhowr qodob oo ka hor-tag ah illaa iyo xad.”
“Oo ah?” ayay tiri haweeney ka socotay xafiiska raysulwasaaraha Itoobiya.
“In labo arrin la kala saaro,” ayuu yiri xoghayihii xafiiska arrimaha dibedda, “oo si kala duwan loola dhaqmo.”
Raggii iyo haweenaydiiba waxa ay dhammaantood isha ku wada hayeen afka xoghayaha—oo sugayeen hadalka uu soo wado.
“Kow,” ayuu yiri xoghayihii oo hadalkiisa wato, “waa in la isku dheelli-tiraa awoodda xoogagga siyaasadda ku dagaallamaya. Tusaale ahaan, si aysan awoodda Shabaabku u wada guuleysan, waa in laga hor-keeno xoog hakiya—xoog ka soo dhex-baxa Soomaalida dhexdeeda. Si taas loo helo, Itoobiya waxa ay qaadday tallaabooyin wax ku ool ah sida abuurista iyo qalabeynta ciidamada wadaaddada Ahlu-Sunna. Sidoo kale waxaynu hub siinnaa miliishiyo aan hoos-tegin dawladda ku-meel-gaarka, oo annaga naga amar-qaato si loola dagaallamo Shabaab. Ogow, intaan oo ciidan ah keliya waxaa loogu tala-galay in ay hakiyaan faafidda Shabaab si ay Soomaalidu iyagu isugu mashquusho ebed. Marar badanna Itoobiya ahaan annaga ayaaba si toos ah u galno gudaha Soomaaliya si la isugu dheelli-tiro awoodda xoogagga hubeysan.”
Waxa madaxa luxay oo hadalkii la dhacay wasiirkii arrimaha dibedda.
“Haye,” ayuu yiri safiirka Itoobiya u fadhiya Qaramada Midoobay, “waa maxay arrinta labeysa middan koowaad ee ah isku dheelli-tirka awoodda kooxaha ku dagaallamaya Soomaaliya?”
“Midda labaad,” ayuu yiri xoghayihii xafiiska arrimaha dibedda, “waa in aan Soomaaliya laga qaadin cuna-qabeynta xagga hubka ah. Konton iyo sagaalkii kulan ee aynu isla qaadannayba Itoobiya waxay ku celcelisay qodobkan. Haddii xilligan ay Golaha Ammaanku oggolaadaan in Soomaaliya ay soo degsato hub ay u madax-bannaan yihiin, waxay taasi keenaysaa labo arrin midkood. Kow, waxa uu hubkaasi gacanta u galayaa Shabaabka—oo taa nooma roona. Ama labo, waxa qooqi doonto oo uu damac geli doonaa dawladda Soomaaliya oo weerar dhul-ballaarsi ah ku qaadi doonto deegaannada Soomaaliyeed ee hoos yimaada Itoobiya. Waa labo kala daran mid dooro.
“Marka waa in beesha caalamka laga dhaadhiciyo in aan Soomaaliya laga qaadin cuna-qabateynta hubka. Sababtu waxay tahay waxaa ku filan hubka AMISOM. Sidoo kalena waa in Ugaandha iyo Burundi la xasuusiyo in qandaraaska ciidamadooda uu ka joogsan doono haddii Soomaaliya loo oggolaado inay hub soo degsato oo ay isku filnaato. Kuna bishaareysta inta ay Soomaaliya
cunaqabateynta hubka saaran tahay, waxaa hirgelaya qorshaha ah isu-dheellitirka awoodda xoogagga ku dagaallamaya siyaasadda Soomaaliya.”
Waxa uu xoghayihii qurquriyay biyihii u saarnaa miiska.
“Raalli ahaada,” ayuu yiri isagii oo koobkii dul saaraya miiska, “qodobka saddexaad waa in la xoojiyo ciidamada AMISOM. Iyaga ha noqdaan cududdii dawladda Soomaaliya. Oo AMISOM ha la qalabeeyo. Ha la tababaro. Ha la nooleeyo. Oo ha la nafaqeeyo. Waa ciidan lagaga maarmi karo in ay Soomaaliya yeelato ciidan awood leh—oo qatarteeda leh.
“Qodobka afaraad waa in qurbaha laga keeno aqoonyahan Soomaaliyeed. Ogaada Soomaalidu way ka daashay dagaal-ooge aan magaciisa saxiixi karin. Marka waa in la keeno rag qurbo-joog ah, oo aqoonyahan ah, hayeeshee aan laheyn mabda’ Soomaalinimo—oo wax lala cuni karo, oo aan waxba dhaammin dagaal-oogaha xag hunguri-xumo. Shacabka Soomaalidana ha lagu maaweeliyo in ay heleen rag aqoonyahan ah—annagana danta noogu jirto waa iyaga oo aan ka dhammeysanno saxiixa ay magaca dawladeed ku saxiixayaan danaheenna dhow iyo kuwa mustaqbalkaba. Waa iga intaa tala-bixinta.”
Waxaa uu xoghayihii xafiiska arrimaha dibedda qurquriyay biyo u saarnaa miiska.
“Waad mahadsan tahay xoghayow,” ayay tiri haweeneydii ka socotay xafiiska raysulwasaaraha Itoobiya, “sidoo kale mahadsanid wasiirka arrimaha dibedda. Waqti iyo fikir dheer ayaad geliseen talo-bixintiinna. Laakiin talooyinkan waa kuwo ku taxalluqo waaqaca iyo isqabqabsiga maanta taagan—oo ah mustaqbalka dhow. Waa iga su’aalee, ma isla falanqeyseen oo ma heysaan talooyin ku aaddan mustaqbalka fog ee arrinta Soomaaliya?”
Waxaa qosol gaxgax leh ku dhuftay wasiirkii arrimaha dibedda.
“Qorshe iyo talo waynu heynaa,” ayuu cod deggan ku yiri, “qorshe u cuntamaya maslaxadda qaaska ah ee Itoobiya mustaqbalka fog.”
“Oo ah?” ayay tiri haweenaydii oo qalinka ku boobeysa buug hor fidsanaa.
“Kow, in Soomaaliya laga faramaroojiyo talada aayaheeda,” ayuu la soo booday wasiirkii arrimaha dibedda, “oo ay magan u noqoto talada IGAD labo dheh, inay daa’into u-gacan-hoorsiga UN-ta saddex dheh, iyo in dawlad-goboleedyo is ximanaaya loo sameeyo afar dheh.”
Waxaa qolkii saaqday aamusnaan kooban. Talooyinkan ayuu ruux walba ruugayay—iyo sidii loo meelmarin lahaa.
“Ma xuma,” ayay tiri haweenaydii ka socotay xafiiskii raysulwasaaraha, “waa talo aad looga soo fikiray. Kuwo kalena waa lagu sii dari karaa. Hayeeshee waa iga su’aalee waa tuma cidda dhaqan-gelinaysa taladan?”
Waxa ay dhammaantood u wada jeesteen miiskii uu fadhiyay wasiirkii arrimaha dibedda Itoobiya.
“Taa waa sahal,” ayuu yiri wasiirkii isaga oo afka u dhaweynaya mikarafoonka, “isla Soomaalida ayaa qorshahan dhaqan-gelinaysa.”
“Sidee?” ayay tiri haweenaydii.
Waxaa gurigiisii soo galay Ergeygii Soomaaliya u qaabilsanaa beesha caalamka. Labo caruur oo uu dhalay ayaa ku soo orday. Inta jilib dhulka dhigay ayuu jilibka kalena cuskaday. Wuu dhunkaday. Oo ka qoslisiiyay. Oo laabta ku qabsaday sidii inuu qarniyo ka maqnaa.
“Waryaahadee ka leexda aabbe wuu daalan yahaye,” ayay tiri xaaskiisa, “caawo waxaan kariyay cashadii aad jeclayd. Isa soo diyaari.”
Ergeygii inta ku soo jeestay xaaskiisa ayuu dhabanka calaacasha ka mariyay.
“La’aantaada nolosha waa igu adkaan laheyd,” ayuu yiri isagoo muusoonaya, “abaal ayaan kaaga hayaa sida aad noo garab taagan tahay aniga iyo caruurta.”
“Safarkaaga Soomaaliya lama baajin karo miyaa?” ayay tiri xaaskiisa oo beddelaysa mowduuca, “waa halis. Noloshaada iyo mustaqbalka caruurtaada ayaad qatar gelinaysaa.”
Waxa uu Ergeygii u dhaqaaqay qolkii jiifka isagoo taaygii u xirnaa iska sii furaya.
“Horta markii aan Soomaaliya kaala hadlo maxaad ii inkirtaa?” ayay tiri xaaskiisa oo qolka ka sii daba-gashay, “ma hadalkeyga ayaa raqiis kula ah? Mise adiga ayaysan geeridu ku karin?”
“Boqol mar ayaan kuu sheegay,” ayuu yiri Ergeygu, “beenta ay idaacaduhu buunbuuniyaan ha dhegeysan—halista la sheegsheegayo waa buunbuunis.”
“Idaacadaha aad sheegaysid yaa u warrama oo uga sheekeeya arrimaha Soomaaliya?” ayay tiri xaaskiisii, “ma cid aan adiga aheyn ayay ka helaan wararka quseeya halista iyo halaagga ka socda Soomaaliya? Mise adigaa beenaale ah—oo u sheeko-xumeeyo idaacadaha?”
“Fadlan codkaaga hoos u dhig,” ayuu yiri Ergeygii, “Soomaaliya haddii aan tago dhib ima gaarayo. AMISOM ayaa joogta. Ilaalo Soomaali ah ayaa joogto. Waxba ima gaarayaan.”
“AMISOM iyo ilaalo kaleba maxay kaa celin karaan?” ayay la soo boodday xaaskiisa, “soo iyaga maalin walba meydkooda waddooyinka la soo waro?”
Markii ay intaasi tiri ayay is celin weysay—oo af labadii boohin furatay. Ergeygii inta dhinaceeda u soo jeestay ayuu u soo dhaqaaqay, habna siiyay, oo illinta ka tirtiray.
“Waxaan kuu ballan qaadayaa,” ayuu yiri, “inaysan waxba i gaari doonin. Mashruucan ay beesha caalamku ii wakiilatayna waa gabogabo. Markuu dhammaadana waxaan u guureynaa meeshaan doonno adduunka oo aan guryo iyo dhul ka gadaneynaa. Waxaa la ii ballan qaaday mag-dhow ku filan illaa todobo fac oo caruurteena iyo faracooda ah. Waxaa kaloo la ii ballan qaaday in caruurta la siin doono waxbarasho bilaash oo heer jaamacadeed ah. Marka fadlan igu garab istaag af iyo addinba sida aan mashruucan u dhammeystiri lahaa adigoo eegaya danteenna iyo tan caruurteennaba—haatanna waa gabogabo, oo mar dhow ayuu hirgeli doonaa, ciddii diidana waxaa naga kaafisa cududda militari ee AMISOM iyo cunaqabateynta beesha caalamka.”
Xaaskiisa iyadoon jawaabin ayay illintu ka dareeraysay. Saa kor ayay u soo eegtay ninkeeda.
“Horta waa iga su’aalee,” ayay tiri, “waa maxay mashruucan aad ku celcelineysid in laguu xil-saaray?”
“Arrintaasi waa sir culus,” ayuu yiri Ergeygii, “waa sir culus. Classified.”
Odaygii waxa uu buufta ku hayaa sigaar. Cawil ayaa garab socday.
“War heedhe maad iga hadhid,” ayuu yiri odaygii, “awalbay i cusleeyeen ciilka qaran la’aan iyo ceebta qaa’inul waddanka,e.”
Cawil wuu qoslayaa.
“Waxaa beryahakan nagu soo batay,” ayuu yiri odaygii, “rag af-Soomaaliga ku hadlo, hayeeshee aaminsan afkaaro shisheeye oo hagardaamo ku haya qarannimadii Soomaaliya.”
“Dadka ma iyagaa wada xun?” ayuu yiri Cawil, “oo wada daba-dhilif ah?”
“Anigu ma oran ereyga daba-dhilif,” ayuu yiri odaygii, “ogowse inta badan daba-dhilifyadu ma tiro badna—oo sidii la arki jiray waxay ku haraqmaan mowjadaha waddaniyiinta u heellan danaha dalka, dadka, iyo diinta.”
“Sida al-Shabaab oo kale maad ka waddaa?” ayuu la soo booday Cawil, “iyagaa u soo baxay shisheeyaha qasaya Soomaaliya.”
Waxaa qosol gaxgax leh ku dhuftay odaygii—oo socodkiisana sii watay.
“Su’aal?” ayuu yiri odaygii oo ku dhutinaya bakooraddiisii, “labo arrin haddii ay ku qabsato tee dooran laheyd?”
“Labo arrin oo see ah?” ayuu yiri Cawil.
“Wiilyahow ka soo qaad,” ayuu yiri odaygii, “waxaad tahay digaagad korsaneyso ilmaheedii ay dhashay. Waxaa digaagaddii u yimid labo col. Mid waa xoor, midka kalena waa mas. Xoorkii wuxuu yiri, ‘Digaagadyahey adiga ayaan ku cunayaa—oo haatan ayaan hilibkaaga miciyaha saarayaa.’ Maskii weynaana wuxuu yiri, ‘Digaagadyahey iska noolow. Iska cun, oo cab. Hayeeshee ogow dhashaada yar yar ayaan mid mid u liqayaa—oo halna kuuma hambeenayo.’”
Cawil wuu aamusan yahay.
“Haddii aan arrinkaasi ku xiro waaqaca maanta,” ayuu yiri odaygii, “kee baad dooran laheyd nin adiga ku yiri aan maanta dabka ku saarto, hilibkaagana dubto oo ku quuto; iyo nin ku yiri maanta iska noolow, laakiin berrito ii daa oo aan dabka saarto hilibkii caruurtaada?”
Waxaa aamusay Cawil.
“Kee dooran laheyd?” ayuu ku celiyay odaygii, “labadaa nin kee asxaan kuu sameeyay? Oo kuu sokeeyo?”
Shirkii ayaa laga soo dareeray. Qolkii weynaa bannaankiisa ayaa la tuban yahay—oo fasax qado loo soo baxay.
Ergeygii daadihinayay shirka ayaa waxa dhexda gashtay weriyayaal Soomaali iyo ajnabi isugu jira.
“Shirka haatan waa gabogabo,” ayuu yiri Ergeygii, “meel fiicanna wuu marayaa, oo waxaa socdo wada hadal lagu qeybsanayo kuraasta. Oo loo qeybinayo qabiillada doorka weyn ka ciyaara siyaasadda Soomaaliya.”
“Mudane,” ayuu yiri weriye Soomaali ah, “ma dhab baa in ay jiraan qabiillo loo diiday madasha shirkan? Oo la ceyriyay?”
“Taasi waa been-abuur,” ayuu la soo booday Ergeygii, “cid walba oo door firfircoon ku leh siyaasadda Soomaaliyeed wuu u furan yahay shirka.”
“Marka aad leedahay door firfircoon ku leh siyaasadda Soomaaliya,” ayuu yiri weriyihii, “Mudane ma waxaad ka jeeddaa qabiillada hubka heysta—oo gacan-saar la leh Itoobiya?”
“I maqal,” ayuu yiri Ergeygii oo muusoonaya, “Soomaali shirkan way u dhan tahay qeybaheeda kala duwan. Cid gooni loo soo xushay ama cid gooni loo takooray midina ma jiraan.”
“Mudane ma laga yaabaa,” ayuu yiri weriye kale, “in maxkamad caalami ah la soo saaro shaqsiyaadkii ka danbeeyay burburka dalka iyo dadka?”
“Taa,” ayuu yiri Ergeygii, “waxay u taallaa Soomaalida. Laakiin ujeeddada miiskan wada-hadalka waa in la soo afjaro colaadda iyo dawlad la’aanta Soomaaliya.”
Weriye kale ayaa damcay inuu su’aalo weyddiiyo Ergeyga, hayeeshee waxaa u diiday nabad-sugiddii meesha joogtay, oo sii sagootisay Ergeygii.
Ergeydii Soomaaliyeed koox koox ayay isula faqayeen intii la sugayay qadada. Xoghayihii safiirka Itoobiya ayaa u yimaaday koox ergey ah oo meel tuban.
“Beesha caalamka,” ayuu yiri xoghayihii, “qorshe ayay u soo dhiibtay Ergeyga.”
Waxaa hal mar wada aamusay kooxdii uu u yimid.
“Qorshe noocma ah?” ayuu yiri mid iyaga ka mid ah.
“Qorshe ku aaddan sida loo dhisayo dawladda,” ayuu yiri xoghayihii, “oo meel waa kursiga madaxweynaha. Meel waa kan raysulwasaaraha. Meelna kan guddoomiyaha baarlamaanka. Taa waxaa garab-socota, qeybsashada kuraasta baarlamaanka oo uu guddoomiyuhu soo magacaabi doono iyo qaybsashada kuraasta wasiirrada oo uu raysulwasaaruhu soo magacaabi doono. Qabiillada siyaasadda isku hayana ay ku heshiiyaan kala qeybsashada tirada kuraasta—iyo in sidoo kalena qaar loo qoondeeyaa dumarka.”
“Mudanow,” ayuu yiri ergey Soomaaliyeed, “kursiga madaxweynaha annaga ayaa iska leh.”
Xoghayihii ayaa wejiga isku kaduuday—sidii qof aan fahmin hadalka.
“Sababka aan xaqa ugu yeelannay ma idiin sheegaa?” ayuu yiri ergeygii, “annagu hadafkeennu waa in la ciribtiro argagixisada, in Itoobiya loo saxiixo oo loo daayo dhulka ay xaqa u leedahay ee Soomaali Galbeed, in gobol walba oo Soomaaliya ka mid ah uu yeesho maamul ilaaliya danaha Itoobiya.”
Xoghayihii ilkaha ayuu qosol la caddeeyay—oo kala batbatay.
“Mudane intaas miyeysan ku deeqin?” ayuu yiri ergeygii, “annagu intaas aan sheegayba waynu fulineynaa—oo waxaan kaloon kuugu dareynaa hawlo kale. Sida in Itoobiya loo fasaxo inay canshuur la’aan isticmaasho dekedaha Soomaaliya; in la idiin soo musaafuriyo qolyaha nabadiidka ah ee waddankeenna ku dhex-dhuumanaya; iyo wixii kale ee aan isku af-garanno.”
Xoghayihii safiirka Itoobiya inta saacadda eegay ayuu muusooday.
“Beec raqiis ah ayaad heysaan,” ayuu yiri, “rag kale oo ka tirsan ergeyda ayaa ii yaboohay ballan-qaad ka fiican kiinna, oo iyaga xitaa si fiican iima sii qancinin. Waxaana dawladda loo caleemi-saari doonaa nin qanciya danaha Itoobiya oo beec fiican la soo shirtago. Iska sii qadeeya, waxaan sii raadinayaa cid kale oo ii yaboohda beec aan ku qanco—oo ay Itoobiya u aaydo.”
Raggii oo miiska qadada fadhiya ayuu xoghayihii ka dhaqaaqay isagoo xarragoonaya.
Cawil iyo odaygii way isla lugeynayaan.
“Su’aashaadu waa su’aal adag,” ayuu yiri Cawil oo lugta ku laadaya kubbad ka soo baxsatay dhallinyaro ku ciyaareysay waddada geeskeeda, “bal adigaan kugu soo xawilay, oo wax ka dheh.”
Odaygii waxaa uu tufay laamo jaad ah.
“Su’aalaha na horyaalla,” ayuu yiri odaygii, “waxay dhaafeen kuwo wax laga dhaho. Waxay gaareen kuwo laga aamuso—shib. Juuqna.”
Cawil waxa uu eegayaa dhulka, sidii ruux wax ka baaranaya. Odaygiina waxa uu afka ku gurayaa laamihii ugu danbeeyay ee jeebka ugu jiray.
“Adeer ogow,” ayuu yiri odaygii, “arrinku waa isma dhaanto iyo dhasheeda. Al-Shabaab sidii xoorka ayay maanta kuu dileysaa oo aysan waxna ula harin qarankii la oran jiray Soomaaliya iyo shacabkiiba. Oo ay soo dhaweysteen shisheeye, sokeeyihii Soomaaligii ahaana gowrac iyo barakicin ayay isugu dareen. Sidoo kale dallaalleyda haatan hor-boodaya dawladda iyo maamul goboleedyadana waxay sidii maskii sun culus la beegteen dhaxalkii jiilka soo socda, oo ay ka dallaalleen jiritaankii qaranka iyo kheyraadkiisaba.
“Haba fureen iskoollo. Haba fureen cisbitaallo. Haba fureen xafiisyo maamul. Haba fureen idaacado. Haba dhiseen meelo cusub. Mar haddii uu hoggaamiye walba talada uga danbeeyo Itoobiya iyo Kenya; mar haddii uu hoggaamiye walba ku hayo gobolkeygaay! gobolkeygaay! halkii uu oran lahaa qarankeygow! qarankeygow!; mar haddii goortii rajo soo iftiintaba uu mid caadaqaate la soo boodayo ereyga ah looma dhamma si uu dan qaas ah u gaaro; mar haddii hoggaamiye walba ay calooshu soo kuusan tahay halka dadkii ay mas’uulka ka ahaayeen ay hoostooda gaajo iyo harraad la dhimanayaan; mar haddii uu hoggaamiye walba u tartamayo u adeegista dano shisheeye iyo ku tumashada danaha iyo damiirka Soomaaliyeed; mar haddii uu hoggaamiyihii talada dalka hoos geeyay gumeyste cusub oo caddaan iyo madowba leh; mar haddii…mar haddii…iga daa, dhiigga ha igu karin,e. Qarankii Soomaaliya labadaas qolo ayuu ku maqan yahay.”
Cawil waxa uu eegayay odaygii. Wuxuu arkay illin ku soo istaagtay odayga.
“Soomaalida maanta joogta,” ayuu si dabacsan u yiri Cawil, “ma jirtaa wax ay u dhan tahay oo ay ku mideysan yihiin?”
Waxa ay haweenaydii ka socotay xafiiska raysulwasaaraha Itoobiya eegaysay wasiirka arrimaha dibedda—oo ay jawaab ka filaneysay.
“Qorshahaan waxaa meel-marinaya isla Soomaalida,” ayuu yiri, “waxaan hadalka ku wareejinayaa gaashaanlaha. Isaga ayaa hawlahaasi noo xilsaaran.”
Waxaa makarafoonka afka u soo dhaweeyay gaashaanlihii.
“Mahadsanid, jaalle wasiir,” ayuu yiri gaashaanlihii, “talada Soomaaliya annaga ayay maanta gacanta noogu jirtaa. Waxa diyaar noo ah rag Soomaali ah oo ciiddaas la tiro eg, oo noo shaqeeya, na maqla, na aaminsan. Dagaal-ooge ha dhihin. Maamul goboleed mid ka socda ha dhihin. Mid qandaraas kale wata ha dhihin.
“Marka su’aashu yeysan noqon yaa hirgelinaya qorshahan ee su’aashu ha noqoto taageero ma ka heli karnaa xafiiska raysulwasaaraha, midka IGAD, Golaha Ammaanka, iyo beesha caalamkaba? Taageero ah xag dhaqaale iyo xag siyaasadeedba? Aniguna waxa aan idiin ballan-qaadayaa in markii ay Soomaali heshiin rabtaba aan BBC-da soo fadhiisiyo mid ka mid ah raggaas inoogu jiro qaanadaha, oo aan afkiisa ka keeno inuu yiraahdo ‘looma dhamma’. Inta ay ‘looma dhamma’ ku hayaan waa inta ay ku sii raagi doonaan dawlad la’aan, goboleysi, colaado, abaaro, qaxootinimo iyo gacan-hoorsi joogto ah. Ka dibna waxaa noo fuli doono danaheenna mustaqbalka.”
Waxaa qolkii saaqay farxad iyo reynreyn.
Gaashaanlihii waa uu dhoollacaddeynayaa.
“Raggaan waa Soomaaliyee sidee ku aamini karnaa?” ayay tiri haweenaydii.
“Sahal,” ayuu yiri gaashaanlihii, “oo raysulwasaaruhuba wuxuu caalim ku yahay jawaabta su’aashaada.”
“Intaad iga dhaaftid waxa uu raysulwasuuruhu og yahay,” ayay tiri haweenaydii, “maad adiga i maqashiisid jawaabtaada?”
Gaashaanlihii dhoollacaddeyn been ah ayuu isku qasbay.
“Een…waa runtaa, marwo,” ayuu yiri, “haddii aan ku maqashiiyo jawaabta, Soomaalida hal mabda’ ayay ka siman tahay. Mabda’ ah in loo weyraxo, loo walaaco, la isku weheshado wixii quseeya qabyaalad iyo nin-xigsasho. Waxay ugu neceb yihiin ninkii kala hadlo danta guud. Waxay fogeeyaan, yasaan, doqon ku tilmaamaan, haddii ay rabaanna dilaan, ninkii kala hadla qaranimo iyo Soomaalinimo. Geesi waxay u yaqaaniin ninkii difaaco qabiilkooda. Indheergarad waa kii difaaca danta qabiilka. Abwaan waa kii gabay ku ammaano dagaalyahanka qabiilka. Wadaadkooda loogu jecel yahay waa midka qabiilka ugu nacamleeyo dulmiga, una fatwooda inay xaq ku taagan yihiin oo ay jannada geli doonaan ciddii ka dhimata. Iyaga Soomaalida ah ayaa horay isugu maahmaahay fiqi tolkii kama janno-tago.
“Saas ay tahayna, bin’aadan wanaag kama dhammaadee waxaa jiro hal hal dhif ah, oo daacad ah, karti iyo waxtarba leh. Laakiin isagana nasiib-darrada heysata waxay tahay waxaa harqiyay mowjado isasaaran—mowjado colaadeed, mowjado jahli, mowjado gaajo, mowjado madow oo mugdi ah. Nasiib-wanaag, isagoo kale waxaa fudud dilkiisa. Oo cid difaacaneysa ma heysto. Dadkiisu waxay difaacaan oo ay geesi u yaqaanaan ninka la dagaallama qabiillada kale—ninka hubka sita, oo wax burburiya, oo wax soo bililiqeysta, oo been iyo huuhaa ku hoggaamiyo.
“Dhanka kale, haddii uu midka daacadda ah ka badbaado dilka dadkiisa, waxaa nasiib kale ah in uusan ka badbaadi karin dilka shabaabka iyagoo lafahooda uga cabsanaya. Haddii uu shabaabka ka badbaadana waxaa uusan ka badbaadi karin sirdoonkeenna gudaha ugu jira Soomaaliya. Macnaha, sirdoonkeenna toos uma dilaanee waxa ay u wakiishaan mid ka mid ah raggaas qaanadaha noogu jira—oo iyagaa fagaare bannaan ah madaxa ka toogta. War qosol leh ma kuu sheegaa, marwooy?!”
Haweenaydii waxa ay madaxa kor uga soo qaadday qoraalkii ay ku boobaysay buugga.
“War see ah?” ayay tiri.
“Kaasoo kale,” ayuu yiri gaashaanlihii, “waxay Soomaalidu u taqaannaa ‘Looma ooyaan’!”
Hal mar ayay haweenaydii ku dhufatay qosol ay la muuqdeen lakabyadii hoose ee ilkaheeda. Raggii kalena qaar qosolkii ayay ku saxdeen, qufacna la dhiman gaareen.
“Oo kaaga daranee,” ayuu yiri gaashaanlihii oo qosol la fiqfiqleynaya, “cid uu u dhashay iyo cid uu ka dhashay ma jirto. Xitaa xigtadiisa soke ayaa iska fogeysa—oo yasto, haruufto, durto, docodeyso, sirta beesha ka qarsato, dilkiisana aan ka nixin. Gunaanadku waa: qorshahan waxa meel-marinayo isla Soomaalidee yaa ii ballan-qaadaya taageero? Xag dhaqaale iyo xag siyaasadeedba? Gudaha iyo dibeddaba?”
“Horta mid ku bishaareyso,” ayuu yiri wasiirkii arrimaha dibedda, “IGAD aniga ayaa mashruucan ka gadaya, oo ka dhaadhicinaya. Beesha caalamkana waxaa arrinkan ka dhaadhicin doono raysulwasaaraha. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobayna waxaa noo jooga safiirkan—oo ka dhaadhicin doona. Gaashaanlow adiguna waxaad u xilsaaran tahay wixii quseeya hubeynta dagaal-oogayaasha, dhisidda xarumo sirdoonkeennu ka hawlgalo, iyo kaalmeynta ragga Soomaaliyeed ee doonaya in ay dhistaan maamul-goboleedyo naga amar-qaato.”
“Mudanow,” ayuu yiri gaashaanlihii, “waxaa igu ballan ah in aad aragtid Soomaaliya oo u jarjaran maamul-goboleedyo—oo qabiil qabiil, jilib jilib, ilmo-adeer ka ilmo-adeer, iyo xitaa labadii walaalaha aheydba aan u kala jebiyo maamulo danaheena noo fuliyo.”
“Kulligiin mahadsanidiin,” ayay tiri haweenaydii ka socotay xafiiskii raysulwasaaraha Itoobiya, “waxaan talooyinkiinna u gudbin doonaa raysulwasaaraha—oo isaga ayaa tallaabo habboon ka qaadi doono arrimahan. Arrinta uu gaashaanlaha ka dhawaajiyay ee ah taageero gudaha iyo dibeddaba, ha welwelin gaashaanlow. Sida aan u hubo wadkeyga ayaan u hubaa in badi beesha caalamku ay saxiixi doonto taladii dhankeenna ka timaadda ee Soomaaliya ku aaddan. Shirku wuu xiran yahay.”
Waxa ay raggii iyo haweenaydii shirayay uruursadeen xaashiyihii iyo qalimadii miiska u daadsanaa, oo ku riteen boorsooyinkoodii. Qolkii shirka ayay hal mar ka wada dareereen.
Islaantii waxa ay shubeysay dhowr koob oo shaah ah. BBC-da ayaa ka shidneyd buulkeeda.
Waxa heshiis kama danbeys ah laga gaaray shirkii dib-u-heshiisiinta ee muddooyinkan danbe ka socday xarunta magaalada Nairobi ee dalka Keenya. Waxaa la soo dhisay dawlad cusub oo ku-meel-gaar ah. Hayeeshee waxaa natiijadii ka soo baxday shirkaasi isla markiiba qaaddacay rag ka dhex muuqda siyaasadda Soomaaliya—kuwaas oo ku dooday in si xaq-darro ah loo qeybsaday kuraasta, yirina looma dhamma awood-qeybsiga.
Islaantii inta ku faraxday qeybta hore ee warka ayay misana niyad-jab ka muujisay markii ay maqashay qeybtii danbe. Rag meesha ka ag-dhawaa ayaa u riyaaqay warkii, kuna farxay in la mucaaraday natiijadii shirka.
“Ragannimo iga dheh,” ayuu yiri mid buulka ka shaaheynayay.
Islaantii inta eegtay ninkii oo farxad la weyraxsan ayay billowday in ay kirligeedii babisato.
“Dad aan mabda’ qaran laheyn,” ayay tiri iyadii oo isla hadleyso, “dal uma daneeyaan, dadkooda uma diir-naxaan, shisheeyahana isu dulleeyaan. Tolow duulkan Soomaaliyeed goormay ka xoroobi doonaan ereyga ‘looma dhamma’?”
Waxaa isla caweynaya safiirka Itoobiya ee Kenya iyo xoghayihiisii. Labo dhalo oo qamri ah ayaa miiska u saaran—iyo koobab dhalo ah oo gudaha wax lagu shubto ay kor u kacsan tahay, lehna meel gacanta lagu qabsado oo sidii usha u dhuuban iyo sal wareegsan oo miiska qabsanaya.
“Horta mid xasuuso,” ayuu yiri safiirkii, “xukuumaddii Soomaaliyeed ee dadka cabburin jirtay waxay si kama’ ah inoo sameysay asxaan weyn.”
“Asxaan noocma ah?” ayuu yiri xoghayihii oo sigaar afuufaya.
“Soomaalida waxaa cilmi-nafsi ahaan ka dhaadhacsan,” ayuu yiri safiirkii, “in madaxa looga taagnaa, oo la cabburin jiray. Taa waxay dhalisay in Soomaaliga maanta jooga uu ka aamin-baxo Soomaaliga kale—lama tashado, la lamana tashado. Taa waxaa u sii dheer, kii is-bidaya tol iyo deegaanba waxaa ku qafilan madax noqo oo mar danbe yaan lagu cabburin.”
Waxaa si yasid leh carab-jilqin u sameeyay xoghayihii.
“Isku soo duub,” ayuu yiri safiirkii, “fikirka noocaas ah oo salka ku haya cabburintii xukuumaddii hore ayaa waxay maanta annaga Itoobiya ahaan fursad inoo siisay in uu Soomaaligu nagu kalsoonaado—oo talada naga qaato, talada walaalkiisana ka aamin-baxo, kuna gacan-seero.”
“Waa arrin soo daahday,” ayuu yiri xoghayihii, “waa riyadii Boqor Menelik in ka badan qarni iyo bar ka hor—laakiin annaga ayaa sharaftaasi helnay.”
“Adiga mid aan ku xasuusiyo,” ayuu yiri safiirkii, “Boqor Menelik iyo cid kale sheekada ka weyn—Soomaalidu ma ahan dad sahal lagu geli karo. Hayeeshee qilaafka dhexdooda yaalla ayaa boqonaha gooyay. Inta ay iyagu isku sii jeedaanna waxaa nooga hirgalay mashaariic faa’iido badan leh.”
Waxa ay safiirka Itoobiya iyo xoghayihiisaba isla dhaceen koobabkii qamrigu ugu jiray—qosol iyo isu hambalyeyn galeen.
“Hambalyo Itoobiya!” ayuu yiri safiirkii, “bal eeg faa’iidada koowaad, ma jirto cid hadalhaysa dhulka Soomaali Galbeed.”
“Hambalyo, Itoobiya!” ayuu yiri xoghayihii.
“Faa’iidada labaad,” ayuu yiri safiirkii, “in yar oo welwel ah naguma heyso deked la’aanta na haysata—oo maanta dekedaha Soomaaliya ayay badeecaddu nooga soo degataa. Haatanna Jabuuti ayaaba noo oggolaatay in la dhiso waddo tareen oo isku xira labada dal si rarka badeecaddu inoogu soo maro.”
“Hambalyo, Itoobiya!” ayuu yiri xoghayihii oo dhaladii qamriga kor u qaadaya.
“Faa’iidada saddexaad,” ayuu yiri safiirkii, “waa sirdoonkeenna oo gudaha ugu jira ubucda Soomaaliya, oo daqiiqad daqiiqad noogu soo tebiyo wixii xog ee muhiim ah.”
“Hambalyo, Itoobiya!” ayuu la soo booday xoghayihii.
“Faa’iidada afaraad,” ayuu yiri safiirkii, “waa adduunka oo nooga danbeeya talada xal-u-helidda
Soomaaliya—oo cid aan uga heybaysaneyno ma jirto arrimaha Soomaaliya.”
“Faa’iido shanaad,” ayuu yiri safiirkii, “oo aan ku qabno burburka Soomaaliya waa in aan ku guuleysannay dhisitaanka maamul-goboleedyo ku mashquulay sare-u-qaadidda calanka dawlad-goboleedkooda halkii ay ku mashquuli lahaayeen calankii qarankooda Soomaaliyeed.”
“Faa’iidada lixaad,” ayuu yiri safiirkii, “waa hoggaamiyaasha Soomaalida oo kalsoonida ka luntay—oo taageeradeenna ku tiirsan xag siyaasad iyo xag cudud militariba.”
Safiirkii ayaa aamusay, oo qamri ka shubtay dhalo.
“Ma intaas bay kaaga eg tahay?” ayuu yiri xoghayihii.
“Bal ii kaadi,” ayuu yiri safiirkii oo qurqurinaya qamrigii, “dhuunta ayaa i qallashayee.”
“Warkaasaa i gala,” ayuu yiri xoghayihii, “lix faa’iido keliya ma iyadaa nagu filan? Waaba qasaaro oo kalee!”
“Mid ogow,” ayuu yiri safiirkii, “arrintan yeysan kaa farxin—wuxu waa adduun,e.”
“Macnahaa?” ayuu yiri xoghayihii oo yaabban.
“Quwadaha hadda nagu daneysanayo,” ayuu yiri safiirkii, “sida ay maanta Soomaaliya u galayaan ayay annagana nagu sameyn karaan berrito. Marka wax la kala har. Laga yaabaa in ay Soomaaliya berrito hoggaamiso qaddiyadda Afrika oo dhan—oo aan mudanno.”
Waxaa qosol yasid ah ku dhuftay xoghayihii illaa ay ka timid illin.
“Weli dhallinyaro ayaad tahay,” ayuu yiri safiirkii, “aan afartanka gaarin.”
“Mudanow maad ii waddid,” ayuu yiri xoghayihii oo qoslaya, illintana iska tiraya, “guusha iyo faa’iidooyinka Itoobiya u soo hoyatay, aniguna aan hambalyada soo diree?!”
“Faa’iidada todobaad,” ayuu yiri safiirkii oo la yaabban dhoohanaanta xoghayihiisa, “waa Soomaaliga oo aan maanta u danqaneyn ciddii ay ciidamadeennu disho gar iyo gar-darro.”
“Faa’iidada siddeedaad,” ayuu yiri safiirkii oo afuufaya qaac sigaar, “waa jiilka soo koraya ee Soomaalida oo ku indho-qaaday dawlad la’aan iyo qaxootinimo. Waxaa ku adkaaneyso inay fahmaan in uu ka maqan yahay dal la oran jiray Soomaaliya.”
“Hambalyo, Itoobiya!” ayuu yiri xoghayihii oo jidbeysan, oo misana ku celiyay, “Hambalyo!”
“Faa’iidada sagaalaad,” ayuu yiri safiirkii, “waa….”
Safiirkii oo hadalkii wada ayaa waxaa soo dhacay telefoonkiisii gacanta. Waxaa u soo qormay magaca ICG Secretary—oo ah ururweynaha International Crisis Group.
“Tolow maantana maxay rabaan?” ayuu yiri safiirkii oo eegaya telefoonka.
“Yaa waaye?” ayuu yiri xoghayihii.
“Waa gumeystihii shalay,” ayuu yiri safiirkii, “daneystaha maanta, iyo jirjirroolihii berrito.”
“Maxaa ka macno leh,” ayuu yiri xoghayihii oo sigaar shidanaya, “haddii uu dal berrito isbeddelo, quwadaha soo kacaya ayaan xiriir iskaashi la sameynaynaa sida Shiinaha iyo Hindiya.”
“Dhallinyaro,” ayuu yiri safiirkii oo telefoonka la sii dhaqaaqaya, “noloshu waa u rajo iyo riyo.”
Xoghayihii waxa uu dhaladii qamriga ka gororsaday intii ugu danbeysay, safiirkiina waxa uu taagnaa meel duruqsan isagoo ku hadlayay telefoonkiisii.
Cawil iyo odaygii waxa ay ku soo leexdeen buulkii yaraa ee ay islaantu shaaha ku iibin jirtay.
“Anigu halkan ayaan nafta ku nasinayaa,” ayuu yiri odaygii oo fadhiisanaya, “oo gabadhan baan Soomaali iska fahannaa ee wiilyahow nabad iyo warsan.”
Cawil inta qoslayuu u sii gudbay biibitadii dhinaca ku heysay buulkii islaanta.
“Sheekaa iigu kaa harsan,” ayuu yiri Cawil, “waxaan isha soo marinayaa wixii warar ahee lagu soo qoray shabakadaha Soomaalida. Waanse kuu soo noqon, oo ka sii feker su’aashayda.”
Islaantii waxay shaah u soo shubtay odaygii.
“Su’aal noocma ah?” ayay tiri iyadoo shaahii siineyso odaygii.
“Mayee wuxuu rabaa,” ayuu yiri odaygii, “inuu ogaado haddii jirto wax ay Soomaali u dhan tahay oo ay ka mideysan tahay.”
Cawil waxa uu dul fadhiistay kombiyuutarka—warkii dalkana daalacanayay. Isagoo akhrinaya warkii ayuu maqlay buuq iyo bulaan ka dhacayay bannaanka. Dheg jalaq uma uusan siinin. Oo sii watay akhrintii wararka iyo faallooyinka siyaasadeed.
Buulkii habarta ayuu Cawil soo maray—oo ku soo noqday odaygii. Mise odaygii ha sheegin, oo ma joogin.
“Eeddo aaway odaygii?” ayuu ku yiri islaantii buulka laheyd.
“Miyaadan ogeyn waxa ku dhacay odaygii?” ayay tiri islaantii oo wiilka ku eegaysa weji murugeysan.
Cawil hadalkii ayaa ku dhegay. Afka ayaa kala tagay. Oo garaaca wadnihiisaa kordhay.
“Odaygii istaagga ayuu ka dhacay,” ayay tiri islaantii, “oo uu miyir beelay. Gaari-gacan ayaa lagula cararay oo cisbitaalkaa loo qaaday.”
Cawil wuu dhaqaaqi la’ yahay—oo sidii in dhulka lagu nabay ayay cagihii buur kala cuslaadeen. Inta awood iska baaray, oo dhabarka jeediyay, ayuu hal mar buulkii uga baxay sidii leeb la genay. Islaantii waxay u soo jeesatay barrnaamij gaar ah oo ka socday BBC-da.
Intaasi waxaa ku dhan wararkii naga soo gaaray dunida. Haatanna aan u leexanno barnaamij qaas ah oo ku saabsan waxyaalaha ku soo kordhay dalka Soomaaliya. Dhageystayaal tan iyo intii ay socdeen dagaallada sokeeye, sirdoonka adduunka raad muuqda kuma aysan laheyn arrimaha Soomaaliya. Beryahakanse waxaa soo if-baxaya kaalinta muuqata ee ay sirdoonku ku leeyihiin geyiga Soomaaliya. Sirdoonka la sheego in ay Soomaaliya ka shaqeyso waa CIA-da Mareykanka, Scotland Yard, sirdoonka Itoobiya, kuwa al-Qaacida, kuwa al-Shabaab, kuwa NSS ee dawladda ku-meel-gaarka ah. Waxaa iyana sirdoon leh maamul-goboleedyada sida PISTA uu ka hawl-gasha Puntland iyo sirdoonka Somaliland. Dhawaan ayay aheyd markii ay Kenya u qeylo-dhaansatay dawladda Israa’iil inay ka caawiso qatarta kaga iman karta Shabaabka.
Haddaba dhageystayaal waa maxay dareenkiinna ku aaddan arrimahan isgarab-ordaya ee haatan ku soo kordhay xaaladda dalka Soomaaliya?
Waxaa yeeray telefoonkii BBC-da.
“Halow, waa BBC-da. Qadka ayaad ku jirtaa—fikirkaaga dhiibo adduunweynaha ayaa lagaa wada dhageysanayaa.”
Islaantii waxa ay demisay BBC-da, dhabannadana gacmaha saaratay.
“Dad kala dan ah,” ayay tiri islaantii, “waxay u nuglaadaan duullaan shisheeye. ‘Looma dhamma’ sidaan ugu jirnay ayaan noqonnay bahalo-galeen—oo waa kaa jaajuus nooc walba leh inoo yimid. Waa yaabka yaabkiise, halka ay Soomaalidu u kala daadatay ereyga ‘looma dhamma’ ayuu adduunkuna ku midoobay isla ereygaasi oo maalin walba dawlad cusub ayaa middiyaha u soo soofeysata hilibka bisil ee Soomaaliya sidii iyagoo uurka ka leh, ‘Looma dhamma ku-lug-lahaanshaha arrimaha Soomaaliya. Bal yaynaan annaguna ka qadin qeyraadka dalkan baylahda ah.’ Allow dalkeenna samatabixi looma kala harin,e.”
New York, Mareykanka
Waxa uu sarkaal ka tirsan Golaha Ammaanka akhrinayay go’aanno ka soo baxay shirkii IGAD.
“Ku: Golaha Ammaanka, Midowga Yurub, Midowga Afrika, Beesha Caalamka
Haddii aynu nahay IGAD waxa aynu ku talinaynaa qodobadan soo socda si xal loogu helo arrimaha Soomaaliya.
Kow, waa in ay beesha caalamku isku meel uga soo jeesataa argagixisada ka faa’iideysanaysa dawlad la’aanta Soomaaliya.
Labo, waa in la xoojiyo ciidamada nabad-ilaalinta ee AMISOM xag dhaqaale, xag siyaasad, xag qalabeyn, iyo xag niyadba.
Saddex, waa in Golaha Ammaanka uusan dabcin cunaqabeynta hubka ee Soomaaliya saaran. Haddii kale waxa halis gelaya amniga geeska Afrika iyo danaha beesha caalamka maadaama uu hubkaasi gacanta u geli karo argagixisada caalamka ee ka hawl-gasha Soomaaliya.
Afar, waa in la dhiirro-geliyo ololaha NATO iyo beesha caalamka ay kula dagaalamayaan burcadbadeedda qatarta ku ah ganacsiga iyo isdhexgalka adduunweynaha.
“Mudanayaal iyo marwooyin,” ayuu yiri sarkaalkii shir-guddoominayay kulankii Golaha Ammaanka, “maxaa talo ah? Oo aad ka oraneysaan qodobadan?”
“Waa qodobo caqli-gal ah,” ayay tiri sarkaalad ku jirtay shirka.
“Waan ku raacsanahay,” ayuu yiri sarkaal dhinaceeda fadhiyay.
“Aniguna sidoo kale,” ayuu yiri sarkaal kale oo gadaal fadhiyay.
“Haddaba,” ayuu yiri sarkaalkii shir-guddoominayay shirka, “gacanta ha taagto ciddii dooneysa in qodobadan la ansixiyo.”
Marka laga reebo labo dawladood oo ka aamusay, saddex iyo tobanka kale ee xubnaha Golaha Ammaanka waxay isku raaceen in la ansixiyo qodobadii go’aankii IGAD. Shirkii si rasmi ah ayuu u xirmay, oo lagu kala dareeray.
Waxaa si gooni isu soo raacay labo ka tirsaneyd saraakiishii shirka joogtay. Waxay u dhasheen mid ka mid ah shanta dawladood ee xubinta joogtada ah ka ah Golaha Ammaanka. Elafeetar ayay hoos u raaceen.
“Waa ii farxad,” ayuu yiri mid, “in la isku raacay qodobadaan. Shirkadda walaalkeyga ayaa waxay qandaraas ku heysataa hawlo xasaasi ah oo Soomaaliya ka socdo.”
“Aniga xitaa,” ayuu yiri kii kale, “oday soddog ii ah ayaa qandaraas la galay Qaramada Midoobay. Oo wuxuu Soomaaliya ka wadaa hawlo lacag ba’an ku baxdo—oo wuu ka taajiray.”
“Sax waaye,” ayuu yiri kii koowaad, “Darwin xikmaddii laga dhaxlay ayaa aheyd survival of the fittest.”
“Waa run,” ayuu yiri kii labaad oo u riyaaqaya, “ninkii awood leh ayaa nolosha ku waara.”
“Kuwo badanna oo Soomaalida ka mid ah,” ayuu yiri sarkaalkii koowaad oo qoslaya, “waxay ku qanceen in ay qurbaha ceyr ka qaataan—shirkadaheenana waxay ku xisaabtamayaan in saacaddii ay Soomaaliya ka faa’iidaan malyuumaad doollar.”
Waxa qosol isku cammiray labadii sarkaal ee ka soo baxay shirkii Golaha Ammaanka.
“Talada dalka,” ayuu yiri sarkaalkii labaad, “haddii ay Soomaalida u wareegto, way na af-qaban doonaan, oo shirkadaheenna cubta gelin doonaan.”
“Talo iyo Soomaali?” ayuu yiri sarkaalkii koowaad, “hal qarni ayaa ka xigto inay Soomaali baraarugto.”
“Hal qarni kama xigtee,” ayuu yiri sarkaalkii labaad, “waxaa ka xigo iyaga oo isku helo rag hunguri ka sooman; qabyaalad ka xoroobay; faragelin shisheeye iskala weyn; madaxtinimo ka himmad weyn; kuna baraarugsan waaqaca qarnigan cusub; isku kalsoon oo oggol in la dhaliilo haddii ay qaldamaan; oo ka faana inay xoog iyo qori caariddiis wax ku maquuniyaan—oggolna in ay u dhintaan qaddiyad Soomaalinimo.”
“Qaddiyad noocma ah?” ayuu yiri sarkaalkii koowaad, “ma middii Shabaabka oo kale?”
“Soomaaliduba way ogtahay,” ayuu yiri sarkaalkii labaad, “in aysan Shabaab laheyn qaddiyad Soomaalinimo—oo ay yihiin maafiyadii diinta iyo dalka.”
“Haddaba waayahaye,” ayuu yiri sarkaalkii koowaad, “qaddiyad noocma ah?”
“Ma aqaan,” ayuu yiri sarkaalkii labaad, “waa arrin u taalla Soomaalida inay abuuraan qaddiyad Soomaalinimo—annagu hawsha noo taallo waa in aynu ka hortagnaa oo fashilino ciddii isku daydo inay abuurto qaddiyad Soomaalinimo.”
“Ka hortaggu wuu badan yahaye,” ayuu yiri sarkaalkii koowaad, “noocee ka waddaa? Ma ciidan Qaramada Midoobay baa loo dirayaa? Mise NATO ayaa sidii Liibiya ku duuleyso? Mise hab kale ayaad og tahay?”
Waxaa qoslay sarkaalkii labaad.
“Isdeji,” ayuu yiri, “labo siyaabo ayaa looga hortagayaa. Kow, waxaa arrimahaas naga kaafisa Itoobiya oo xubin firfircoon ka ah IGAD—deetana waxay la kaashaneysaa Midowga Afrika.”
“Warkaasaa i gala,” ayuu yiri kii koowaad, “bal habka labaadna soo daa.”
“Haddii uu nin waddanka jecel noo soo dhuuntana,” ayuu yiri ninkii labaad, “waxaa lagu sasabaa oo loo ballan-qaadaa jago ama hunguri.”
Labadii sarkaal iyaga oo sidii u sheekeysanaya ayay ka soo degteen elafeetarkii, kana baxeen sartii weynayd ee ay ku shirayeen.
Wuxuu Cawil orod ku soo galay cisbitaalkii—oo isagoo hinraagayana isdhex-taagay qolkii uu odaygu jiifay. Mise waxa lagu qabtay qoryo AK-47.
“Istaag!” ayaa cod qeylo dheer ah yiri. “Istaag! Ha nuuxsan!”
Qolka waxa dhex joogay toboneeyo Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ah iyo sarkaalkii iyaga watay. Cawil sas iyo filanwaa ayuu isha ula raaci waayay wejiyada ciidankii qoriga ku qabtay. Oo rag baa garba-duub isla durbadiiba u xirxiray, dhulkana seexiyay. Saa waxaa sariirta korkeeda ka soo jalleecay odaygii oo huwan go’ shaal ah. Wuxuu la sheekeysanayay sarkaalkii watay ciidanka oo ku fadhiyay sariirta geeskeeda.
“War raggu geesisanaa,” ayuu ku kaftamay odaygii oo dhoollacaddeynaya, “war adeerayaalow wiilka ka leexda.”
Askartii waxay qoriga ka dul qaadeen Cawil oo dhulka warnaa.
Odaygii waxa uu isha la wada raacay askartii oo u badneyd dhallinyaro.
“Waryaada,” ayuu yiri sarkaalkii watay ciidanka, “ma maqasheen ninkii ku jiray Naafada Ciidanka Xoogga Dalka ee diiday in loo qoro mushaar?”
Ciidankii la socday sarkaalka waxay si fiican u eegeen odaygii. Cawilna isha ayuu la raacay.
“Waa kan hortiinna jiifo,” ayuu yiri sarkaalkii, “idiinma dhinna. Magaciisu waa Korneyl Xiddig.”
Waxaa indhaha taagay Cawil—kuna baraarugay cidda uu dhab ahaan u yahay odaygu.
“Adduunow xaalkaa ba’,” ayuu yiri odaygii, “markii aan idinka idinla ekaa, toban nin oo feero waaweyn oo hubeysan ayaan laad iyo looto kaga qaadi jiray hubkooda. Idinkana wiil dacas go’an oo aan hub sidan ayaad toban qori ku fooririneysaan. Cajiib.”
“Korneylow,” ayuu yiri sarkaalkii watay ciidanka, “adiga waxaa Ruushka kuu dirsaday qaran Soomaaliyeed oo lagu soo siiyay tababar komaandoosnimo; wiilashanna waxaa laga soo qortay xerooyinka qaxootiga, oo taangiyada AMISOM ayay magan u yihiin.”
“Sidaasaa u danbeysay dalkayagii,” ayuu cod qushuucsan ku yiri odaygii, “sidaasaa u danbeysay dalkayagii.”
Waxa uu odaygii gacanta salaam ugu taagay Cawil oo weli wejigiisa laga dheehan karay sas, anfariir, farxad, amakaag, iyo shucuur is wada qilaafsan.
“Korneyl Xiddigow martina way kuu joogtaa,” ayuu yiri sarkaalkii, “bal Allaha ku caafiyo waan kaa soo war dooni doonaaye.”
Waxaa sare u kacay sarkaalkii, oo madaxa saartay koofiyad.
“Maandhow,” ayuu yiri odaygii, “hal mid asxaan iigu samee.”
“Korneyl Xiddig,” ayuu yiri sarkaalkii, “haddii aad i tiraahdo ilaaladaada iiga tag, waan kaa tegayaa. Haddii aad i tiraahdo madaxweynaha iigu keen cisbitaalka, waan kuugu keenayaa. Haddii aad i tiraahdid waardiye qaas ah caawo iga naqo, waan kaa noqonayaa shaqsi ahaan. Wax sheego, geesiga dalkow!”
Cawil waxaa wejigiisa ka muuqday dheeh farxadeed. Oo wuxuu isku cabburinayay dhoolla-caddeyn.
“Codsigeygu waa sahal,” ayuu yiri odaygii oo muusoonaya. “Mar danbe qolkayga ha la soo gelin ciidan ilaalo ah.”
“Waa ballan,” ayuu yiri sarkaalkii, “sidoo kalena haddii uu kuu soo galo qof jilbaab iyo indho-shareer xiran waa aniga ee i ogow.”
“Maxaa?” ayuu yiri odaygii oo yaabban.
“Hee ilaalo la’aan,” ayuu yiri sarkaalkii, “yaa iga qarinaya kuwii habaaranaa ee Shabaabka?”
Waxaa hal mar wada qoslay odaygii iyo ciidankii la socday sarkaalka. Cawil indho-taag ayaa ka soo haray.
“Ku talagal,” ayuu yiri odaygii, “sir kuuma qarsoona,e. Askartaadiina ku maqashay; wiilkan aniga ii yimidna ku maqal.” Waxaa wada qoslay ilaaladii sarkaalka—iyo Cawil.
“Nabadey, Korneyl Xiddig,” ayuu yiri sarkaalkii, “Allaha ku caafiyo.”
“Aamiin,” ayuu yiri odaygii, “aamiin.”
Waxa qolkii cisbitaalka ka baxay sarkaalkii iyo ilaaladiisii.
Cawil waxa uu sugay illaa ay ka baxayeen ciidankii.
“Magac-laawe, yaah,” ayuu yiri Cawil oo muusoonaya, “waad ii dhuummatayee.”
“Weli magacaygu waa sidaa,” ayuu yiri odaygii, “weli waxaan ahay Magac-laawe.”
Waxaa qoslay Cawil, oo madaxa luxay.
“Soo fadhiiso,” ayuu yiri odaygii.
Cawil waxa uu salka dhigay meeshii uu ka kacay sarkaalkii.
“Sidee dareemaysaa,” ayuu yiri Cawil, “maxayna kugu sheegeen?”
“Waan fiicnahay,” ayuu yiri odaygii, “dhiigga ayaa kugu kacay ayay igu yiraahdeen.”
“Ma su’aalaheyga,” ayuu yiri Cawil oo qoslaya, “baa kugu kiciyay dhiigga?”
Odaygii wuu muusooday.
“Allaha ku caafiyo,” ayuu yiri Cawil, “waan ogaa inaad aheyd oday nooc kale ah.”
Waxaa ilbaabka soo garaacday kalkaaliso da’ yar.
“Adeer is diyaari,” ayay tiri, “shaybaarka ayaa laguu kaxeynayaa mar dhow.”
Cawil waxa uu eegay gabadhii—illaa ay ka sii libdheysay.
“Maad guursatid?” ayuu yiri odaygii oo eegaya Cawil.
“Oo haddaba ma adigaa og,” ayuu yiri Cawil, “inaan xaas leeyahay?”
“Kor waayeel waa wada indho,” ayuu yiri odaygii, “indhahaaga ayaa marqaati ka ah doobnimadaada.” Waxaa qoslay Cawil.
“Adeerow,” ayuu yiri Cawil, “bal intaanan shaybaarka laguu kaxeynin, su’aashaydii iiga jawaab.”
“Oo aheyd?” ayuu yiri odaygii.
“Soomaalida maanta joogta,” ayuu yiri Cawil, “wax ay u dhan tahay oo ay ku mideysan yihiin ma jirtaa?”
Odaygii kor ayuu u soo hinqaday, oo jiifka ka soo fadhiistay.
“Nasiib-darro,” ayuu yiri odaygii, “Soomaalida maanta waxa ay u dhan tahay ereyga ah ‘looma dhamma’.”
Waxaa qolkii ku soo noqotay kalkaalisadii. Oo ay sheybaarka u kaxeysay odaygii oo cuksanaya garabkii Cawil.
Qoraaga kala xiriir:
19/05/2014 Sheeko GaabanMukhtaar Cabdi Sheekh "Bulshaawi"maamule
Waa sheekho aad u xiiso badan oo ka warramaysa dhibka, rafaadka, iyo hadimooyinka ay dadka dibadda ka yimadaan ku hayaan dhalinyarada is jecel ee dalka iyo siday ugu nugul yihiin waalidku dadka dibadda ka yimaada ee aan loo tix galin jacaylka lamaanaha ee wiilka iyo gabadha iyo guusha uu ku danbeeyo jacaylka runta ahi.
Waxaa qoray Mukhtaar Cabdi Sheekh (Bulshaawi)
Sheekadani waxaa ay ka hadlaysaa wanaagga jacaylka marka labada qof raalida isku yihiin iyo sidayna waalidku u ixtiraamin jacaylka hablaha ee loogu qasbo nin aanay garanayn oo lagu siinayo dibadda ayuu ka yimid ama waa lacaglay ee aan loo meel dayn mustaqbalka inanta kuna kalifaysa wiilkay is jeclaayeen inuu dalkii iskaga tago oo uu badda u galo si isna barri loo yidhaa dibada ayuu ka yimid oo waa lacaglay…
Waa sheeko aad ka dheehan karto qoraal xeel dheer oo u socota iskugunadaba xidhiidhsan sidii filim oo kale ayna tafatireen qoraayada Soomaalida kuwooda ugu caansani kuna dheehan tahay jacayl iyo murti badani, waxaanay ku bilaabantay sidan.
Waxay ahayd goor casar gaaban ah abaaro shantii galabnimo, cadceeduna sii dhacayso, dhulkuna uu helay roob shuux ah, dhirtuna u badan tahay akhtar ka dharagtay roobkii guga, dadkuna wada qurux badan yihiin aad moodidna inay jawiga wanaagsan iyo dadku is heleen.
Waxaa magaalada Hargeysa ka caan ah in ay galabtii dhalinyaradu u soo dhaadhacaan suuqa, Mustafena waxa uu kala mid yahay dhalinyarada magaalada. Wuu soo kacay, maydhay, labbisna kiisii ugu qurx badnaa soo xidhay. Waxaa uu u soo dhaqaaqay goobtii
uu ka raaci lahaa baska, goobta oo aad u dad badan dadka xaafaduna ay inta badan ka raacaan baska, iyo basaska oo buuxa ayaa u sahlay in dhalinyaro iyo wayeel ay isku soo gaadhaan. Cabbaar marki uu soo socday, waxaa uu soo gaadhay goobtii baska, markii uu in dhoor ah taagnaa ayaa waxa uu isha la helay gabadh Ilaahay qurux u dhameeyay, caddaan xigta, dhuubnayn aan buurnayna, gaabnayn aan dheerayna habka labbiskana aad u qurux badan yahay labbis isku eeg oo basali iftiimaya ah, wali kama uu jeedsan Maryan, laakiin Maryan ayaa dareentay oo yara dhaqaaq joogsatay. Mustafe wali wuu ku maqan yahay oo waxa uu jecel yahay in ay is bartaan waayo waxaa uu ogyahay in aanay magaalada cidna iska garanayan oo uu dhawaan ka imid magaalada Burco. Waxay halkii baska in dhoor ah taagnaayeen jeclaana inuu barto inanta laakiin uu ku dhiiran waayay inuu la hadlo ayuu yimid baskii oo ay raacday Maryan, kana buuxsamay Mustafe dadka oo dumar u badnaa awgii.
Mustafe aad ayuu uga niyad jabay iyaga oon is baran inay halkaa ku kala tagaan, baskii labaad ayuu iska raacay isaga oo niyad jabsan, hawshii suuqa uu u tagay oo ahayd inuu abtigii la kulmona soo dhamaystay, isla markiiba wuu isa soo rogay oo xaafaddii ayuu ku soo noqday, ma uu baydhbaydhin ee waxaa uu toos u galay qolkiisii, markii uu sariirtii ku jiibsadayna waxaa maskaxdiisa ka dhexguuxayay kuna sawirnaa gabadhii uu maanta soo arkay. Mustafe daqiiqado yar ayuu isku badalay kuna noqday qof jacayl la il daran, dareenkiisii iyo ruuxdisii oo dhamina raacday Maryan.
“Ballan maaha jacaylku bandhig laysugu baaqee, waa ishaa biligtaada wax boggaaga ku beerma!”
Isagoo sidii ah ayuu waagii u baryay.
Mustafe waxaa uu dhigtaa iskuulka Faarax Cumar. Markii uu u bohoolay jihadi iskuulku ka xigay ayuu goobtii safka iskuulka lagu galayay ku arkay gabadhii uu shalay arkay. Mustafe arrin kaga sii daran intii hore oo waxaa uu baahi wayn u qabaa inuu helo cid uu lawadaago jacaylkan ku kaliyaystay…
Maryan waa fasalka kowaad ee dugsiga sare, Mustafena laba fasal ayuu ka sarreeyaa oo waa ka saddexaad.
Maalintaas markiii uu galay fasalkii waxa uu bilaabmay warwar iyo fakir aad u xeeldheer oo ku salaysan jacayl uu Maryan u qaaday, cidna aanay u ogayn waxa uu ku tiraabayay erayo jacayl ah:
dawadii naftaydaay daryeel naftan
dareenkaga mooye mid kale maya…
Maalintaas oo dhan muu dhigan iskuul ee waxa dhamaan jidhkiisa iyo maskaxdiisaba saaqay jacayl ku kaliyaystay, kuna hamiyay inay mar uun is calman donaan.
Markiii uu xaafaddii tagay, uuna qadeeyay, ayaa haddana uu halkii ka billaabay lakiin imika waxa uu ku fikirayaa sidii uu ku heli lahaa Maryan ama meel uu kala xidhiidho, meel dheerna ka ma uu doonan ee waxaa uu la xidhiidhay inan ay saaxiib yihiin oo la yidhaa Faysal oo ay iskuulkana isku fasal yihiin xaafaddana wada daggan yihiin.
Faysal waa wiil aad u furfuran oo dhamaan dhalinyarada xaafaddana ay is yaqaanaan, wiilal iyo gabdhaba.
Markii uu iskuulkii usoo baxay ayay Faysal dariiqa ku kulmeen laysna salaamay, kadib in dhoor ah markii ay kala aamusnaayeen ayuu Mustafe calool adaygay, kuna dhiiraday inuu waydiiyo wax cinwaan ah hadduu ka hayo Maryan, maadaama uu isagu uga war roon yahay, Faysalna u ballan qaaday inuu siin doono marka la rawaxaayo, kana cudur daartay inaanu imika hayn. Mustafe waxa gashay yididiilo inuu helayo Maryan, helayana cid la wadaagta jacaylka ku kaliyaystay.
Rawaxaadii goor ay tahay ayuu Mustafe soo hor istaagay iskuulka oo uu dagdag uga soo baxay sii uu faysal u arko marka uu soo baxo, se waxa uu arkay maryan oo ku dhexjirta hablo badan lays eeg laysna garay lakiin wax wada hadal ahi majiraan inyar kadib ayuu soo baxay Faysal, waxay wada qadeen dariiqa dheer ee loo maro xafadooda, kaftan badan iyo sheeko aad u macaan oo aywada wateen ayaa waxa ka soo gaadhay xafadahoodi markii ay sii kala hadhayeen ayuu Faysal Mustafe ku yidhi,
“Saxiib waxaad iga sugaysay numbarkii Maryan.”
Uguna jawaabay, “Haa…”
“Saxiib waa kan ee qoro.”
“Waad mahadsan tahay. Waxaan abaalkaaga ku gudana garan mayo.”
“Maya saaxiib intaas iyo in kabadanba waa laysku leeyahay.”
“Waayahay saaxiib ee waa inoo barri inshaa Allaah.”
Farxad aan waayadaa lagu arag ayaad ka dheehan karaysay wajigiisa Mustafe, waxaana uu la dhacsanaa sida yar ee uu ku soo ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬helay nambarka Maryan ileen qofay wax ka awood wayni wataan meel walba uu la galaye waxa uu u samray inuu heli doono.
Kadib markii uu gurigii tagay ayuu qadeeyay isagoo faraxsan aad moodidna gabadhuu u bahnaa inay is heleen ayuu waxa uu tagay sariirtiisii waxaana uu billaabay fakir uu siduu ula xidhiidhi lahaa ka fikiraayo iyo siduu iskugu sheegi lahaa aakhirkiina waxa uu go’aansaday inuu u qoro farriin kuna sheegto baahidiisa, waxa uu qoray farriintii oo uu aad uga shaqeeyay kuna sheeganaayo jacaylkiisa kana codsaday inay la qabato ee aanay ku diidin.
Markii uu diray farriintii waxa maskaxdiisa ka bixi wayday bila ay la socotaa qof kale amaba aanay adiga kuugu qanacsanayn waxa uu fikiraba waxa uu habeenkaas seexday isagoo aad moodid inay ku tidhi kuma rabo amaba kula ma qaban karaayo jacaylkaan.
Maryan waxa ay heshay fariintii uga timid Mustafe, garatay markay akhriday cidda uu yahay wiilka u soo qoray fariintan lakiin aanay u lahayn aqoon durugsan wiilkan soo calmaday fikir dheer dabadii waxay nafteeda ku qancisay inay farriin u qorto ay ugu jawaabayso.
Walal waan ku salaamay waanan helay farriintaad ii soo dirtay ujeeddadeedina waan fahmay, laakiin adoon walaal wax kale u qaadanayn aan ka soo fikiro maalinta arbacadana aan kuugu soo war celiyo… ok bye…
Mustafe wali waxa uu la ildaran yahay jacayl ku kaliyaystay isagoo aad u fikirayay ayuu niyadda iska yidhi,
“Alla dhib badanaa marka uu jacaylku kuugu kaliyaysto.”
Jacaylku waa wax jiray, jira, jiridoonana ilaa inta ay aduunyadu ka dhamaanayso, laakiin dadka ku kala duwan yihiin siyaabaha uu u galo iyo sida loo wadaago, runtiina haddaan jacayl jirin aduunyaduba ma joogteen.
Goor ay fiid tahay ayuu Mustafe helay farriintii Maryan, akhriyay fahana waxa ay uga jeeddo kalmada waan ka soo fikirayaa. Markiiiba waxa uu is waydiiyay in ay Maryan cid kale xidhidh la leedahay jacaylki ula ildarnaana uu kusii kaliyaystay waanu kaga sii daray inti hore waayo rajo ayuu qabay markii hore ilaa imikana mid aan dheearayn ayuu qabaa balse waxa uu aad uga fikiray kalmada waan ka soo fikiri doonaa. Habeenkiiyo dhan muu seexan, warwarka iyo walaaca iyo walbahaarka jacaylku baday ayuu la ildaran yahay wuxuu habeenkiiyo dhan kolba dhinac isku rogo ayuu waagii u baryay isagoon wax niyadda u hayn ayuu iskuulkii tagay.
Cidda aragtaa waxay ka garaanaysay meel dheer inuu is baddalay waayo fikirka faraha badani dadka wax ayuu yeelaa jidh ahaan iyo maskax ahaanba.
Wuxuu sidii uga fikiraba waxa uu naftiisa ku qanciyay in uu sugo waxa ay barri Arbacada ula timaaddo.
Waxa la gaadhay maalintii Arbacada Mustafena wax jawaab ah wali ma hayo, galabtii markii la gaadhay ayuu taleefonkiisii eegay lakiin wali wax farriin ah ma hayo.
Waayaha aduunyadu fara badanaa imisaa wiil dhalinyaro ah jecel gabadh, gabadhuna wiil kale wiilkuna gabadh kale, aduunyada dhamaanteed ayaa ah iskadaba wareeg jacaylkuna waa shay ka qiimo iyo qaayoba badan in lays khiyaameyo ama been laysku maaweeliyo, jacaylka runta ahna sida lagu helaa way adagtahay waayo mar walba qof ayuu ku soo horeeyaa lakiin kii la jeclaaday sida lagu helo ayaa adkaata.
Mustafe wuu isbadalay misaankii dhamayska tirnaana wuu yaraaday waxaa ka soo dhaadhacay fikirkii faraha badanaa iyo jacaylkii uu la daala dhacayay goor ay fiid tahay ayay Maryan oo ilaa shalay ka warawasanayd waxay ugu jawaabi lahayd soo qaaday telephone keedii waxayna u qortay fariin dreenka ay ka qabo ugu gudbijnayso waxaanay ku bilawday,
Walal Mustafe waan ku salaamay igana raali ahow hadaan kaala ragay jawaabta lakiin waxan filayaa inaad ku qanci doontid, walal amaba gacaliye silamida sida dareenka jacayl aad iigu qaaday ayaan ana kuugu qaaday ,runtiina aragtidaada wan ku qancay una bogay waxaanan ku han wayanahay inay inoo bilaabanto nolol cusub oo ilaa heer mustaqbal ah kana dheer maaweelo iyo wakhti lumis .
Aniguna waaxaan ku balan qaadaya in aan inta noloshayda ka hadhay aan adiga nolosha kula qaybsado.
Jacaylku waa dareen xoogan oo qofka bini aadmig ah ka xoog wayn inuu kaan taroolo, ama lado hurdo qofka uu jantay la, aantis ama uu farxo farxad niyada qofka uu jantay la,aantis.
Waa dareen dhib badan oo qofka warwar iyo walaac faro badan ku abuura kuna mutaysto dhibaato hadii uu waayo ruuxa uu jeclaaday kuna kalifaysa xataa dhimasho iyo inuu iska naco aduunyada ,qofka uu jacaylka dhabta ahi hayo uu ka sooma farxada ama cuntada kaliya waxa u muuqda waa ruuxa uujantay ,farwal oo uu dhaqaajiyana waxa uga dhex muuqda ruxaas .
Mustafe wuxuu malintiiyo dhan sugaba goor ay fiid dandeed tahay ayuu halay fariintii maryan ,garay ,dadag inta uu ula orday ayuuu qolkiii la tagay si aad u taxadar badana u akhriyay,markii uu soo gaadhay walal amaba gacaliye ayay neef badan ka soo booday isla makiiba waxa galay fifircooni aan wayadaa lagu arag waxa uu imika u diyaar garoobay inuu la hadalo oo ay Telephone ka shekaystaan madaama imika ay labadooduba raali isku yihiiin habeenkaasna umay suuro galin inay wada hadlaan lakiin habeenkaas waxa uu seexday Mustafe hurdo aanu waayowayo seexan farxad badanina ku dhehan tahay aroortina waxa uu kacay isaga oo aan dhinacna isku rogin habeenkaas.
Goor ay casar tahay ayuu telephonekii soo qaatay oo hawlihisii oo dhana uu soo dhamaystay isaga oo aad uga warwar san waxa ay kuwad hadli donan iyo sida ay u soo dhawayn doonto marayan ayuu qaday telkiii kadibna garaacay nuberkii marayan ,una dhac qadar yar dabadii waxa ka qabatay Marayan garatay inuu Mustafe yahay ,
“Halow,” ayay tidhi.
Markaasu ugu jawaabay, “Halow. Walaal Maryan miyaa?”
“Ii waran walal xaladaada cafimaad iyo wayahagaba.
“Aad baan u ficanahay macaan, adiguna?”
“Aad iyo aad alxamdulilaah.”
Markii ay intaas is waydarsadeen ayuu Mustafe hadalkii qaatay oo yidhi, “Maryan waad ka warhaysaa arinkayga runtiina waxaad tahay qof aan u bogay, aadna waan kuu jecelahay taas oo ay tahay had iyo jeer naftayduna jeceshahay in aad i dhinac joogtid runtiina Maryan isagoo cod hoose ku hadlaaya ayuu yidhi, “I love you, Maryan.”
Maryan way yaabtay jacaylka intan gaadhsiisan ee mustafe ku kaliyaystay mudada waxay ugu jawaabato ayay garan wayday iyadoo hadalki ku dhagdhagaayo ayay tidhi,
Een…een… Mustafe sida aad iii jeceshahay iyo sii kasii wanaagsan ayaan kuu jecelahay
Markuuu intaas maqalay ayay neef uu hiin raagay ka soo booday isagoo hadalkii sii watana waxa uu yidhi, “Macaan Maryaneey anigu waxaan doonayaa inaan kula samaysto nolol heer mustaqbal ah markaa waxan kaa codsan laha haday jiraan wax anan ogayn in aad imika ii sheegto inta ay goori goor tahay.
Maya gacaliye anigu cidkale oo ay wax naga dhexeyaan ma jirto aan adiga ahayn waxanan kuu balan qadayaa inaan inta noloshayda ka hadhay aan agtaada ku dhamasto.
Mustafe waxa gashay yididiilo aad u xeeldheer oo jacayl dhab ah.
Markii ay intaas Maryan tidhi ayuu hadalkiii ku soo noqday,
Xabibi malaha inbadan ayaynu wada hadlaynay ee goorma ayaynu ka dhiganaa balankeena kowaad
Maryan oo aad marakan moodid in ay jacaylkii u soo dadagtay ayaa qabatay balankiii oo tidhi,
Macaan mustafow Bari shanta galabnimo maxaad ka qabtaa
Waxba ee halkee ayaynu iskugu nimaadnaa
Huteel Barwaaqo qaybtiisa danbe ee beerta,
Waayahay gacaliso aad baan ku jecelahay.”
Waayahay gacaliye ana sidoo kale aad baan kuu jecelahay
Jawigu qurux badanaa roob ayaa qaaday in yar ka hore dadka badan kiisu waxay u badan yihiin dad ku la bisan dhar wada qurux badan iyo cadceeda oo faladho dhadheer oo casaan xiga bixinaysa qofka midabkiisana ka dhigaysa mid aad u nuuraya huteelka ay ku balameena waa mid wada dhir akhtar ahi ku taal mutulo lagu cunteyaana ka buxaan waxay Maryan oo aad moodid in aanay waxba la hadhin sidii ay u raali galin lahayd jacaylkeeda ayaa soo horeysay dharna kii ugu quruxda badnaa soo xidhatay cadarka ka soo uraayana ud goonkiisa ay dadka agmarayaa oo dhan ayuu saaaqay quruxdeedana malintaas qof arkay ayuun baa ka warami karaaya xiisaha ay u hayso jacaylkeeda ayaa aad ugu dheer iyo waxay uga sheekayn doonto ayay ka sii fikiraysaa iyadoo kolba isha ka khawisaysa saacada ayuu Mustafe ka soo galay albaabka danbe ee huteelka markiiba indhahooda ayaa is qabtay intii uu soo socday ayay niyada iska tidhi
Alla wiilku qurux badanaa
Mustafe malinkaas qofkii arkaa waxa uu modayay inuu caawa arooos yahay, dhisnida jidhkiisa iyo labiska oo is helay dartiis markii uu soo dul istaagay ayay salaan aad iyo aad u kalgacal badan oo laba is jecel is waydarsadaan dhab isku siyeen markiibana wada fadhisteen siday u shekaysanayeen waxaad moodaysay qaar ilaa waligood is yaaqaanay lakiin waa kulankoodii kowaad mustafe oo aftahanimada u dhashay ayaa sheekada furfurayay oo Maryan in yar oo xishood ah ayaa ku jiray dadka ag Maryana waxay arkayeen oo kaliya labada qof ee qoslaaya waxay sidii u shekaysataan ba waxay malinkaasi uu ahaa malin ay beerta midhaha ku gurteen si ay ugala baxaan markay bisladaan jacaylkunaa wanaagsanaa raaxo badanaa lagu dagi ogaa marka labada qof raalida isku yihiin mustafe waxa uu dhibkii ka soo gadhay jacaylkii ku kaliyaysaty ku ilaaway kulankan faraxadii iyo kalsoonidi ay u muujisay Maryan
Maryan oo madaxa hoos u dhigaysa xishood jacayl dartiis ayaa heestan ku heestay waliba ku luuqaynaysa,
Galgacaylku waa qani caashaqa ka qaro wayn
Quruxiyo wanaag badan
Waana shay ku qaaliya qimaynta aadmiga
Labadaysla qaatan qalibigooda Kama ba’o
Bisaylka ay jacaylka u bisladeen ayaaa kulanka laga dhadhan sanayay layskuna balan qaad in aan wad mooye wax kale kala kaxayn mustafe oo gabogabadii kulankaas la hadalayay Maryan ayaa yidhi, “Maryaneey noloshayda inta ka hadhay lagama yaabo in aan meel kale kaaga baydho lakiin wax walba adigaaa ayaa iga samayasan karaya oo ishaad ii mujisid ayaan kula nolaanayaa waligayna waan ku jeclaan doonaa
Hadalka Mustafe oo u badanaa afeef dhigasho iyo dardaaaran ayaay Maryan oo taxadraysaa kaaga jawaabatay, “Naftayda waxaad ku abuurtay dareen jacayl oo aanay waligeed arag marwalbana xagaga ayan ahay kuna balan qadayaa runtiina waan ku jecelahay
Goor ay tahay fiid cawl ayay kala tageen iyagooo gacmaha is haysta kalgacayl badana isku muujinya.
Xiisuhu inta uu cusub yahay labada qof ee is jeceli waxa caado ah in ay soo ban dhigaan dabeecado aad u wanaagsan iyo hab dhaqameed laysku raali galinaayo Mustafe iyo Maryana kamay madhnayn habdhaqameedkaa nololeed ee cadada u ah bani aadmiga.
Kulan koodaasna waxa uu samayn wayn ku yeeshay Marayn oo sheekadoodii macaanayd iyo kaftanki Mustafe ilaawi wayday habeenkaas oo dhana cajaladeeda xusuta ayay ku soo celceshaynaysay faraxdii kulankaas ka dhacday marwalbana waxay ahayd mid ka fikirta oo jeclayd in ay is ag jogaan daqiiqad walba.
Jacaylku waa dhibaato badan yahay marwalbana sida uu dadka ku galo lama yaqaano oo waxa la arkaa uun isagoo qofku la iladaaran jacayl Maryana sidaas ayay ahayd goorta uu Mustafe u soo bandhigay jacaylkisa iyo siday raalida ugu noqotay ee ay jacayl ad u xoog wayn u qaaday may garanayn waxaanay marwalaba ka caban jiratay kulan kooda oo yaraa awaadii Mustafe taasi waxay ku noqotay laf dhuun gashay oo waxa uu ahaa mid marwalba isku daya inuu raali galiyo gacalisadiisa waxaana la gadhay kulankoodi labaad waxay ku balameen guri ay inan maryan asxaab dhaw yihiin oo hinda layidhaa dagan tahay waxaanay kul meen habeenkaas iyagoo aad moodid in ay isku soo halilayaan xiisaha jacaylka dartiis
Mustafe waxa uu garaacay gurigii waxaana si dagdag ah uga furtay Maryan oo ka garatay shan qadh yaraan tiisa inuu isagii yahay markiibana salaan aad u kalgacal badan ayay kula booday waxaanay soo dhawayn diiran kadib fadhisteen qolka fadhigaa oo habeenkaas u eeka inuu yahay qol loogu talo galay laba is jecel waxa wada cas ee yaal awgii
Waxay habeenkiiyo dhan sheekaystaan waxa sharaab albaabka kala soo gashay
Hinda oo aad u xishoonaysa waxaanay ku bilowday
Salaamu calaykum walal
Maryan oo ka faaidaysanaysa salaanta wanaagsan ee Hinda ayaa tidhi
Wow! Salaam qurux badanidaa kaalay aan iskiin baro hadabee wiilkan kolay warkiisa waad haysaaye
Hayga khajilsiin ee iga daa Maryan.”
Wiilkan waxa layidhaa Mustafe wana kaanu nolosha waadigi doono hadii alle isku kayo simo
Marki ay intaas tidhi Maryan ayay Hindi iska baxaday waxaana hadalkii la wareegay mustafe oo yidhi, “Inantii waad ka xishood siisay.”
“Maya ee waan is kiin barayay oo kaliya, macaaan.”
Wayahay inta uuu yidhi ayuu ku yidhi; “Hadaaan caawa ku yidhaa ii cadee inaad I jeceshahay maxaad iigu cadayn lahayd
Inta ay cabaar fikirtay ayay ku tidhi; “Indha isku qabo anaa kuu cadaynaaya jacaylku halka uu iga gaadhsisan yahaye
Mustafena isku qabtay ayay dhunkasho aad u naxariis badan ka dhunkatay labada dhaban iyo sujuuda marakasay ku tidhi kala fur indhaha hadaba si aad iigu sheegtid intaa aan ku jecelahay ileen adaa cabirayaye, inta uu aad eegay indha Maryan ayuu heestan isagoo ku lu qaynaya ku yidhi;
hadaan taan doonayee illaahay
rabbow isu kaaya daaaa
Jacaylkaagu waxa uu ila mid yahay si aanan qiyaasi karayn hadaan ku idhaa waxanku qiyaaso ma garanayo maad ila yaabi macaan runtiina waxan ahay mid daradaa la il daran jacayl aan jacelaahay inuu midha dhalo.
Xiisaha jacaylka ee dhex maray kadib waxa ay dib u bilawdeen sheeko aad iyo aad u xiiso badan, xiisaha jacaylku ayaa laga dheehan karayay labadoodaba habeenkaas marwalbana waxa ahayeen qaar isku niyad san oo aan hadalka lakala khajilayn dareenkooduna uu isku mid ahaa raalina kuwad ah in ay nolosha wadagaan ilaa ay ka gaadhsinayaan heer mustaqbal oo intifaac leh iyo nolol wanagsan leh
Kulankan oo jawi Dagan ugu dhamaday oo aad iyo aad u heer sareeya kan xiisoo iyo xamaasadd badnaa kuwoodi hore waxay sidii ahaataba waxa Maryan iy Mustafe jacaylkoodi ogaaday dhamaan dadki xaafada iyo dhalinyaradiiiba waxaanay noqden dad lagu sheekaysto marwalaba oo la soo hadal qado midkood waxay sidaa ahdaana waxa ogaaday akhirkii xaafada Maryan oo ah dad lacag lay ah kana xumaa in inantooda lagu arko inan yar oo aan waxba haysan si ay taas uga hortagaana waxay Maryan u sameyeen wakhti cayiman oo aanay dhinacna u dhaafi Karin lakiiin laba is jecel isku raali ah dadkoo dhana iska xushay ma wayaan si ay ku kulmaan waxay kulmi jireen malin walba marka nusasacaha iskuulka la gaadho jacaylkooduna waxa uu ahaa mid sii xogaysta ee aan waxba u noqon turturo walba oo loo dhigo kuna qanac sanayeen in ay dhib iyo dheefba wadagaan ilaa inta ay ka midho dhalinayaan Maryana waxay ahayd mid marwalba telephonka kala soo hadasha Mustafe iyadoo ka cabanaysa sida loogu didaayo inay guriga ka soo baxdo waxaanay marwalba ku oo dhan jirtay, “Marwalaba ka fikirkaaga ayaan la ildaranahay iyo sidaan kula kulmaayo waxaan jecelahay in aan kula kulmo malin walba iyo xili walba macaan.”
Waxay saamyan wayn ku yealaatay hadalkaasi dabecadihii Mustafe iyo dhaqankiisii iyo fikirkiisiiba waayo waxa la qayb satay maryan su’aalaha marwalaban maskaxdiisa ka dhex guuxayay waxay ahayeen qaar ku salaysan mustaqbalaka iyo nolosha ay wadaagi donan Maryan waxaanu ku tirabi jiray heeso jacayl ah
Gabadh yahay kalgacalbaad
goortaan ku eegoba
halka aad i gaadhsiin
Arin wuxuu sidii ahadaba waxaa lagaadhay fasaxi iskuulka Mustafena waxa uu u sheegay Maryan inuu doonayo inuu booqdo xafadodii kana soo war helo markii uu intas maryan telephone uga sheegay ayay ku balameen inay caawa is arkaan si ay isku sii maca salameyaan goor ay tahay 9 habeenimo ayay ku kulmeen meel aan sidaa uga durug sanayan guriga Maryanyo waxaanay fadhisteen meel aan laga arki karayn waxaana u bilaabantay sheeko ku salaysan jacayl ay doonayaaan inay ka midho dhaliyaan iyo dardaran mid walbaa kan kale la si dardaarmayo inta lakala maqan yahay afka Maryana waxa ka soo baxayay habeenkaas erayo jacayl oo aad u xiiso badan ku jecliyaa dadkana kugu jecliyaa runtiina waxan ka warwarayaa sidaan u nolaan doono adiga la’aanta marwalbana waxan ahaan doona mid adiga uun kaa fikirta runtiina waan ku jecelahay Mustafe oo aad u dareemay siday gacalisadiisu uga xun tahay tagitaankiisa ayaa yidhi, jacaylkaaga iyo lajoogaguba waxay nafatayda u yihiin farxad aan la soo koobi karayn marwalban markaan ku arko ayaan dagaa oo ay naftaydu kugu xasishaa lakiin runtii intaa aan maqanahay u malayn mayo inan nolol dagan ku nolaan doono waxanan kugu la dardarmayaa inaad jacaylka halkaaga ka sii xejiso dhib wal oo uu kugu qaatona aad u samirtid waayo samraa ayaa sadkii hela ,dartaa waxan ahay mid aan garanayn waxan adiga ahayn naftayda jacaylkaagu waxa uu ka dhigay mid aan jiif iyo joogba aan xamilayn cuntana aan cuni Karin talaabo wal oo aan qaadana adigaa ayaa iiga dhex muuqda markaa waxan macaan kaa codsan lahaa in aan soo noqdo jacaylkeena oo halkiisiya aadna waan kuu jecelahay’
Maryan oo ahayd dhagayste fariin jacayl iyo waano iyada ku soco ta ayaa aad daremaysay ilmada indhaheeda ku soo taagnayd ayay tidhi; gacaliye balan daro waa diin daro aniguna waxan kuu balan qadayaa inaad igu soo noqoto anigoo wali sidaa kuu ah kuna jecel waligayna ku maan hamiyin nin aan adiga ahayn inan nolosha la wadaago una malayn maayo inuu I calman doono qof aan adiga ahayn inshaa allah waxan kuu rajayanayaa inaad soo noqoto adigoo nabada reerkina kaga soo waranto nabad qab badan iyo barwaaqo marwalban anigu waxan ahaan donaa mid adiga ku sugta
Kadib wedhahaas jacaylka iyo balanta isugu jiray waxay ku balameen inay aroorta ugu timaado istaanka laga raaco babuurka.
Habeenkaas waxa uu ahaa habeen ay wadageen jacayl aad u xeeldheer oo mid waliba intii uu jeclaa kan kale libin laabkiis ay is sii jecladeen runtiina aad modaysid inay jacayl dartiis habeenkaas isku dul ooyayeen sida ay iskugu niyad samayeen waagii markiii uu baryay Mustafe waxa uu u xamaan uruursaday dhinacaa iyo istaankii maryana goor horeba way soo jarmaaday waxaanay ku kulmeen istaankii markiibana gaadhi dhaqaqaya aayuu helay inta uu shandadii soo dhigtay gadhigii ayuu maryan u soo noqday markaasu ku yidhi isagoo Maryan ku bilaabay waano kana cabsi qabay in jacaylkiisu ka baydho tubtii saxda ahayd waayo sida lagu helo ayaa aadag jacayl kan oo kale ah oo raali laysku yahay dhib iyo dheef la waadaago marwalba lawada faraxsan yahay waxanu hadal kiisu u badnaa waano iyo dardaran jacayl waxaana hadaladiisi ka mid ahaa:
“Runtii waxan jeclahay in aan nolosha wadaagno kana midha dhalino riyadeena ah in aynu nolosha wadaagno iskuna noqono xaaji iyo oridiis markan soo noqdana waaxan kuu balan qadayaa in aan hore u sii socono waxanan kaaga tagayaa xubidaydaay amaano jacayl oo aan wada beeranay kuna soo noqdo adigoo nabad iyo caano ah isagoo hadalkii wada ayuu gadhigi hoonkii u tumay is maca salameyeen iyadoon Maryan walilahadlin jecelna inay la hadasho oo ay kal sooni badan oo jacayl sii gashato waxaanay halkii tagnayd ilaa intii uu gadhigii ka sii qarsoomayay iyadoo kolba u gacan hadinaysa isna uu daqada uga soo gacan hadinya isagoo ku daraya in uu gacantiisa dhunkado hawadana u soo raaciyo iyaduna sidoo kale waxaanay halkii ka soo dhaqaaqday Maryan iyadoo aad modid in ay tabcaan tahay oo aan dhaqaqi karayn waxaanay malintaasi u ahayd malin ay aad u murugaysnayd kuna hamiyaysay jacaylka curdinka ah inay gaadhsiso heer ay wadagaan nolosha dhamanteed balse ay kari kari wayday, wayadaas oo dhana may ahayn mid si wanaaagsan u seexta oo waxay ka fikiri jirtay uun Mustafe iyo goorta uu soo noqon doono waxay ahayd mid marwalba dhawrta jacaylkii ay Mustafe u haysay .
Sanad walba xiliga xagaga waxaa magaalada ku soo xagaa baxa dadka ka yimaada Yurub iyo America inta badana goobaha waxbarashadu waa fasax xiligaa, sidaas darted magaaladu waxay ciriciraysaa dad oo waxa buux dhafiyay dadkii soo xagaa baxay iyo ku wii waxbarashda fasaxa ka ahaa.
Siciid waa wiilka yimid cariga ingiriiska waxaanu joogay magaalada mudo week ah waa lacag lay wakhtigiisa oo dhan ku qaata iska meermeer iyo ku raaxaysiga lacagta uu kala yimid qurbaha,
Aroor arooraha kamida isagoo wata babuurkisa ayuu soo hormaray guriga Maryanyo waxa uu isha qalac ku siyay Maryan oo biyo ku dadinayasa dibada gurigooda aadna aan u asturnayn oo shaqo ayay ka haysay guriga ,markay aragtay ninka ku soo maqan ayay dagdag intay biyihii u dadisay guriga u gashay siciid oo iska tamashlayn ku joogay waxa u ka helay Maryan iyo quruxda ALLE u dhameyay markiibana waxa uu ku dadaalay cid uu kala xidhidho waxa uu helay inan ay saxiibo yihiin oo gala guriga Maryanyo ka soo horjeeda oo layidhaa Deeq markiiban uu telephone u diray isaga oo leh, “Saxiib waan kuu bahanaahay ee goorama ayaynu is araganaa
“Ma wax cusub ayaa soo kordhay Siciiid
“Maya ee arin yar ayaan kaaga bahanaa markaa goorma ayaan kuu imadaa
Caawa waxan iskugu imanynaa suuqa
Wayahay saxiib ee 7 haynoo ahaato
Kadib habeenaimadiiba waxay ku kulmeen goob ay dhaliyaradu ku badan tahay markiibana waxay iskula baxeen meel gaar ah oo aanay cid maqalayn waxay ku shekaysanayaan waxaana hadalkii bilaabay siciiid oo yidhi; “Saxiib Deeq waxaa maaanta iga ka soo gashay arin ee maad ii fulin ka raysaa haddaad kartoo;
Haa maxaa dhacay manan saxiibkaa ahayn maxaad sidaa u leedhaay ii sheeg
Saxiib waxan manta arkay inaanta gasha guriga kaa soo horjeeda markaa waxan doonayaa inaad ii soo gacan galiso saxiib ama aad ii qabato waxii karaankaaga ah
Kadib markii uu intaas yidhi ayuuu Deeq gartay inanta uu ka hadlaayo Siciid waxaanu ku yidhi;
Saxiib Siciidow inantaa soo xero galintedu way adagtay maxaa yeelay saxiib waxay wada socdaan wiil Mustafe layidhaa oo dadka oo dhan ayaa isku og markaa saxiib inan telephonekeda ku siiyo mooye wax kale kuuma qaban kaaraayo
Markii uu intaas yidhi ayuu siciid oo ka xun in ay wiil la socoto Maryan ayuu yidhi;
Saxiib waad mahadsan tahay sida wanaagsan ee aad wax iigu sheegtay markaa saxiib waxan ku sheegayaa anigu arin aan guur ahayn Kama lihi ee kaliya waxan doonayaa inaan guursado gabadhaasi saxiiib
Deeq oo ku dhirigalinaya arinka guurka ayaa isagoo og in aanay Maryan yeelayn ayuu ku yidhi, “Saxiib u malayn mayo hadaad iyada ula tagto arinkaas inay kaa yeelayso lakiiin saaxiib xaga walidkeed ka wareeg waayo adigu waxaad tahay nin dibada ka yimid dad ka dibada kayimadana halkan aad ayaa looga qadariyaa.
Siicid isla markiiba yididiilo ayaa gashay waxaanu yidhi, “Wayahaya saxiib ee hawshaas ayaan gudo galayaa wanad mahadsan tahay aynu iska war haynona
Kadib markii uu siciid warbixin dhamaystiran ka helay Maryan ayuu isku dayay inuu kala hadlo mobile keeda lakiin waxay ahayd mid ku jarta ama aan ka dhagaysan waxa uu leyahay dhibaato ayaanu kala kulmay oo xataa fariimaha uu ugu diro smska kama ay so jawaabi jirin waayo waxay ogayd balankii iyo dardarankii adkaa ee mustafe marwalbana waxay ahayd mid la il daran jacaylka mustafe oo aan qaadi karayn qofkale iyo jacaylkale toona samraana sadkii wuu helaa Maryan habeena kumay seexan in loo aqal gayn doono nin aan ahayn mustafe lakiin Siciid markii uu Maryan dhinacna uu qadi wayay waxa uu ka wareegay xagii uu saxiibkii u sheegay ee ahayd inuuu xaga walidkeed ka wareego waxaanu durbadiiba u sheegay abihii in uu doonayo in uu guursado inanta Xaaji Ibraahim ee Maryan layidhaa, markibana aabihiii uu soo dhaweyaya kuna faraxay arinkaas waayo Siciid muu ahayn nin laga filayay guur iyo wax u dhow toona maxaa yelay dhawr xagaayoo hor ayaa lagala quustay,abihiii maxamuud cali waxa uuu markiiba bilaabay in uu la xidhidho cida ugu dhow ee arinkan ka cawin karaysa iskuna wanaagasan yihiin Xaaji ibrahim waxaanu helay oday cali oo ay asxaab dhaw yihiin Maryan abaheed una sheeg arinkii waxaanu ka codsaday in uu arinka dadajiyo oo caawaba uuu xaajiga u ban dhigo balan uga soo qabto in malinta khamiista ah ay inanta soo donayaan hadii ay raali ku yihiin, isla habeenkaasba waxa uu Oday Ismaciil u tagay Maryan abaheed kadib ayuuu Xaaji Ibraahim yidhi, “Waar xiligan maad socon jirine caawa maxaa jiray
“Waxba ee arin yar ayaa soo kordhay oon kula imid
“Bal ii sheeg
Illahow dhibaato ha ka yelin ayu ku ducaystay
“Manta waxaa halkii shaqada iigu imid Maxamuud Cali oo iga codsaday in aan arinka uu ka lahaa u galo markaa horta sidaasan kugu yimid arinkuna waxa weeyan inankiisii dibada ka yimid ayuu u doonayaa inantada Maryan markaa malinata khamiista ah ayay doonayaan in arinku dhacoo.
Xaaji ibraahim mayaba kama uu soo celin ee waxa uu yidhi Waa sax waana arin wanaagsan ee sidaa hayno ahaato.
Maryan wali waxay la ildaran tahay jacayl uu ka maqan yahay aktarkii la jilayay waxayna wakhtigeeda badankiisa ku qadataa qolkeeda iyo fikirka iyo aramida jacayl ee soo ridatay ayay la kici kari laadahay ilaahayow qof aan waxab ogayn ha cadaabin ,halkan guurigooda dhexdiidsana waxaa lagu bixinayaa iyada,iyadoon waxba laga waydiin ayuu abaheed iyo hoyadeed isku raceen in la siiyo wiil aanay is garanayn xaataa anay isku dabeecad wada noolanshiyo dhex mari Karin waayo waxa uu ku barbaaray Siciid wadanka uk inta badan halkan waxan dhawr usbuuc ahayn muu iman jirin halkan
Waxa soo dhawaatay malintii balantu ahayd waxaanu abahed u sheegay Maryan hoyadeed cawo inay inta ka horaysa khamiista ka dhadhiciso inanta guurka oo ay ka sii ogalaysiiso lakiin war uma hayo inay la sooco to mid hadii raga oo dhan lasoo safo ay isaga uun qadan lahayd waxwal oo uu yahayba Maryan hooyadeed oo sidii loo shegay yeelaysa ayaa ugu tagtay qolkeedi iyada oo iska dhex fadhida waxaanay ku tidhi;
Maxaa ku helay eed lajiiftaa uun horta
Waxba, waxba hooyo!
Soo kac oo igu kaalay fadhiga soona dhakso arimo ayaa ii yaale
Marki ay intaas tidhi aayay dagdag u saro kacday ugana dabatagtay maryan niyadeeda marna may soo gashan guur iyo wax lamida toona lakiin maskaxdeeda waxa ka dhex guuxayay Mustafe iyo siday ugu bahan tahay qadar yar dabadiina waxay ka daba tagtay hooyadeed intii anay fadhiisan ayay markiiba tidhi Hooyo maxaa cusub ee aan kuu qabtaa
Waxba ee soo fadhiiso arin baan kuu hayaaye
Wayaahay ee maxaa jira hooyo
Hooyo Maryaneey waxa lagaadhay xiligiii aanu ka fikiri lahayn mustaqbalkaaga iyo ciddad la waadaagi doonto markaa hooyo aniga iyo aaboba waxaanu kula jeclaanay wiil uu dhalay oday Maxamuud Cali oo dibada ka yimid markaa hooyo khamiista ayuu ku soo donayaa ee sidaa ula soco hana nagu didin hooyo oo duco naga shaqayso
Markii ay intaas tidhi ayay Maryan qaracantay oo ay hadli Kari wayday iyadoo aad modid in ay beerka ka naxaday sida ay u hadli Kari layd ayaa tidhi
Maa nigaa la isoo donayaa…!
Haa ee hanagu didin hooyo
Maya maya maya!! Anigu Nin anan garanayn wax uu yahay ma guursanaayo aniguna ma joogo xiligiilay doori lahaa qofka aanu nolosha wadagayno hooyo ee iga daaya ma doonaye;
Maryan hooyadeed oo hadalka ku kulaylinaysa ayaa tidhi
Nayaa waan garanayaa waxa aad doonaysid inan yar oon nafitiisaba ku filnayn ayaad doonaysaa inaad raacdo ma abahaa iyo familgina ayaad doonaysaa inaad sharaftooda meel kaga dhacdo taasi suuro gal maaha,
Maryan oo naxsan ayaa tidhi, “Hooyo sharaftiina meel kagama dhaacayo inan nooleeyo mooye lakiin hooyo hadaan anigu raali ku ahay in aan nolosha la qaybsado wiil aan aqaan wuxuu gudi karo iyo wuxuu fali karaba maxaa ii didaaya ee I raacinaya nin anan garanayn wax alle wax uu yahay hooyo lacag iyo dibadba waa laheelaa lakiin sida lagu helo ayaa adag laba qof oo raali isku ah jecelna inay nolosha wada wadagaan
Markii ay intaas tidhi ayay Maryan hooyadeed ka cadhootay sida Maryan aanay u qarsanayn jacaylka Mustafe ee ay raalida ku tahay waxaanay ku tidhi
Anigu kuma garanaayo halkaad ku socoto ee caawa abahaa ha yimaado!!
Maryan talaa ku cadaatay waxaanay aad u ixtiraamtaa abaheed mana jecla in ay hadalka ku celiso lakiin waxa kaga sii daran in uu abaheed arinkaa ula yimaado iyo siday uga bixi lahayd waxaana la gaadhay habeenkii markii uu abaheed soo hoyday ayay hooyadeed u sheegtay waxay maryan kala kulantay isagoon dhincna eegin ayuu Maryan oo qolkii ku dhex akhrisanaysa buug jacayl ah inta uu ka gundhiyay gidaarka ka jaray kuna yidhi isagoo si adag ula hadlaaya Waan hayaa warkaaga inaad doonayso inaad sharaftayda dhulka la gasho oo aad raacdid wiil aan waxba haysan oo aan naftiisaba ku filnayn oo aad diiday waxan aniga iyo hooyadaa kuu soo goynay imikana waxan kuu sheegayaa inaad soo kala doorato duco waalid iyo habaar waalid
Maryan oo aan aabaheed waligeed hadal ku celin ixtiraam dartiis ayaa ku tidhi
Aabo maan aaniga waxba layga waydinayn guurkayga lakiin sideed iigu quudhaysaan Nin aanan garanayn wax uu yahay wax naga dhexeyaana aanay jirin
Iyadoo hadalkii wadata ayuuu ka dhex galay abaheed markaasu yidhi
Hadii aad dhago leedahay anigu khamiista waan ku bixinayaa hadii aad diidana gurigana ii dhaaf cidaad jeceshayna raac waligana habaar waalid ayaan kugu ogahay.
Qofna ma jecla inuu qof aanu nolosha lawaadagi Karin uu la nolaado qof wal oo bini aadmi ahina waa u xor cida uu la wadaagayo nolosha oo waxaan u doori Karin walaa waliid walaa cid kale lakin waxa lagu leyahay talo iyo in la waaniyo.
Maryan oohini way u dhamaatay habeenkaas oo dhana iska daa inay hurdo seexato ee waxa indhaheeda ka qubanaysay ilmo aad moodid in uu dhiig ku jiro wajigeedana barar dartiis uu la buurnaaday kana luntay quruxdii sariirtii uu abaheed kaga dul tagay ayay wali ku jiiftaa sidii baanu waagii ugu barayay iyadoon afka markaliya isku qaban beerkana ka oyaysa iyo siday wax ugu sheegi doonto marka uu Mustafe yimaado waxana maskaxdeda ka dhadhici la sida dad cidii ugu dhawayd ee ahaa abaheed iyo hooyadeed ugu qudheen in ay nolosheda la qaybsato cid aanay garanayn .malintii la soo doonayay waxa ka hadhay barii oo kaliya dhamaan dadki xafaduna way ogadeen oo waxay la yaban yihiin guurka aanay inantu raalida ka ahayn ee hadana lagu khasbaayo lakiin waa wax ka dhaca inta badan dhulka soomalida oo hablaha la siiyo wilal aanay garnayn oo lagu siinayo dibada ayuu ka yimid iyo lacag ayuu leyahay aan loo meel dayan waxa hadhow ka dhalan karaya malintaas oo dhan muuroogo iyo ciil dartiiis ayay hadli kari la’ad waxaanay ahayd mid siidii sakaraatul mawt hayo hadal daysay oo yaalinku dul ah sarrirta ,xafadoodana waxaa ka socotay hawl adag oo loogu diyaar garoobayo bixinteeda,hooyaded waxay u yeedhatay xigtadii oo dhan iyo dumarkii ay iskugu dhawayeen abaheedana aderadeed iyo abtiyasheed ayuu u yedhay sii ay goob joog ugu ahadaan bixinta inanta waxa lasii xamaan uruursadaba waxa la gaadhay malintii arbacada arin oo dhamina waa u diyaar reerka inanta iyo reerka inankaba.
Manta waxaa bil laga jogaa mailntii iskuulka la fasaxay ee uu mustafe tagay reerkoodii waxaanu soo noqday isaga oo aad u sii quruxaystay dhulka oo barwaaqo ahaa daratiis soona caano dhamay waxa uu magaalada soo galay abaaro 9 subaxnimo isaga oo dalana dartiis markiba waa uu iska seexday qadadii markii uu u kacay qadeeyayna ayuu la hadlay maryn sidii cadada u ahayd awalba maryan markay aragaty numbarkii mustafe ayay isla markiiiba garatay inuu yimid iyadoo aad u naxsan dhinacna ka faraxsan ayay tidhi
Hallo Maryan maa ii fican taahay macaan
Haa aad baan kuugu fiicanahay ee ii ga waranxaladaada iyo sidii lagu ahaa reerkiiiba
Aad baa gacaliso loogu ficnaa ee adna ii waran bal side ayad tahay iyo noloshahdaba
Macaan anigu waan wacanahay arina sidad ku ogayd wuu iska badalay ee telephone kaagama sheegi karayo ee caawa iigu kaalay gurigii Hindiyo
Waayahay ee ma wax dhibaato ah ayaa soo korodhay
Maya gacaliye anigu sidaan waligay kuu jeclaa ayaan maantana kuu jecalahay kuna jeclaan doona ee caawa soo dhokhso
Wayahay macaan aniga waxaa aan la ladi layahay amaba hurdo ii diiday waa jacaylkaaga marwlbana waxan ka fikiraa sidii aan nolosha kula qaybsan lahaa adiga macaan aad baan kuu jecelahay ee waa inoo caawa
Markii ay intaas is waydarsadeen ayuu Mustafe dib u fikiray waxaanu gar waaqsaday inuu arin cusubi soo kordhay.
jacayl dartiis waxa uu ahaa malintaas mid ay ku dheertay wakhtigii balantu oo wakhtiga u arkayay mid aan dhaqaqaynba intay wakhtigii balantu gaadhaysay ayaa kaga badatay buur waxa lagaadhay wakhtigii balantu ahayd Maryana goor horeba waxay sii tagtay gurigii hindiyo Mustafena wakhtigii balanata ayuu ku soo beegay kadib gurigi markii uu garaacay ayay ka furaty Maryan iyagoon wax hadal ah is waydaarsan ayay isku dhageen salaam kal iyo lab ah una badan arami jacayl oo wada jir u haysa waxaanay sidii ahayeen mudo kadib ayay qolkii fadhiga fadhisteen iyagoo wali sidii isku haysta xiiso badanaa kulanka jacaylka ahi marka ay labada qof raalida isku yihiin waxaanay sidi ahadaanba waxay bilabeen sheeko dhadhan jacayl leh layskana waaraysanaayo waxawalba waxaanay aryan mudo ka waraysanaysay reerkii iyo sida lagu ahaa markii uu mustafe nabad qab badan ku sheegay ayuu ku yidhi
Maryan maxaa cusbaa ee soo kordhay
Inta iyadoo gacmaha gacmihiisa kula jirta ay siyar oo ayar aayar aah ugala baxaday ayay hoos u fooorasatay iyado garan la si ay wax ugu sheegto mustafe iyo halka ay ka bilaabayso; waxana arkay Mustafe oo ku celiyay hadalkii lakiin inta ay wax ay ugu jawaabto garan wayday aayay iyadoo ilamadu indhaheeda qubanayso tidhi;
Macaan Mustafow waligay waan ku jeclaa jacaylkaga dartiis na waxaan u huray nafatayda sidii aan kuu raali galin lahaa marwal iyo daqiiqad walba waxan ku rajo waynaa inan inta noloshayda ka hadhay in aan adiga nolosh kula wadaago lakiin arin waxa uu xumaaday marki ay aabahay iyo hooyaday ay isiyeen nin aanan garaanayn wax aalale wax uu yahay.
Mustafe talo ayaa ku cadaatay hal ilibidhqsina kumuu fikirin arinka ay Maryan u sheegtay ee waxa uu filaayay arimo kale markiiban isagoo aad moodid inuu naxsan yahay ayuu ku yidhi
Goorma ayaa lagu bixinayaa
Bari 9 subaxnimo
Ma baridan dhow
Haa gacaliye lakiin anigu raali kuma yihi waxan u sheegay xafadayada lakiin cid wax iga dhagaysataba waan wayay waxaanay ii sheegeen in aan kala doorto duco waalid iyo habaar waalid lakiin anigu waxan lajiraa adiga naftaduna adigay raali kaa tahay kumana qasbi karaaayo nin aanay raali ku aahayn inay nolosha la wadaagto markaa anigu adiga madaxagga ayaan ahay ee I meelee runtiina waan ku jecelahay waxa ilmada indhayga ka shubayana maaha wax sahlan ee waa jacaylkaa aad igu beertay
Mustafe waxa uu la yaabay sida adag ee ay ula hadashay maryan wax uu kumeel gaystona mahayo isago aad uga xun siday wax u dhaceen ayuu yidhi Maya sidaa ha u hadlin aniguba waan ku jeclaa ee kalidaa imaad jeclayn waxaanaynu ahayn qar nolosha ku qanacsan inay wadagaan lakin hadii u arni sidaa noqda walal waxaan kaa codsan lahaa inaad habaar waalid waligaa ka dheerato inta karaankaaga ah raacdan siday walidkaa kula jecaladeen inakuna hadii ILLAHAY isku keen qoray is waayi mayno
Maryan way yaabatay sida uu ula hadalay Mustafe lakiin waxayna ogayn in aanu jeebkiisa waxba ku hayn waxayna tidhi
Marna kamaan filayn in aad sidan ila hadli doontid wax walbana anigaa kugu jecel ee adigu igu raac oo kaliya
Mustafe isagoo u caqli celinaya Maryan ayuu ku yidhi wax wal oo aduunkan ka dhacaa xaga ALLE ayay ka qoran yihiin in sidani dhacdana way qornayd markaa ku samir yeelna siday reerkiinu kuugu taliyeen waayo anigu hadaan maanta ku kaxaysan lahaa meel aan ku geeyo ma haysto lakiin hadaan xataa ku ka xaysto abahaa iyo reerkina kama amaan helayo markaa fadlan hadad maanta in uun I jeceshahay sidaan ku idhi yeel malin manta ka wanaagsan ayaynu is heli hadii ALLE isku keen qoraye
Maryan talaa ku cadaatay ilmada indhaheeda dareeraysaa waxay qoysay wajigeeda waxay sidii u doodaanba waxa uu akhirkii Mustafe ku qanciyay in ay yeesho sida ay walidkeed la jeclaadeen maryan oo oohin darted aan hadal ka so baxayn ayaa iyadoo aad moodid inay naftu ka gurmayso tidhi hadal Mustafe aad u taabtay ilaa malinkaan ku jeclaaday ilaa manata habeena ma seexan hurdo la’aantaa marwalbana waxaad ahayd mid naftayd ku dheer oo dareenkaygu la jiro hadii aan is idhaa shay qabana adigaan kaa dhex arki jiray iyo wanaagaad ii samayn jirtay daradana waxaan ahaa mid nafateeda u huraty sidii ay jacaylkaeeda u haqab tiri lahayd waxay nafataydu adiga dartaa igu qasbi jirtay in aan sameeyo wax wal oo suuro gal ah maantana adigaa igu qancinaaaya in aan raaco qofkale oo aan oogahay in anan nolosha la wadaagi karayn ogow waxaad naftayda ku qasabtay go’aan aanay waligeed yeeli lahayn adiga dartaana waan u yeelay manta; waxanan ahaan doona mid waralba ku xusta kuna xusuusan doonta waan ku jeclahay ilaa waligayna waan ku jeclaan donaa Mustafe laftiisu waxa ku soo istaagatay ilmo waxanu marwalba faraha kula jiray indhihiisa wuxuu sidii ahadaba akhirkii waxay ku kala tageen in ay yeesho sidaas madama ay dantu kaliftay waxaanay ku balameen inay soo wada xidhidhaan oo anay sidaa ku kala hadhin.
Markii ay intas is waydarsadeen ayay kala taageeen iyago aad modiid in mid walba
Kan kale geeridisiii loo soo sheegay.
Mustafe waxa uu gurigoodi tagay isagoo uu kaga horeeyo Maryan abaheed waxanay ku kulmeen isagoo albaabka ka soo baxaya waxaanay is waydarsadeen weedhaahan
Imika ayaad inantaydii ka timid sow mahaa waxan kuu shegayaa hadad guurka caqabad ku noqoto in aad noloshada oo dhan waayi doontid
Mustafe oo habka hadalka u dhashay ixtiraam waalidna ku daraya ayaa yidhi
Adeer inantadiii waan kuu dayay ee ma wax kale ayaad igu haystaa
Isagoon u jawaabin ayaa ay habaryartii soo boday inta ay ka xanaaqady sida adage ee uu mustafe ula hadalay ku tidhi
Hadii inan taadi laguu dayay orod oo Na dhaaf ogowna in aan jacayl laheli Karin lakiin lacag la heli karo
Markii ay intaas tidhi ayuu Maryan abaheed ka tagay
Maryan loo sheeg in abahaeed daydayay oo uu Mustafe gurigoodi tagay markiibana yaabtay iyadoo is garan la waxay samyso iyo dhibka ay u soo jiiday
Mustafe ayay qolkeedi hoosta iskaga soo xidhay markiibna waxa yimid abaheed oo aad u cadhaysan wuxuuna ku garaacay albaabkii isagoo u hanjabaya
Inta ay ka furtay ayay iyadoo hoos eegaysa ku fadhiisatay sariirta konahedii markasu ku yidhi isagoo aad u qaylinaaya
Hadii aad diido guurka waxa aad doonayso waanku ogahay labadabana waad seegi oo halkaas aayaad maxbuus igu ahaan markaa anigu bari waan ku sinayaa inankaa iga kaa soo doontay ee dibada ka yimid lacag ku filana haysta ee ma yeeli karo in aad inan yar oo kale ila hoos cararto sidaana ku diyaar garow.
Mustafe waligii marna niyada soo muu gashan in uu Maryan wayayo lakiin wayaha aduun waxwalba way kenan waxanu ku sigtay in ay maskaxdiisu is dhaafto oo uu maryan darted ku sigtay dhimasho waxaana ka war helay abtiyayashii oo isku dayay inay uguriyaan lakiin uuka diiday inan aan Maryan ahayn akhirkina ay kula taliyeen inuu noloshisii cadiga ahayd iskaga soo noqdo oo uu iskulkiisa dhamaysto shaqaystana aanu is raacin aduunyada iyo waxa ka dhacayaba.
Maryan waxa la siyay nin aanay raali ka ahayn laguna siyay dibada ayuu ka yimid ee aan loo meel dayin hadhow iyo waxa ka iman kara guurkaas Siciid oo ahaa wiilkii la siyay Maryan maarkii u u laaawareegayba waxa u ka dareemay sidaanay raalida uga ahayn iiyo sidaanu raaxada uu guurku lahaa uga helayn waayo naftu waxay ku xasishaa guurka raalida laysku yahay lakiiin guurka labada qof laysugu geeyo dan waalid iyo mid lamida toona ayahiisa ayaa iska yaraada Maryan iyo Siciid waxay sidi u wada jogaan iyagoo dhib mooye aan dheef guur isku qabin ayuu siciid fasaxii ka dhamaaday waxaanu u bohlyoobay carigii England ee uu markii horeba ka yimid markii uu maqnaa mudo sannado ah ee ay wax war ah ka wayday laguna soo sheegay balwado badan oo uu lahaa marki horeba ayaa ay Maryan reerkoodii u tageen reerki inanka waxaana ay ku wargaliyeen in ay inantii so fasaxaan hadii kale ay la wareegan markiba waxa laga war doonay Siciid oo telephone ka lagula xidhidhay isagoon ka warwareeginba waxa uu si toos ah u soo diray warqadii maryan reerkoodiina yaab waxa helay inankiii lakiin waxa la dhadhacay balwadihiisii iyo noloshiii uu ku nolaa oo ka fogayd xaqiiqada kuna salaysnayd khiyaali badan oo ahaa madhalays aan isaga iyo ayihiisa danbeba aan u ficnayn Maryan arinkaa way ku faraxday imikana waxay joogtaa gurigooda waxaany wakhtigeeda ku qadataa inta badan cibadada ALLE iyo guriga oo ay joogto inta badan waayo iskuulkii waa laga saaray wixii looga saaray ee aha guurkana may raali ka ahayn ee waxa uu ahaa guur lagu siyay dibada ayuu ka yimid iyo lacag ayuu leyahay jacaylkeedina way ku wayday nolosha dhamaanteedna wax micno ah ugu ma fadhido waxaanay tahay qof iska nool oo wax walba oo ay noqon lahaydba ay walidiinteed seejiyeen .
Mustafe malintuu imitixaankii form four ka baxay waxa uu qabsaday jidka dheer ee loo maro libya ma haysto wax kharash ah oo uu ku tago haduu haystana ma aha mid Ethiopia dhaafina cadhadii uu ka qaaday nolosha uu soo maray iyo gacalisadiisii sida khaldan lagaga qaaday ayaa ku kaliftay inuu u tahriibo qaarada yurub si uu isna u helo darajada dadka xuquudooda lagu luminaayo ee ah dibada ayuu ka yimid. silic iyo saxariir ayuu ku tagay sudan waxaanu ka noqday kirishbooy mudo markii u ka ahaa waxa uu lacagtii uu ka shaqaystay ugu amababxay saxaraha dheer ee libya loo maro,Mustafe kama maqna dhibta uu leyahay saxarahasi oo warkiisa u hayaa lakiin waxa wata wax ka awood wayn oo aanu iska celin ka rayn oo ah nolosha uu cuqdada ka qaaaday dhamaanteed waxaaanu ku nolaa nolol aanu dhimashadeeda iyo dhayaheeda kala jeclayn waayo waxa uu ka xumaday gabadha uu jeeclaa ee lagaga qaaday walaaga lacag badan yahay iyo dibada ayaa laga yimid oo xataa gabadha labixinayaa aanay raali ka ahayn mustafe waxa uu aaminay weedha ah “jacaylka iyo lacagta lacagta ayaa power wayn” waxaa uu dhib, oon, gaajo,rafaaad iyo dhibaato aduun ku mutay siduu saxaraha aadka udheer uu uga gudbi lahaa aakhirkiina waxaa uu gaadhay libiya waxay ku qaadataba
Mustafe qofka arkaa ee markii hore yaqaanay wuu iska agmarayaa diifta iyo daranyada ka muuqata awgeed iskadaa in lagartee xataa kuma soo suurayn karaysid waayo marwalba waxaa uu ahaa mid ku adag in uu dhib iyo dheefba cagaha soo saaro meesha noloshiisii oo dhan lumisay wuxuu libiya joogoba mudo bilo ah wuxuu bilaabay siduu u baadi goobi lahaa lacag uu doonta kuraaco aakhirkiina waxaa uu shaqo ka helay beeralayda liibiya. Markii uu laba bilood sidaas kushaqaysanayay waxaa u dhamaystirantay lacagtii uu doonta kuraaci lahaa waxaa uuna udhaqaaqay dhinacaa iyo bada isagoo aad uuga warhaya dhibaatada lagala kulmo bada iyo safarka dheer ee ilaa Talyaaniga lagu tago oo aano qof caqli saliima lihi naftiisa uquudheen Laakiin caqliga fayoobi waxa uu kujiraa jidhka fayow meel uu dhul iyo cir maraayo ma oga waxa uu cadna waa inuu nolosha haalkaas taal iyo dibadaa noloshiisii dhantaashay soo arko aakhirkiina waxaa uu doon karaacay xeebaha wadanka Liibiya markay laba maalmood iyo laba habeen bada kujireen ayuu Mustafe xanuunsaday doontiina xumaatay waa badwayn dhexdeed ILLAHAY mooye ee bani aadmi umaqan hadalkiisa daa waxaanu bada kusii dhexjiray afar caano maal oo danbe doontana wuxuu kudul ahaa qof aan nafi kasarayn oo doonta iska dhexyaal aakhirkii waxay badwaynta kudhex silcaanba waxaa badbaadiyey ILAAHAY kasokow markab lagalahaa jasiirada Malta oo Mustafana uqaaday cisbitaal isaga iyo intii ildarnayd dadkii kalena xero qoxoonti.
Markii mudo lagu baxnaninayay cibisbitaalkii ee uu ka soo reeyay kuna soo noqday inuu noloshii caadiga ahayd waxa uu halkiisii ka sii waday socodkisii isagoo gaadhay wadanka ingiriiska oo uu iska dhiibay waxaanu markii uu isdhibayba ku dadaalay sidii uu noloshiisa isbadal ugu samayn lahaa waxaanu ahaa mid qabanayay shaqo wal oo uu ku muytaysan karayay shaqo waaxaanu akhirkii ahaa mid si wanaagsan ula qabasaday noloshii cusbayd lakiin muu ahayn marwalba mid kamadhan jacaylki iyo noloshii u la wadaagi jiray maryan waxanu noqday nin reerkoodi oo dhami ku tirsan yahay isla mudo yar gudaheedan waxa uu reerkoodii u soo raray magalada hargeisa oo uu uga dhisay guri waxaanu ku daadaalay inuu reerkooda u so ka xaysto dalka England markii uu mudo usoo dodayna waa uu kaxaystay abihii oo diday moyee reerkoodii oo dhamina waxay u boholeen cariga UK Mustafe dadaalka adage ee uu noloshiisa u soo galay waxay gayaysisay in dad badan oo aan markii hore u soo jogasan jirin ay imika u soo jogsadaan kana dalbadaan wax wal o ay uga bahdaan Maryan kama war la nolosha cusub ee uu Mustafe ku nool yahay Kaman rajo qabta in noloshii ay waayo wadaagi jireen ay u soo noqoto lakiin Mustafena Maryan xagiisa waxay ka tahay mid wali ah xaas oo saygeeda la joogta waxaanu ahaa mid marwalba niyada ka jecel Maryan markii uu maqnaa muddo sannado ah waxaa uu akhirkii go’aan saday inuu soo xagaa baxo markibana waxa uu dagay gurigii cusbaa ee uu u soo dhisay reerkoda isaga iyo abihii oo hore u sii daganaa .
Markii u yimid ba waxa uu booqday gurigii uu ku soo koray ee habaryartii hadayado badan oo uu u siday ka dib waxa uu si kaftan ah ugu yidhi Maryan iiga waran ileen waxay ahayeen isaga iyoo habaryartii will iyo walidkii oo iska warqaba markiibana garatay ujeedadiisa markasay ku tidhi iyadoo aad modid inay kaftamayso
Orod oo imikaba guurso inan taasi way madax banan tahaye!!
Habo malaha waaad igu ciyarysaa inankii lasiyay ee dibad ka yimid maxa helay
Markuu intaas yidhi ayay habaryartii uga dhacday sheekadu siday u dhacday iyo waxay kal kulantay guurkaas khasabka ahaa waxaanay iyadoo ku dhiri galinaysa ku tidhi
Hooyo wal oo jecel inay inankeda u guuriso waxay la jeceshaahay in ay inankeeda u dhisto maryan wanaageeda awgeed iyo dhagankeeda dinteeda iyo asluub wanaaga ay inaan taasi leedahay habo aniguna waxan ku odhan lahaa kulana jecelahay in aad inantaas guursato
Markii ay intaas tidhi ayuu Mustafe ku yidhi isagoo dhoola cadaynaaya
Marki horeba waxan ku jeclaaday wanagaas lagu wada arkay ayuun buu ahaa ilaa malinkaa ilaa mantana malina kamaan saarin maskaxdayda iyo qalbigaygaba toona.
Markii ay intaas is waydarsadeen ayuu u balan qaaday inuu hawsha Maryan gali doono Lana xidhidhi doono iyada
Mustafe habeenkaas oo dhan waxa uu ahaa mid ka fikira maryan iyo sidii uu mar labaad nolol xeel dheer ula wadaagi lahaa habenkiiyo dhana kamuu seexan waxanu ahaa mid la iladaran jacaylkii Maryan ee ku soo laba kacleyay markii uu waagi u baray isagoo sidii ah ayuu goor ay tahay barqo la hadlay Maryan waxaan dhex martay shekadan
Hallo! Maryan miyaa walal
Inta ay yara garatay ayaya hadana shaki ka galay ileen waa jacayl ka baadaye
Waa nigan kula hadlaaya ee waa kuma
Isagoo la kaftaamaya ayuu hadana ku celiyay oo yidhi
Ima garanaysid miyaa
Haa walal ee isku kay sheeg
Inta uu cabaar fikiray ayuu garan wayay wax uu ku yidhaa marka suu soo xasuustay hadal hayskoodii ahaa
Maryan waan ku jecelahay waligayna waan ku jeclaa kuna jeclaan donaa
Markiiba garatay qofka lahadlayaaa cida uu yahay mise waa Mustafe oo aanay meeshaba ka filanayn iyadoo yaaban maskaxdeedana ka dhadhici la ayay ku tidhi
Anaa kaa daran in aan la qiyasi karayn
Markiiba waa lays gartay laysna waraystay mid aad u qoto dheer oo uu jacayl ku dhehan yahay.
Kadib waraysigaas iyo wayahii dhacay inta badan wakhtigii ay kala maqnayeen ayay iska xog waraysteen waxanay akhirkii ku balameen guriga Mustafe reerkooda isagoo lahadlaayaana waxa uu yidhi
Gacaliso Bari aynu isku nimaadno adiguna kaalay xafadii saxibadaa hinda aniga ayaa ka soo doonaya ee sidaa haynoo ahaato macaaan
Waxaa soo nolaaday jacayl ay wada jilayeen laba isku rali ah oo ay dhan taleen lacag, waalid, dibad iyo wayaha aduunka oo iska badan waxa aanad ka dareemaysay in uu jacaylkii soo laba kacleyay uu maraayo heer uu midho dhalo
Mustafe waaxa uu u diyaariyay gurigoodii isagoo Maryana ugu talo galay soo dhawyn tii ugu wanagsanayd ee intay wadda socdeen kal mutaystaan mustafe waxa uu u soo ababaxay gurii Hindiyo, Maryana gor horeba way soo diyaar garowday iyadoo aad u labisan markii uu soo hor istaagay gurigi ayuu hoonka u garacay
Maryan isla markiiba way garatay waxaanay u soo baxaday dagdag iyadoo aad mudid xuural cayn quruuxdeeda ayay soo baxaday markiba Mustafa markuu arkay ayuu gadhigii uga soo dagay isagoo aad modii inuu la indho daradaray quruxda gacalisadiisa iyo sida aanay wayadaa iyo sannado badan isku arag ayuu ku soo orday iyana sidoo kale soo oroday markii ay isa soo hor istageen ayay iyakoon wada hadal isku dhageen ileen waa kalgacyl kala raagaye ay dhunkasho laba is jecel oo kal raagay is dhunkadan isa siyeen markii ay mudo tagnayeen ayay iyakoo gacmaha is haysta fuleen gadhigii markiibana waxay tageen gurigii Mustafiyo, alabaabka markay ka galeen ayay Maryan si wanaagsan u garwaaqsatay sida wanaagsan ee uu gacaliyaheedu u soo tabcaday waxay fadhisteen beer yar oo guriga xagiisa danbe ah oo uu Mustafe u sii diyariyay waxayna ahayeen qaar aad modid inay nolosha wadageen oo ralii isku ah siday isku ag fadhiyeen iskuguna faraxsanayeen waxanay dib u bilabeen jacayl qotodheer oo ay ka soo bilabeen ilaa yarantoodii
Waxaanay wadagayeen sheeko dheer oo is waayo waraysi ah kadib Mustafe waxa uu u soo dadagay arinkii ay habaryartii ku dhiri galinaysay ee ahaa guurka Maryan isagoo usoo bandhigayana waxa uu yidhi
Jacayl mudo dheer aynu soo wadaagaynay ayaa inaga dhexayay dhibaato wal oo uu soo marana manta waynu wada jognaa ILLAHAY mahadii markaa macaan u malayn mayo inaad igu didayso ee waxan jeclaystay in aan kamidha dhalino jacaylkeeni una badalno heer uu lamaanobo oo aynu isku noqono xaaji iyo oridiis
Maryan marna kamay filayn maskaxdeedana may soo galin in uu guur ula iman doono mustafe waayo waxay ogayd waxay reerkoodu badeen ayay iyadoo dhinacna ka faraxsaan yara xishoonaysana tidhi
Macaan mustafow anigaba waxa ishaa ii yeelay jacaylkaaga ayuu ahaa aniguna waxan raali kugu ahay sidaad raalida iigu tahay arina gacantaada ayuu ku jiraa Mustafe oo aan sannadaha arag jacaylka maryan iyo hadalkeedii wanagsanaa dhaqankeedii iyo asluub wanagedii ayuu yidhi
Macaan waxan doonayaa in aan is guursano kuna soo gogol fadhiisto arinkana aan dadajino oo aan walidiinteen u sheegno
Wayahay gacaliye ee anuu caawa ayaan reerka u sheegayaa markaa goorma ayaynu balanta ka dhiganaa
Waxa aan doonayaa in aan malinta isniinta ah ka dhigano doonista isla jimcahana aan aqal galno
Wayahay gacaliye runtiina manta maalin iiga farxad badan isoo maraimayso maarkiba waxa lagalay hawshii oo Maryan habeenimadiiba markii ay tagtay gurigoodi waxa ay u sheegtay hoyadeed kadibna intuuna abaheed iman ayay iska seexatay markii uu abaheed yimidna waxa u sheegtay hoyadeed oo uga warantay siday wax u jiraan markiiban odaygii u yaabay sida ay wax u dhacayaan iyo inuu inantiisa ka soo doonay wiilku malintii sida arxandarada ula hadlayay markii waagi baryayna waxa uu u yeedhay maryan oo uu ka waraystay siday wax u jiraan waxanu hadalkeeda ka dhadhansaday sida ay raalida ugu tahay guurkan,
Tababushihii hawsha ayuu galay Maryan abaheed waxaanu iskugu yeedhay adeeradeed iyo abtiyayasheed una bandhigay siday wax u jireen isagoo hadalki watana waxaa ka Ag kacay maryan Adeerkeed Axmed oo aad u kacasan isagoo hadal adag ku hadalaaya si uu hadalkisu u socdo ayuu yidhi, “Walaal Maxamuudow gobanimadu sida ku jirtaa dhaqankeenuna dhigayaa waa walal inankaa inanta inaga soo doonay in aynu inantaa siino inakoon ka qaadayn wax allele wixii laga qadi jiray wiil gabadh soo doonay inakoo og sidaynu markii horeba ka yeelanay uguna darno duco badan”
Maryan adeerkeed Axmed marki horeba guurkii Maryan ee hore kamuu raali ahayn waxaanu ahaa mid la dhagaysan wayay gartisii lakiin manta fursad u haysta in tiisa la raaco mudo yar gudaheedna waxa laysku raacay hadalkisii oo aan wax dood ah laga kenin.
Malintii isniintii marki la gadhay ayaa laysugu yimid huteelkii balantu ahayd markiibna layswada salamay laawda fadhiisatay ayuu maryan adeerkeed ka kacay goobtii bixinta isagoo hadlayana waxa uu yidhi, “Marka hore in taan waxba laysa siin aynu is cafino oo aan isa saamaxno madama aynu noqonayno laba reer oo xidid ah
Sidii ayaa layeelay oo waa laysawada gacan qaday Maryan abaheed iyo Mustafena waxay is gacan qadeeen iyakoo ay iskugu danbaysay malintuu gurigooda ugu hanjabay lakiin aad markan modid inay isku yihiin wiil iyo aabo is dhalay
Kadib waxa hadalkii ku noqday Adeero Axmed oo yidhi
“Maanta waxaanu idin siinaynaa inantayada Maryan iyadoon inanka Mustafena la waydiinayn wax walba oo inan laga bixin jiray, waxaannu inanta ugu daraynaa duco badan iyo inay noqdaan labadii gurigoodu jiro ee ubad khayr qaba kala hela.” Markii uu intaas yidhi waxaa la soo xidhay xafladdii oo aanay dood badan oolin kadibna waxa loo diyaar garoobay arooskii Maryan iyo Mustafe, waxaanay aqal galeen habeen Jimce ah. Waxay wadaageen jacayl iyo nolol aan nooceda hore loo arag. Waxay ka midho dhaliyeen jacayl ay sannado badan soo jilayeen, noloshu raaxo badanaa, macaanaa, wanaagsanaa, kalgacayl badanaa, marka raalida laysku yahay, qurux iyo wanaag badanaa marka wax walba la wadaagayo.
Mustafe iyo Maryan maanta waxay dagan yihiin magaalada Hargeysa iyagoo isku leh laba wiil iyo gabadh.
19/05/2014 Sheeko Gaabanmaamule
Layla iyo Qays, waa sheeko jacayl ah oo ka mida sheekooyinka ugu caansan bariga dhexe,sheekadan waxay taariikhdeedu u noqneysaa ilaa qarnigii 7aad, Layla iyo Qeys waa sheeko sida oo kale ku faaftay Waqooyiga Afrika iyo Hindiya, hadaba Layla iyo Qeys maxay ahaayeen? Sheekadoodu siday se u dhacday?
Nin la odhan jiray Majnuun (ninkii waalnaa) oo magaciisa caadiga ahi uu ahaa Qays ayaa Layla kula kulmay si kedis ah meel ay dumar xaflad ku lahaayeen dabadeed wuxuu bilaabay inuu geeliisii gawraco munaasibadaa haweenka awgeed, haweenkan waxaa ku jirtay Layla, Layla waxay jacayl u qaaday Qays isna mid kii la mida ayuu u qaaday, si dhakhso ah ayaa Qays u doonay layla in uu u geed fadhiisto oo wuu weydiisto Aabaheed ,balse nasiib daro layla Aabaheed hore ayuu nin kale ugu balan qaaday inuu inantiisa siinayo, Qays arrintaasi waa u cuntamiweyday wuxuuna ku adkeystay in layla la siiyo, halka Layla aabeheedna ku adkeeystay in innantiisa uu nin kale ugu balan qaaday,Qays wuxuu noqday nin jacayl qaaday laakin innantii uu u qaaday ku hunguubay,
Qays wuxu u tiriyey Laylagabay badan oo uu mar ku amaanaayo,marna ku calaacalaayo,marna uu ku muujinaayo marxaladan cusub ee la soo deristay.
Gabayada Qays uu u tiriyey Laylavwaxay qayb ka noqdeen suugaanta Beershiya iyagoo u isticmaali jiray siyaabo kala duwan waxaa la sheegaa mararka qaar inay u isticmaali jireen hees hawleedyo.
Isla marka uu Qays ku sugnaa xaaladaas Layla waxay joogtay gurigooda oo lagu ilaalinaayey iyada oo gabayada uu tirinaayo Qays ay ka dhigeen Layla mawduuca qudha oo lagu sheekeysto iyo xanta dadka. Layla aabeheed wuxuu balan ku galay inuu Qays ka ilaaliyo Layla, qiimaha ay doonto ha ugu kacdee, waxaa la sheegaa in nin la yidhaa Ibnu Salaam u weydiistay Layla aabbeheed inuu siiyo laakin Layla aabbeheed wuxuu ninkaa u sheegay in innantiisu weli yartahay oo uu sugo ilaa dhowr sanno si ay ugu soo korto,
Qays wuxu galay nolo adag oo silic leh,sheekadii Qays waxay gaadhay nin la odhan jiray Nezamis’s oo ahaa nin deeqsio ah oo sida la sheegay boqor ka ahaa dhulkii Beershiya ee hada loo yaqaan Iiran,ninkaas oo isku deyey inuu Qays la taliyo laakin markii u kala quustay waano iyo talo ayaa la sheegaa in Boqorkaa ay ka gaadhay in uu weerar ku qaado Laylareerkii ay ka dhalatay isagoo ka doonayo reerkaas in Layla iyo Qays laysa siiyo hadii kale dhiig daadan doono.
Inkastoo oo dagaalkii dhacay oo la jebiyey Laylaqabiilkoodii hadana Aaabaheed wuxuu ku adkeystay in aanu marnaba Laylasiin doonin Qays isagoo ku dooday in Qays dhulka dhigay oo burburiyey sharaftii Layla,wuxuuna odhan jiray dabeylkasta oo soo dhacdaa waxay sidaa magicii innanteyda,isago sheegay in Layla oo uu Qays siiyaa uu ka dooranyo inuu dilo oo qudha ka jaro Layal.
Boqorkii wuxuu ogaaday in aanu ku guuleysaneyn inuu Layla aabbeheed ku qanciyo in uu isa siiyo laamanahan isku dhibaateysan faraha ayuuna ka qaaday arrintii Laylaiyo qays, ninkii Layla loogu balan qaaday ayaa doonay inuu ka faa,iideyso jaaniskaa isagoo u yimid Layala aabaheed mar labaad, balse markan si dhib yar ayaaba Layla loo siiyey, wuxuuna Layla u kaxaystay gurigiisii, Qays markii uu maqlay in Layla nin la siiyey ayuu ka sii daray wuxuuna wehel cusub ku sii yeeshay keyntii uu markii horeba dugaaga la joogay.
Qays aabihii wuxuu la dhintay murugadii iyo uur xumadii uu ka qaaday noloshii uu la dersay inankiisu isagoo Qays ahaa inanka keliya ee uu lahaa ,uuna u jeclaa si aada. Qays markii uu maqlay in Aabihii hoos maray ayuu xalkiisii ka sii xumaaday intii hore. Balse nin qoyani biyo iskama dhowro. Isaga ayaaba tisii la il daran, wuxuuna Aabo ka sii dhigtay oo booskii Aaabihii u sii buuxshay habardugaagii uu la noolaa.
inkastoo Laylala guursaday hadan ma ay ilaawin jaceylkii Qays waxaana ku sii siyaaday jaceylkii ay Qays u haysay. Layla waxay warqad u dirtay Qays iyadoo uga tacsiyadeyneysa geerida ku timid aaabihii waxanay u sheegtay in ninkeedu ogyahay in ay Qays jeceshahay oo aanu weligeed qalbigeeda ka baxayn.
Mudo ka dib waxaaba dhimatay Qays hooyadii,Laylana waxay fariin u soo dirtay Qays iyadoo u soo dirtay nin waayeel ah una sheegay in Layla ay dooneyso in ay kulmaan. Qays waa raacay ninkii waxaana mar labaad kulmay lamaane is jeclaaday oo dhib aduunyo muquuray, Layla ninkii la siiyey wuxu ogaa inaanu marna qalbiga Layla ka saari karin Qays.
Layla iyada uma dulqaadan karto mudadaas dheer ee aanay Qays is arkeyn waanay xanuunsatay waanay dhimamatay. War xumi dugsi ma fadhiistee Qays markii uu maqlay in Layla ay dhimatay oo dhulka hoos martay ayuu aad uga xumaaday wuxuuna bookhday xabaasheedii, halkaasna waxaa ku soo af-jarmay noloshi Qays waxaana uu ka daba tegay Laylaoo isna waa dhintay.
Inkasta oo sheekada jaceylka ah ee Layla iyo Qays ay adagtahay in si dhaba loo helo waayo waxay dhacday qarni aad u fog haddana sidaan ayaa ugu dhow sida maanta loo weriyo.
19/05/2014 Sheeko GaabanAamina Shirdoonmaamule
Bari hore, ayaa waxaa jiray tuulo yar oo ku taalla Soomaaliya, bariga Afrika. Cidhifka tuulada waxaa jiray dhulbeereed hodan ah meeshaas oo ay dadku ka beertaan dalaggooda ooyna ku raacdaan idahooda. Tuuladu aad ayay u qurux badnayd laakiin sidoo kale waxay ahayd mid khatar badan, mararka qaarna waxaa adkayd in laga ilaaliyo dalagga iyo idaha tuulooyinka dariska ah ama tuugta khatarta ah. Xataa waxaa jira sheeko ku saabsan jin kaasoo soo baxa habeynkii oo guba dalagga oo cuna dhamaan adhiga.
Bahdoon noolashu ooma sahlanayn, waxaa loola dhaqmay si xun abidna looma oggolaan inuu la ciyaaro libaaxyada yaryar ee kale. Waxuu u koray si kalinima ah waxuuna badanaa xasuusna in uu qalaad yahay. Indhihiisa guduudan waxay ka saartay raxanta kale libaaxyada yaryar ee xaasidiinta ahna waxay badanaa oogu yeedhaan magacyo wayna ku jeesjeesaan.
Maskiin Bahdoon waxuu galay hawdka si uu ubillaabo noolashiisa cusub ee kalinimada ah. Aad ayuu u murugooday, badanaana aad buu u cidloodaa, laakiin oogu yaraan lama joogaan libaaxyadii kale kuwaasoo badanaa ku maadsan jiray indhihiisa guduudan oo badanaa xasuusin jiray in uu ka duwan yahay.
Sanado ayaa la dhaafay Bahdoona wuu weynaaday, waxuu noqday libaax xoogan. Waxuu yaqaanaa ugaadhsiga waxuuna naftiisa ooga sameeyay noolal hawdka dhexdiisa. Laakiin badanaa waxuu ahaa kali waxuuna badanaa tagi jiray cidhifka hawdka habeenkii si uu u soo eego tuuladiisii hore.
Waxuu ku farxaa libaaxyada geesiyiinta ah ee ilaalada ka haya xayawaanka iyo dalagga, waxuuna aad u jeclaaday in uu ku soo biiro oo dib loo oggolaado ka mid noqoshada raxanta.
Waxay ahayd habeyn uun in uu markii oogu horraysay Bahdoon arkay jin daran oo ka soo daganayaa cirkaa oo madaw oo weeraraya tuulada, ku gubaya guryaha iyo dalagga olal ka soo baxaya afkiisa, oo ka dafaya idaha dhulka ciddiyihiisa fiiqan inta uuna bixin habeenku.
Jinku waxuu soo weeraray mar kale habeenkii xigay, waxuu soo weeraray marar badan, ilaa ay dadka tuuladu ay aad ooga cabsadeen inay ka soo baxaan guryahooda. Xayawaan badan way tageen, libaaxyadiina si weyn ayay u wax yeeloobeen ayagoo isku dayaya inay difaacaan tuulada; intoodii badneyd waa la dilay inta hadhayna si xun ayaa loo dhaawacay. Tuuladu kama badbaadin weeraro badan oo uu ku soo qaaday jinka daran, qaar dadka tuulada ahna xataa waxay xidhxidheen alaabadooda waxayna u qaxeen hawdka si ay u badbaadaan.
Habeenkaas, Bahdoon waxuu u soo gurguurtay meel ku dhaw tuulada ooy qariyeen geedo dheer dheer kuwaas oo ku safan cidhifka hawdka. Waxuu ku ilaaliyay hal il ah cirka madaw xilliga oo dhan waxuuna dhagaystay shanqadha baalasha jinka ee dhexmaraya hawada. Wuu xooganaa wuuna go’aansaday waxuuna u sheegay naftiisa in uu caawa burburin doono jinka daran oo uu ku soo dabaali doono nabad tuuladiisa uu jecel yahay markale.
Si dhakhsa ah, Bahdoon waxuu maqlay shanqadha baalasha xagga sare.
Waxuu kor u eegay cirka madaw waxuuna arkay humaagta jinka daran ee u soo daganaya jihada tuulada: ciddiyihiisa dheer dheer waxay u iftiimayeen caddaan dhalaalaya sida dayaxa, indhihiisa waxay ka baadhayaan dhulka wax cusub oo la cuno, wuu gaajoonayaa wuuna cabsi galinayaa.
Haddaba Bahdoon waxuu isku geystay dhamaan awoodiisa, dhamaan geesinimadiisa iyo go’aankiisa. Mar alaale marka uu jinku ku soo dagtay tuulada dusheeda, Bahdoon waxuu weerar ka soo qaaday hawdka wuuna hinraagay asagoo wata dhamaan calool adeeggiisa. Jinku waa fajacay wuuna baqay inuu arko labo indhood oo olal ah oo ka soo baxaya hawdka, iyo hiinraaga libaaxa geesiga ah ayaa cabsi ku riday calool jileeciisa.
Bahdoon wuxuu u booday hawada waxuuna ku duubay cidiyiihiisa xoogga badan seynta jinka waxuuna ku soo tuuray bahalka dhulka. Libaaxa geesiga ah iyo jinka shaydaanka ah ee daran waxay galeen dagaal, laakiin si dhakhsa ah jinka waxaa ka tagtay awooddiisii markii uu ka hor yimid dagaalyahan xirfad leh.
Bahdoon wuu ka xoogbatay wuuna ka geesisanaa jinka kaasoon loo isticmaalin ka hor imaad sidan oo kale ah. Indhaha gaduudan ee Bahdoon waxuu ifiyaa habeenka si uu oogula dagaalamo jinka, waxayna si dhakhsa ah dadka tuulada ooga soo baxeen guryahooda waxayna billaabeen inay ku farxaan Bahdoon kaasoo sameeyay dagaalka geesinimada libaaxa tan xataa oogu adag.
Oogu danbeyntii, Bahdoon waxuu ku guuleystay dagaalka waxuuna dilay jinkii.
Sidoo kale xoogaw libaaxya ah oo hadhay waxay ku farxeen geesinimada Bahdoon dhamaantoodna waxay u dabaal dageen guushiisa uu ka guuleystay bahalka. Tuuladu waxay noqotay amaan markale kuwii u qaxay hawdkana waxay ku soo noqon karaan guryahooda oogu danbeyntii waxayna bilaabi dib u beeridda dalaggooda iyo u korinta baraar iyo waxarro inay noqdaan adhi sidaa darteed waxay haysan karaan markale caano iyo burcad ay cunaan.
Bahdoon waxaa dib loogu soo dhaweeyay raxanta waxuuna noqday dagaalyahanka loo dabaaldago ee tuulada. Libaaxyadu aad ayay ooga xumaadeen in ay u diraan hawdka, ka dibna waxayna garawsadeen maadaama uu ka duwanyahay inayna ahayn in loola dhaqmo si duwan.
Oogu danbeyntii, libaaxa geesiga ah waxaa loo oggolaaday raxanta waxayna ahayd markii koobaad ee noolashiisa uu dareemay inuu xigto leeyahay. Bahdoon waxuu ku soo noqday wadanka.
Boqorka iyo Galleyrkiisa
10/05/2014 Sheeko GaabanJeems Bidaarguulmaamule
Jankiis Khaan wuxuu ahaa boqor weyn oo dagaalyahan ahaa. Wuxuu ciidankiisu isagoo hogaaminaya kuduulay Shiinaha iyo Furus, wuxuuna qabsaday dhulal badan. Waddan kasta, dadkiisa waxay sheegi jireen ficiladiisii; waxayna yiraahdeen illaa xilligii Aleksandar-kii Weynaa, boqor Jankiis la mid ah lama arag.
Maalin maalmaha ka mid ah, isagoo deegaankiisa jooga, dagaalna uu ka nastay, ayuu isagoo faras saaran duurka galay si uu usoo ugaarsado. Waxaa la socday saaxiibo fara badan. Socdaalkooda waxaa ka muuqday farxad, waxayna siteen qaansooyin iyo leebab. Gadaashooda waxaa daba socday adoomadooda oo watay eeyaal.
Waxay ahayd koox ugaarsato oo dhameystiran. Keyntii waxaa laga maqlayay qeyladooda iyo qosolkooda, waxayna filayeen in ay la hoydaan ugaar aad u fara badan.
Boqorka gacantiisa waxaa dul fadhiyay galleyr uu aad u jeclaa, waayo waagaas galleyrada ugaarsi ayaa loo tababari jiray. Hal eray ayuu mulkiilaha ku oran jiray, markaasey cirka u duuli jireen iyagoo raadinaya ugaar. Hadey nasiib wanaag arkaan sagaaro ama bakeyle, waxay soo dagi jireen iyagoo usoo dhacaya sida fallaar la soo ganay oo kale.
Markuu habeenki soo dhawaaday, waxay ugaarsatadi bilaabeen in ay dheelmadaan. Marar badan ayuu Boqorku dhex maray keyntaan, waddooyinka si fiican ayuu u yaqaanay. Haddii ay ugaarsatadii qaadeen waddadii ugu dhoweyd, Boqorkii wuxuu qaaday waddo dheer oo dhex marta waadi ku yaala laba buurood dhexdooda.
Maalintaa maalin aad u kulul ayey ahayd, Boqorkiina aad ayuu u oomanaa. Galleyrkiisi mar hore ayuu gacantiisa ka duulay, waxaa hubaal ahaa in uu galleyrku iskii u dheelman doono.
Boqorka si tartiib ah ayuu u watay faraskiisa. Mar hadda ka horeysay ayuu aagaan ku arkay balli biyo nadiif leh, khaasatan waddaduu hadda marayo. Yaa mar un tusa balliga! Laakiin maalmihii kululaa ee jiilaalka ayaa qalajiyey balliyaashi buuraha ku yaalay oo ay biyuhu ka soo burqan jireen.
Ugu danbeyntii, wuxuu aad u farxay markii uu arkay biyo ka soo dhibcaya dhagax dhinaciisa. Wuxuu ogaaday in uu kor jiro balli. Xilligii roobabka, wabi ay xawaarihiisu aad u xoog badan yihiin ayaa meeshan ka qulquli jiray; laakiin hadda wuxuu isu badalay hal dhibac oo marba soo dhacaysa.
Boqorkii faraskii ayuu kadagtay. Wuxuu boorsadiisa ugaarsiga kala soo baxay koob fidda ah. Wuxuu u hoos dhigay dhibcihii soo dhacayey.
Waqti dheer ayey ku qaadatay in uu koobki buuxsamo; Boqorkana aad ayuu u oomanaa, si adag ayuuna u sugay. Ugu danbeyntii wuu buuxsamay. Wuxuu saaray bushimihiisa, wuuna cabbi rabay.
Mar un, sharqan ayaa laga dareemay hawada, koobkiina gacantiisa ayaa laga riday. Biyihii oo dhan dhulka ayey ku daateen. Boqorkii kor ayuu eegay si uu u arko ciddii falka ka danbeysay. Waaba galleyrkii uu jeclaa!
Galleyrkii ayaa cabbaar dul heehaabay balliga, kadibna dul dagay dhagax balliga agtiisa ah. Boqorkii koobka ayuu dib u qaatay, haddana wuxuu u hoos dhigay dhibcihii biyaha.
Goortaan wax badan ma uusan sugin. Koobka barkiis markuu buuxsamay ayuu u qaaday xagga afkiisa. Laakiin intuusan taabsiin bushimaha, galleyrkii ayaa hoos u soo duulay mar kale, gacmaha Boqorkana ka tuuray koobkii.
Hadduu Boqorki xanaaqay. Mar kale ayuu isku dayay in uu cabbo, markii saddexaadna galleyrki ayaa cabbitaankii u diiday.
Markaas ayuu Boqorki aad usii xanaaqay. “Sidee baad saan iigu gali kartaa?” ayuu yiri, “Haddaad ii gacan gasho, qoortaada ayaan maroojin doonaa!”
Mar kale ayuu koobki buuxiyey. Laakiin intuusan isku dayin in uu cabbo, wuxuu galka ka siibtay seeftiisa.
“Hadda Jaalle Galleyrow,” ayuu yiri, “waa markii ugu danbeysay!”
Intuusan hadalkii dhameysan, galleyrkii ayaa soo dagay oo koobki gacantiisa ka tuuray. Laakiin Boqorka intaas ayuu rabay. Intuu seefta la dhacay ayuu shimbirkii la helay isagoo agtiisa maraya. Galleyrkii maskiinka ahaa ayaa dhulka ku dhacay, isagoo dhiig baxaya oo ku dhimanaya cagaha milkiilihiisa agtooda.
“Dhibkaaga wixii kaa raacay waa kaa!” ayuu yiri Jankiis Khaan.
Laakiin markuu koobkiisi raadiyay, wuxuu arkay in uu ku dhacay meel uusan gaari karin oo laba dhagax dhexdooda ah.
“Si kastaba ha ahaatee, waa in aan ka cabbo balliga,” ayuu isku yiri.
Markaas ayuu billaabay in uu kor u fuulo dalcadda buurta si uu u gaaro meesha ay ka soo dhibcayaan biyaha. Shaqo adag ayey ahayd, kor markuu usii korana, haraadka ayaa kusii kordhaya. Ugu danbeyntii meeshi ayuu gaaray.
Dhab ahaantii, meesha waxaa ku yaalay balli biyo ka buuxaan, laakiin waa maxay waxaas balliga dhex jiifa, uguna dhowdahay weyninkiisu in uu buuxiyo balliga oo dhan? Wuxuu ahaa mas weyn oo dhintay, oo ah nooca ugu sunta xun.
Boqorki wuu istaagay. Wuxuu iloobay haraadkii ku dhaganaa, waxa uu ka fikirayo oo kaliya waa meydki shimbirki miskiinka ahaa ee jiifa dhulka, buurta agteeda.
“Galleyrka ayaa nafteyda badbaadiyey!” ayuu ku dhawaaqay, “laakiin maxaan abaal marin uga dhigay? Wuxuu ahaa saaxiibkii iigu ficnaa, waana dilay!”
Buurti ayuu ka soo dagay. Shimbirki ayuu si tartiib ah dhulka uga qaaday, kuna riday boorsadiisa ugaarsiga. Kadibna faraskiisa ayuu fuulay, una dhaqaaqay dhanka hoygiisa. Wuxuu isku yiri:
“Maanta waxaan bartay cashar murugo badan; wuxuuna yahay, inaad waxba sameyn markaad xanaaqsan tahay.”
Ninba Wuxuu Geystaa Loo Gudaa
24/04/2014 Sheeko GaabanLiiban Axmedmaamule
Riti iyo dawaco ayaa waxay ahaayeen saaxiibo aad ah waxayna ahaayeen tuug waaweyn. Maalin, ayaa labada saaxiibo waxay go’aansadeen inay wabiga ka gudbaan sidaa darteed waxay u socdaaleen beer u dhaw inay ka soo xadaan wax la cuno. Dawacada yari ma dabaalan karto sidaa darteed ritigu waxuu ku yidhi saaxiibadii, ‘Dhabarkayga ku soo bood waxaanan kaa gudbin wabiga.’
Hadaba labada saaxiib waxay bilaabeen inay qosqoslaan ooy ku galgashaan cawska diiran ayadoo ilayska cadceedu qalajisay dhogortooda qoyan. Dawacadu waxay baratay cashir lama ilaawaan ah maalintaas; waxay baratay in ayna wanaagsaneyn in la khayaamo saaxiib, iyo in haddii aad ku sameysid qof khalad uu ka dib qofkaasu kugu sameyn karo khalad. Xaqiiqdii waa cashir ah ninba waxuu geysto ayaa loo gudaa.